Burma National News - Kyaw Nyunt - Political Vocabulary
Kyaw Nyunt - Political Vocabulary	နိူင်ငံရေးဝေါဟာရ
၁။ မြန်မာဘာသာ က။ ဝေါဟာရ ခ။ စကားပုံ ဂ။ ဝါကျ
၂။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ A. English-Burmese Dictionary B. Sentences
၂ ယောက် ၃ ဖွဲ့ တော်နှစ်တော် ရှိရင် အလုပ်လုပ်လို့ရပြီ - အဖါးတော်မလား၊ အမျိုးတော်မလား။ စစ်တပ်မှာ လုံ ၄ လုံဆိုတာ ရှိပါတယ်။ သတင်း၊ အဆင်း၊ အသံ၊ အနံ့ ဆိုတဲ့ လုံခြုံရေး သတိရှိရမယ်။ (အိမ့်သံစဉ်၊ ဧရာဝတီ၊ ၁၁ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) ၄ ဦးဂိုဏ်း - တင်အောင်မြင့်ဦး၊ ခင်အောင်မြင့်၊ ကျော်ဆန်း၊ လှထွန်း (“ခေါင်းမာသူ” များစာရင်းတွင် ဒုသမတ တင်အောင်မြင့်ဦး၊ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီ ခေါင်းဆောင် အောင်သောင်းနှင့် ဌေးဦး၊ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ကျော်ဆန်း၊ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဇော်မင်းတို့ ထိပ်ဆုံးတွင် နေရာယူထာကြသည်။) တင်အောင်မြင့်ဦး၊ အောင်သောင်း၊ မြင့်လှိုင်၊ ကျော်ဆန်း၊ လှထွန်း၊ ဇော်မင်း၊ ဒီလို ပုဂ္ဂိုလ်တွေက တချိန်က အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ် နဲ့ ပတ်ပတ်စက်စက် ပြောခဲ့တဲ့လူတွေပါ။ ဒီလိုလူမျိုးတွေက သူတို့ရဲ့  အကျိုးစီးပွားအတွက် နေနေရတဲ့အခါကြတော့ သူတို့သည် အမာဂိုဏ်းထဲမှာပဲ ပါနေတယ်လို့ ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (အောင်လင်းထွဋ်၊ ဗွီအိုအေ၊ ၁၇ မေ ၂၀၀၂) ၅ ကွန်မင့်အမျိုးအစား။ ပျော်တော်ဆက်သာဂိရဲ့ တလွဲတချော် ကွန်မင့်အမျိုးအစားများမှာ (၁) ဘုဂလန့်ကွန်မင့်သမား၊ (၂) အဆိုးမြင်ကွန်မင့်သမား၊ (၃) လမ်းချော်ကွန်မင့်သမား၊ (၄) ဖျာခင်းတဲ့ကွန်မင့်သမား၊ (၅) ၀ါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းကွန်မင့်သမား။ ၈ ပူးလုပ်စား ၉ ဂဏန်းသမားအစိုးရ ၃၇ နတ်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားသော “ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူ” နှင့် “ခေါင်းမာသူ” ဝန်ကြီးအဖွဲ့ ၈၈၈၈ စီနီယာကြီးတွေ ကျားကုတ်ကျားခဲ ကိုးကိုးကျွန်းပြန် သူရဲကောင်း ကိုယ့်ကံကြမ္မာ ကိုယ်ဖန်တီး ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲ ကိုယ်ကိုတိုင်ဝင်ကြဲရတော့မှာ ကျီးကန်းတအုပ် ကွက်ကျော်မြင် ကံကြမ္မာအလှည့်အပြောင်း ကွက်ကျော်ရိုက် ကျောက်ခဲကိုဆီထွက်အောင်ကြိတ် ကချင်တိုင်းရင်းသားအဆိုတော်တွေကို သီချင်းဆိုခိုင်းပြီးဝါဒဖြန့် ကြက်ခရိုနီဟင်းလေးစားချင်လို့ ကိုယ်စီကိုယ်ငှဒဏ်ရာဗရပွ ကြောင်စုန်းကြီးများ ကြေးစည်ရိုက် ကုန်းဆင်း ဘီးတပ်ပေး ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစား ကွန်ရက်အသိုင်းအဝိုင်း ကျေးဇူးမတင်တင်အောင်လုပ် ကိုယ့်တပ်ကိုယ် ပြန်နင်း ကျောင်းတော်က ရန်စ ကန်တော့ပါရဲ့ဗျာ၊ ရန်ကုန်သား စောက်ကြွားတဲ့ ကျင့်ထုံးကြီး ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်း ကုန်းထ ရုန်းကြွ ကျနော်ကဧည့်သည် သူတို့က အိမ်ရှင်လိုလို ကိုယ့်နာမည် ကိုယ်သတ်တဲ့ဘ၀ရောက် ကမ်းနားသစ်ပင် ကြပ်ပေးတယ် ကြံ့ဖွတ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ ကွိုင်ဘဲ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ္ဘာ့နိူင်ငံရေးဇာတ်ခုံ ကမ္ဘာမှာပြစား ကမ္ဘာမှာ မရှိတဲ့ပြဋ္ဌာန်းချက် ကမ္ဘာ့လူဆိုးကြီးများ ကမ္ဘာလဆန်းတရက်နေ့ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာ အမည်းစက်ကြီး စွန်းထင်း ကီးမကိုက် ကိုယ့်မင်းကိုယ့်ချင်း ကိုယ့်မြေ ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်ဒေသ ကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာ ကျမတို့ဟာအချင်းချင်းတွေဘဲ ကာမဖေါက်ပြန်သောင်းကျန်းမှုအရှုပ်တော်ပုံ ကူမယ့်လူလည်းမရှိ ကယ်မယ့်လူလည်းမရှိ ကြိမ်မီးအုံး ကောက်ရိုးခြေထောက် မြက်ခြေထောက် ကြားရ နားဝ မသက်သာ ကြောင်ရိုက်မနာ ကလိမ်ကကျစ် ကလိမ်ကကျစ်ဉာဏ်နဲ့ ကလိမ်စေ့ ငြမ်းဆင် ကန့်လန့်ကာနောက်ကကြိုးများ ကိုယ့်လူကိုယ်ပြန်တား ကိုယ့်လူကိုယ်မြောက်ထိုးပင့်ကော်လုပ် ကိုယ့်လမ်းကိုယ်လျှောက် ၊ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် ကောင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးတွေ ကုလာထိုင်လုပွဲ ကလောင်ဖါး ကလဖန်ထိုးတဲ့ လူလည် ကျည်လွတ်မြေမှာ သောင်းကျန်း ကလောင်ရမ်းကား ကလောင်သွား ကိုယ်လိုသလို အဓိပ္ပါယ်ကောက် ကျောသပ်နှစ်သိမ့် ကျောသပ်ပြီး ဆုလာဘ်ပေးသနား ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်မသိ ကျုံးသွင်းရေးစီမံကိန်း ကျောင်းသားသမိုင်း ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကိုယ့်အားကိုယ် မကိုး၊ ကိုယ့်စိတ်ကိုယ် မပိုင် ကုန်အောင်တောင်း ခေါင်းကို ဆင်နင်း ခိုးကြောင်း ဝှက်ကြောင်း ချွတ်ခြုံကျ ခြေချင်းလိမ် ချိန်ခွင်လျှာ မညီမျှမှု ချိန်ခွင်လျှာသစ် ခေါင်းငုံ့ခံ ခေါင်းငုံ့ဝင်ခွက်စောင်းခုတ် ခါးစည်းခံနေရသောလူထု ခေါင်းစားတယ် ခြစားအကျင့်ပျက်မှု ခေါင်းဆောင်ငတ်နေတဲ့ မြန်မာပြည် ခေတ်ဆိုးစနစ်ဆိုး ခေါင်းဆောင်တွေကို ရှေ့ကနေထိုးကျွေးပြီး ဖြေရှင်း ခွေးဇာတ်ခင်း ခွတုတ် ချွန်တွန်း ခါတော်မှီအနားပြာ ချော့တလှည့်၊ ခြောက်တလှည့် ချီးထုပ် (စတင်ပြောဆိုသုံးစွဲလာသူ နေဝင်းအောင်၊ အေဘီ) ချောင်းထဲမြောင်းထဲရောက် ချောင်ထိုးလိုထိုး ခေါင်းထောင်သွားတယ် ခွပ်ဒေါင်း ခွပ်ဒေါင်းသတိ အမြဲရှိ ခေတ်နဲ့စနစ်ကို ထင်ဟပ်တဲ့သရော်လှောင်ပြောင်ချက် ခြေပုန်းခုတ် ခွက်ပုန်းခုတ် ခေတ် ပြောင်းချိန် လိုလို ဘာလိုလို ခေတ်ပျက်ဂျာနယ်လစ် ခွေးပါးစပ်က နတ်စကားထွက် ချာပါတီ ခေတ်ပျက်သူဌေး ခွေးဖြစ်တဲ့ကိန်းဆိုက် ခွင့်မလွှတ်တော့ဘဲ ဖြုတ် ခေါ်ယူသတိပေး ခေါင်းရှောင် ခေါက်ရိုးကျိုး။ ခေါက်ရိုကျိုးနေသော အကျင့်ဆိုးများ ခေတ်ရေစီးကြောင်း။ ရေစီးကြောင်း ခရိုနီ။ ခရိုနီဟောင်း ခရိုနီသစ်။ ခေတ်ပျက်သူဌေး။ လက်ဝါးကြီးအုပ် ကိုယ်ကျိုးရှာ ငဖားအနားပျာ (စကားလုံးတည်ထွင်သူ သင်းရီ ၊ 7Day News Journal အတွဲ (၁၁)၊ အမှတ်(၃၁)) ခရိုနီ။ ခရိုနီ စီးပွားရေး စနစ်၊ ခရိုနီ တပ်မတော်၊ ခရိုနီ အာဏာကပ်ပါး၊ စူပါခရိုနီကြီးတွေ ခေါ်ရင်လာ၊ ခိုင်းတာလုပ်၊ ခံမပြောနဲ့။ ထားရာနေ စေရာသွား ခေါ်ရင်လာ ခိုင်းတာလုပ် ခံမပြောနဲ့။ ကျွေးတာစား၊ ခိုင်းတာလုပ်၊ ပေးတာယူ၊ ပြောတာနားထောင်။ ခရုသင်းဆင်များရှင် ခွေးလောက်မှအသိဥာဏ်မရှိ ခလရ။ ခံလိုက်ရ ခေါင်းလျှိုဝင် ချိုလိမ်အဟောင်းကြီး ခေသူမဟုတ် ခါးသီးသည့်အတွေ့အကြုံ။ ခါးသီးလှသည့် အတွေ့အကြုံ ချက်အောက်ထိုးတဲ့နည်း ဂိုဏ်းဃန ဂငယ်ကွေ့ဂဏန်းတွေ ပေါင်းပွပွနဲ့ မောင်းထု ဂျိုထောင်တဲ့နွား ဂျပိုးကိုလိပ်ဖြစ်အောင်ပြော ဂမ္ဘီရပျားရည် ဂုတ်သွေးစုတ်နေတဲ့ ဦးပိုင်လီမိတက် ငကြောင် ငါးကြင်းသားကို မြေခွေးက အပိုင်စီးခံလိုက်ရခြင်း ငါးခူပြုံးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးသဘော ငြိမ်းချမ်းရေးပွဲစား ငှက်ဆိုးထိုးသံ ငွေတွင်းကြီး ငါတော့ မယုံဘူးငါတော်လှန်ရေးလုပ်တယ် ငါတို့သမိုင်းကိုငါတို့ထဲကပဲပြန်သတ် ငါတို့အရိုး စည်းရိုးထိုး ငတ်နေတဲ့ပြည်သူတွေကို အကြောင်းပြ ငပြူးက ငပြဲလုပ် ငါးပိတော ဖုန်တော ငါပြောတလိုလုပ်၊ ငါလုပ်တလိုမလုပ်နဲ့ ငါးပါးမှောက် ငြင်းပယ်ရန် စကားလုံး ရွေးချယ် ငါမကောင်း ဖုံးထား၊ မိဖုရား မကောင်း ဖုံးထား ငမျောက် ငခြောက် ငါးမြွေထိုးခေါင်း ပိသာလေးနဲ့ထု ငရဲကျပြီ ငရဲတိုင်းပြည် ငရဲပန်းကိုနတ်ပန်းထင် ငရဲဗုံး ဒီမိုကရေစီ ငရဲဘုံကို ဗီဇာမယူပဲ ရောက်မှာ ငရဲမှာ သစ်ငုတ်ဖြစ်မဲ့ စစ်အုပ်စု ငရဲသားတွေက အဘခေါ်ရလောက်အောင် နှိပ်စက်ညှဉ်းပမ်း သတ်ဖြတ် ငါးသလောက် ခရိုနီချက် ငသလောက်လမ်းစဉ် - ငါးသလောက်ကို ရိုးရိုးချက်စားလျှင် အရိုးစူးကာ၊ ပေါင်းစားပါက အရိုးပါ ဝါးစား၍ရသည် စစ်ကျွန် စက္ကူကျား စိတ်ကူးကနေ ပေါ်ထွက်လာတဲ့ရလဒ် စစ်ကျွန်စနစ်အောက်မှ စစ်ဓားပြလမ်းစဉ် စကားစပ်မိလို့ ပြောရဦးမယ် စကားထောက် စက္ကူပေါ်ကစာ စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော် စစ်ကျွန်ဘ၀ စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းယူ စောင့်ကြည့်ရဦးမည် စိန်ကြည်ရယ် လင်ယူပက်စက်သည် - ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင် ဂျပန်ကြီးလည်းပြန်ရော စိန်ကြည်ဗိုက်တလုံးနှင့်ကျန်ခဲ့သည်။ စကားလမ်းကြောင်းပြောင်းသည့်အနေဖြင့် စကားလမ်းချော် စိတ်ကြီးဝင်တဲ့ အတ္တတွေ စကားဝဲလာတယ် စကားဟဟတောင် မပြောရဲ စဉ်းစားချင့်ချိန်နိူင်စွမ်း စဉ်းစားပေါ့ဗျာ စားစရာဂွင်မရှိ စူးစူးရှရှပြော စိတ်ဆင်းရဲရတာ နေ့တိုင်းပါ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ် စာတမ်း။ ရွှေဂုံတိုင်ကြေညာစာတမ်း စေတနာ့ဝန်ထမ်း နွားကျောင်းသား စင်တင်ပန်းကုံးအဆိုတော် စတင်လှုံ့ဆော်တဲ့ မီးပွားတခု စစ်တပ်လွှမ်းမိုး စစ်တပ်လက်ဝါးကြီးအုပ် စစ်တပ်အတွင်း ကြီးနိူင်ငယ်ညှင်းမှု စစ်တပ်အားဘုရားစင်တင်ကိုးကွယ် စိတ်ထင်သလို ဖမ်းဆီးထောင်ချ စိတ်ဒဏ်ရာတခုထပ်ဖြစ် စိတ်ဒဏ်ရာ အနာတရ စနစ်ကိုက မှားနေတယ် စိတ်နှစ်ခွ စနစ်ဆိုးအောက်မှာ ဓါးမိုးခံထားရတဲ့ ဘဝ စိတ်နဲ့တောင် မပြစ်မှား စာနဲ့ ရေးမထားတဲ့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း စားပေါက် စုန်းပြူး စာပေ ကင်ပေတိုင် စင်ပေါ်ကလူဘဲ စားသွားမယ် စောက်ပိုတွေ စားပွဲတင် ဘော်လီဘော စစ်ပြေးဒုက္ခသည် စပယ်ပန်းကုံးစွပ် စည်ပင်ရဲတွေ ဓါးပြတိုက် စီးပွားရေး ဓါးပြ စပျစ်သီးချဉ်နေတဲ့ မြေခွေးပဲ စိတ်ဖိစီးမွန်းကြပ် စါးဖါး ညီညွတ်ရေး စစ်ဖြစ်တာ မကောင်းဘူး စစ်ဗိုလ်အလိုတော်ရိ စစ်ဘိနပ်အောက်။ စစ်ဖိနပ်အောက်မှာစုန်းစုန်းမြှပ်နေသောဆင်းရဲသားတွေ စစ်ဘီလူး သွေးဆာ စမူဆာ၊ သုံးဘက်ချွန် စစ်မြေပြင်မြင်ကွင်း စိတ်မရှိပါနှင့် စက်ရုပ်ကြီးလိုပြော စိုးရိမ်တုန်လှုပ် စလုံးနဲ့ပေါက် စစ်လည်းမတိုက် နိူင်ငံရေးလည်းအကြံအိုက် စိတ်ဝင်စားစရာပါ စာဝိုင်းပေ၀ိုင်း စကားဝိုင်း စိမ့်ဝင် ပူးသပ်ရေး ဗျူဟာ စစ်သားဆိုတာ ရန်သူရှိမှ စစ်သားရဲ့  ဂုဏ်သိက္ခာရှိ စစ်သားဆို သိပ်မုန်းကြတာ စဟစ်တဲ့နေ့ စိတ်အချဉ်ပေါက် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို လက်ရက်ခေါ် စစ်အစိုးရဘက်တော်သား စစ်အစိုးရရဲ့ပါရမီဖြည့်ဖက် စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက် စစ်အာဏာရှင်။ စစ်အာဏာရှင်အရိပ်အောက်မှာ ရှိနေဆဲ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ နှပ်ကြောင်း ဆင်ကြံကြံ ဆေးကုန် ဆေးမစုံ နေကြတဲ့ ဆေးရုံ ဆွမ်းကြီးလောင်း ဆန့်ကျင်သူမှန်သမျှကို လက်ဦးမှုယူကာ အကွက်ကျကျဖြိုခွင်း ဆင်ခြင်တုံအသိတရား ဆက်ဆံရေး မပြေလည် ဆက်ဆံရေးမောက်မာ ဆက်ဆံရေးလမ်းကြောင်း ဆင်ဆာလုပ် သင်းကွပ်ပစ်နေခြင်း ဆွေးနွေးငြင်းခုံ ဆုံးမစကားလိုလို သြဝါဒစကားလိုလို ဆိုရှယ်ညစ်တွေ ဆင်းရဲတွင်းနက် ဆောင်ရွက်မှုညံ့ဖျင်းလို့ အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ဆုံးရှုံး ဆင်းရဲမွဲတေမှု ဆေးရုံမှာ တုံးလုံးပက်လက် ဆိုရင် မှားမယ် မထင် ဆောင်ရန် ရှောင်ရန် ဆရာရေ သတိထားနော် ဆိတ်လစေ့ ဆက်လက်ဦးဆောင်ရန် ဆီလို အပေါက်ရှာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်း ဇာတ်ညွှန်းက ပါလာပြီးသားပါ ဇာတ်တူသားစား ဇာတ်ထဲမှာတော့ သူဌေးသား ဇောင်းပေးပြီးပြော ဦးကျိုးပြီးပြားဆင်းသွား ဦးနှောက်မုန်တိုင်းဆင်တယ် ဦးနှောက်ဝဲစွဲ ဥပဒေဆွဲဆန့် ဥပဒေတခြား လုပ်တာတခြားဥပဒေမျက်လှည့်ပွဲ ဥုံဖွပျောက်စေ ညှင်းပန်းနှိပ်စက် ညစ်ပတ်လွန်းတာများ ပေါ်လွင် ညာမြဲညာနေတုန်း ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ပြန် ဌေးဦး သိပုံမပေါ်ပါ တကောင်ကျွေးပြီး ဘုရင်မ ကိုစား တကြော့ပြန် အတွင်းတိုက်ပွဲ တွေးကြည့်ရုံနဲ့ ပြေးကြည့်စရာ မလို တံခါးကျဉ်းကျဉ်း ဖွင့်ထား တချိန်ကြရင် တစ်ခုခုတော့ မှားနေပြီ။ တခုခုတော့ လွဲချော်နေပြီ တခုခုဖြစ်ရင် လက်ပါချင် တံခါးတွေ အကုန်ဖွင့် တံခါးမရှိ ဓားမရှိ ၀င်ထွက် တန်းခန့်လိုက်တယ် တစ်ခိုင်လုံးရွှေ တခါလာလဲ ဒါကြီးဘဲ တောင်ငေးပွဲ - လက်ပတောင်းတောင်၊ မုံရွာ (မောင်လူရေး၊ မိုးမခ၊ ၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) တစခါလာလည်း မဲပြာပုဆိုး ခေါက်ရိုးကျိုးဥပဒေပညာရှင်များ တောက်ခေါက်သံ။ တောက်ခေါက်သံတစ်ချက်ထွက်လာတယ် တိုက်ငြိမ်းပေါ်လစီ - တောင်တိုက် မြောက်ငြိမ်း၊ မြောက်တိုက် တောင်ငြိမ်း။ ၂၀၁၂ ဖြစ်စဉ် - ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်သည် ကချင်ကိုတိုက် ၊ ဗိုလ်သိန်းစိန်သည် ကရင်နှင့်ငြိမ်း တံဆိပ်ကပ်တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အသံကို နားထောင်ကြည့်လိုက်စမ်း တံတွေးခွက်ထဲ ပက်လက်မျော တန်းတူ ပုခုံးချင်း ယှဉ် တိုတို ပြောရရင် ဒီလိုဗျာ တိုက်တွန်း မေတ္တာရပ်ခံ တတိယအုပ်စု - ထောက်လှန်ရေးမှ ပျိုးထောင်မွေးထုတ်ပေးလိုက်သောပုဂ္ဂိုလ်များ တောထုတ် မောင်းထုတ် တနေ့ တထည် တိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ် တိုင်းပြည်ကနုနု မုန်တိုင်းကထန်ထန် တိုင်းပြည်နာတယ်။ တိုင်းပြည်နာနေပြီ တိုင်းပြည်ဖဲ့ထုတ် တောင်ပြောမြောက်ပြော တိုက်ပုံယူနီဖောင်း တပည့်လက်သစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တိုင်းပြည်၏ အချုပ်အခြာအာဏာ ( ၃ ) ရပ်ဖြစ်သော ဥပဒေပြုမှုအာဏာ ၊ တရားစီရင်မှုအာဏာ ၊ အုပ်ချုပ်မှုအာဏာ တောင်မကျော်ငှက် တစ်မျိုးကြီးပါလား တပ်မတော်နဲ့ ၃၄ ဖြစ်သွားမှာ ကြောက်ရ တစ်မြေတည်းနေ၊ တစ်ရေတည်းသောက်၊ တစ်အူတုံဆင်း ညီရင်းအစ်ကို တိုင်းမြို့နယ်ကျေးရွာ အာဏာပိုင် တို့မီးရှို့မီး တမတ်သား စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ် တယောက်တည်းကိုသာ ဖဲ့ထုတ် တရုတ်ကို ဆွဲစား တရုတ်ကျွေးမင်း သန်းရွှေ တရစ်ချင်းကျပ်နေတာ တရားခံရှာ။ တရားခံ အငှားရှာ တရက်တာ ညီညွတ်ရေး တွက်ရတာပေါ့ တရာတန်းဝင် တရားမျှတတဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် တရားသူကြီးတွေ အာဂတိလိုက်စား တလွဲ ဆံပင်ကောင်း တက်လမ်း ဆုတ်လမ်း တော်လှန်ပုန်ကန် တော်လှန်ရေးကို လက်ဆင့်ကမ်း တော်လှန်ရေး မျိုးစေ့ တော်လှန်ရေးရဲ့ ဝိညာဉ်တွေ တော်လှန်ရေးသမားတွေ ဝေဝါး တာဝန်ဝတ္တရားအရတသက်တာမမေ့ပျောက်နိူင်တော့သည့်ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များ တသွေး၊ တသံ၊ တမိန့် တသဘောတည်း ဆောင်ရွက်၍ မရအောင် အခြေအနေများက ဖန်တီးထား တသက်လုံးဝေးခဲ့ တအုံနွေးနွေး တွန်းအားပေး ထိုးကျွေး။ ထိုးကျွေးလိုက်သော စစ်သားများ ထောင်ကျစာရေးဆရာများ ထားခဲ့တဲ့လိုင်းအတိုင်း ထိုင်ခုံပျောက် ထောက်ခံမယ့်လွှတ်တော်အမတ် ထုံးစံအတိုင်း အစိုးရဟာ အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲ ထောင်ဆူပူ ထုတ်/တင်။ တင်/ထုတ် - ပုံနှိပ်မီဒီယာများနှင့် ပတ်သက်၍ အုပ်စုနှစ်စု ခွဲခြားထားပြီး အုပ်စု (၁) ‘ထုတ်/တင်’ အမျိုးအစားတွင် ပညာရေး၊ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံတကာရေးရာတို့အပြင် အနုပညာ သုတရသ၊ ကျန်းမာရေး၊ အားကစား၊ ကလေး၊ နည်းပညာ တို့ ပါဝင်ကာ အုပ်စု (၂) ဖြစ်သည့် ‘တင်/ထုတ်’ အမျိုးအစားတွင် သတင်း၊ ဘာသာရေး၊ မူခင်းတို့ ကို ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ စာပေစိစစ်ရေးဌာနက စိစစ်ပြီးမှ ထုတ်ဝေခွင့် ပြုသည်။ ထောင်တန်တဲ့စကား ထွန်တုံးတိုက်ပွဲ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင် ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ ထိုးထွင်းမြင် ထောင်နန်းစံ ထွက်ပေါက်ကိုလမ်းညွှန် ထိပ်ပြောင် အစိုးရ ထုံးဖြူသုတ် လုပ်ရပ်များ ထိပ်မခေါက်ပါနဲ့ ထင်မိထင်ရာတွေ လျှောက်လုပ် ထမိန်နားခိုကပ်စား ထင်ရာစိုင်း ထောက်လှန်ရေးအခေါ်အဝေါ် - အထောက်တော်၊ ထိုးဖေါက်အထောက်တော်၊ အသွင်ယူ ထင်သာပဲ ထင်သာမြင်သာ ဒို့ကံနဲ့ ဒို့ပဲ ရှိပါစေ ဒါကမေးစရာဖြစ်လာတယ် ဒေါက်ခြာတွေ ဒုက္ခတွေကိုကျောပိုးအိတ်ထဲထည့် ဒဏ်ခတ် ပိတ်ဆို့မှု ဒါတွေက အစိုးရအသုံးမကျလို့ ဒါတွေမသိပါဘူး ဒူးထောက်ချစ်ကြည်ရေး ဒီနေ့ စင်ပေါ်ရောက်၊ နောက်နေ့ ချေးတွင်းထဲ ရောက် ဒီနေ့တော့ ဒီလောက်ပဲကွာ ဒီနေ့လည်း ပုပ်တယ် ဒီပဲယင်းလုပ်ကြံမှုကြီး ဒီပဲယင်းဝိဥာဉ်များ၏ ငိုရှိုက်သံ ဒီဘက်ကို လှည့်မကြည့်ဘူး ဒီမိုကရေစီကွက်ကြားမိုး ရွာသွန်းမှု ဒီမိုကရေစီနည်းကျဖွဲ့ စည်းပြီးကြောင်း ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံရေး ကျင့်စဉ် ဒီမိုကရေစီမကျ တဲ့အဖွဲ့အစည်း ဒီမိုကရေစီ ယဉ်ကျေးမှု ဒီမိုကရေစီရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်ဓါတ် ဒီမိုကရေစီ၊ ဟိုမိုကရေစီ။ ဒီပါတီ၊ ဟိုပါတီ။ ငါမိုကရေစီ။ ဒီမိုကရေစီဟီးရိုးလိုလို၊ ဇီးရိုးလိုလို၊ ထိုထိုဤဤသောပုဂ္ဂိုလ်ယုတ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်ဆုတ်များစွာ ဒီမိုကရေစီအရေခြုံ ဒီမိုကရေစီအရေးတော်ပုံတပ်သား ဒီမိုယောင်ယောင်၊ ဆရာယောင်ယောင် ဒီမိုလုပ်စား သူတောင်းစား ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောကျီး ဒီလို စုတ်ပဲ့တဲ့ စိတ်ဓါတ် ဒီလို တွေးကြည့်ပါ ဒီလိုဗျ ဒေသခံ ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒ ဒိတ်အောက် ဒို့အရေး ဓါးဓါးချင်း၊ ထုတ်ထုတ်ချင်း ဓာတ်ပုံပြစား ဓမ္မဓိဌာန် ကျကျ အရှိကိုအရှိအတိုင်း ဓါးမိုးအုပ်ချုပ် နောက်ကျည် နောက်ကြောင်းကို တူးဆွဖော်ထုတ် နောက်ကွယ်က အကျည်းတန်ဖြစ်ရပ် နောက်ကျတဲ့ ခြေထောက် သစ္စာဖောက် နောက်ကြောဒါးထိုး နိူင်/ကျဉ်းပွဲစား နောက်ကွယ်မှ ထိန်းကျောင်း အကြံပေး နှိုက်ချွတ်မေးမြန်း နာဂစ်ဖွဲ့စည်းပုံ နိုင်ငံတော်။ ထောင်စကားတွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို “နိုင်ငံတော်” ဟု ပြော၏။ (မျိုးမြင့်ချို၊ ဖဘ၊ ၂၆ မေ ၂၀၁၂) နိူင်ငံတကာဖိအား နိူင်ငံတကာအသိုင်းဝိုင်း နိူင်ငံတော် သူခိုးဓားပြကြီး နိူင်ငံတော်အာဏာကို ထိန်းကျောင်း နိူင်ငံရေးကွက်ကျော်မြင် နိူင်ငံရေးကိုယ်ခံအား နိူင်ငံရေးကစားကွက်။ နိူင်ငံတကာအစိုးရ၏ နိုင်ငံရေးကစားကွက် နိူင်ငံရေးကစားကွင်း နိူင်ငံရေးကွက်စိပ်ဆရာ နိူင်ငံရေးခံယူချက် နိူင်ငံရေးဂုဏ်သိက္ခာ နိူင်ငံရေးဇာတ်ကောင် နိူင်ငံရေးဇာတ်ခုံ နိူင်ငံရေးဇာတ် ခေါင်းကွဲအံ့မူးမူးအခြေ နိူင်ငံရေးတွင် နယ်ကျွံခြယ်လှယ်နေသည့် စစ်တပ် နိူင်ငံရေးနိုးကြားမှု နိူင်ငံရေးပိုးက ငြိမ်ငြိမ် မနေ နိူင်ငံရေးပွဲစား နိူင်ငံရေးပါးနပ်မှူ နိူင်ငံရေးပယောဂ နိူင်ငံရေးပလ္လင် နိူင်ငံရေးဖျံကျ နိူင်ငံရေးဖောက်ခွဲ နိူင်ငံရေးဖျာခင်း နိူင်ငံရေးမုန်တိုင်း။ နိူင်ငံရေး မိုးကြိုးမုန်တိုင်း နိူင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှု နိူင်ငံရေးရေချိန် နိူင်ငံရေးရပ်တည်ချက် နိူင်ငံရေးရောင်ပြန်ဟပ်မှု နိူင်ငံရေးရည်မှန်းချက်အမျိုးစုံ နိူင်ငံရေးရာသီဥတု အပြောင်းအလဲ နိူင်ငံရေးလုပ်ကြံ နိူင်ငံရေးလာမရှုတ်နဲ့ စီးပွားရေးသာလာလုပ် နိူင်ငံရေးသိက္ခာကျ နိူင်ငံရေးသွေးဆုံး နိူင်ငံရေးသုတေသီ နိူင်ငံရေးသပွတ်အူ နိူင်ငံရေးသရုပ်ဖေါ် နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသား။ နိူင်/ကျဉ်း။ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးချွင်းချက်မရှိ...လွှတ် နိူင်ငံရေးအကွေ့အကောက်လမ်းကြောင်း နိူင်ငံရေးအကျပ်အတည်း နိူင်ငံရေးအခင်းအကျင်း။ လက်ရှိ မြန်မာ့နိူင်ငံရေး အခင်းအကျင်း နိူင်ငံရေးအာဏာလုပွဲ နိူင်ငံရေးအတိတ်နိမိတ် နိူင်ငံရေးအမြတ်ထုတ် နိူင်ငံရေးအရှိန် နိူင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေး အဖြေရှာ နိူင်ငံရေးအရ အရေးပါ နိူင်ငံရေးအင်အားစုတွေအကြားမှာ အက်ကြောင်းတွေ ထ နှာစေး။ နှာစေးနေတယ် နေ့စံ ညခံ နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန် နေတိုး - အလုပ်မဖြစ် အရွေ့ မရှိပဲ အပြောသက်သက်သာရှိနေသည့် No Action Talk Only (N.A.T.O.) နှက်တာတော့ နှက်တော့မှာ နာတာရှည် ပြဿနာ နည်းနည်းစိမ်းသွားတယ် နင်းပြား နေပြည်တော်။ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော်၊ ကြက်ပြေးအမေရိကန်ပြေးနေပြည်တော် နေပြည်တော် အကယ်ဒမီရှော့ နေပူထဲမိုးကြိုးပစ် နောက်ပိုင်းရှင်းပါတယ် နည်းပရိယာယ် နောက်ပြန်လှည့်ဖို့ ဘေးတီးပေး နှစ်ဖက်ချွန် နှစ်ဖက်စလုံးကဆဲ နာမည်ကောင်းယူ နောက်မြီးဆွဲစကား နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြား နေ့မြင်ညပျောက် နံမည်ရင်းကိုမပြောရဲဘဲနဲ့ ပြောနေတဲ့လူ နာမည်ရောင်းစား နေ့ရွှေ့ညရွှေ့ အချိန်ဆွဲ နံရံထူကြီးထဲက နားရင်းရိုက်ခံရမယ့် လုပ်ပေါက် နှမ်းဝင်ဖြူး ပြကွက်က ဖန်တရာတေ ပေးကားပေး၏မရ ပြည်ချစ်။ ပြည်ပြေး ပွားချင်စိတ်က များသထက်များ ပြခန်းထဲမှာပဲရှိတာ ပခုံးပြောင်းယူ ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်မှု ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ၊ ဝါဒစွဲ ၊ ဂိုဏ်းဂဏစွဲ ၊ အုပ်စုစွဲ ၊လူမျိုးစွဲ ၊ ဒေသစွဲ ၊ ဘာသာစွဲ စသော အစွဲအသီးသီး ပျူငှာစွာဖင်ပေးပေါင်း ပိစိကွေးအခွင့်အရေးကလေးတွေ ပါးစပ်ဆော့ ပင်စင်ပေးခံရ ပုဆိန်ရိုး ပုဇွန်ခေါင်း ပညာပေးဖို့ လိုနေပြီ ပညာရေးခါးပြတ် ပညာရှင်တွေ ဆန်းစစ်ထားကြတာကလဲ ဖြစ်နိူင်ခြေရှိတဲ့ အမှန်တရားတရပ် ပစ်တုိုင်းထောင် ပါတီနိူင်ငံရေး ပေါ်တင် ပြဿနာရှာ ပါတီလူသာပထမ ပါတီအတွင်း ဖြုတ်ထုတ်ရှင်း ပြည်ထောင်စုပျိုကွဲမှာစိုးလို့ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပြည်သူ့အာဏာကို အဓမ္မသိမ်းခဲ့တဲ့ စစ်အစိုးရ ပဲ့ထွက်ပြီးရင်း ပဲ့ထွက် ပထမ အသိနှင့် ဒုတိယ အမြင် ပထ၀ီနိုင်ငံရေး ပုံပြောကောင်းတဲ့ပါးစပ် ပြင်ပတာဝန်ပေးပြီး ပထုတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲ ပြုပြင်ရေးလမ်းကြောင်း ပေါ်ပင်လိုက် ပါးပါးလေးနဲ့ပွတ်တာ ပါးပါးလေးဘဲ ပွဲဖျက် ပယ်ဖျက်ပြင်ဆင် ပစ်မှတ်။ ပစ်မှတ်အောင်သောင်း ပတ်မကြီးထိုးဖောက် ပြန်မပြော နားမထောင် ပေါ်မလာဇာတ်ကားရိုက် ပြောရရင်တော့ ပြုလုပ်ခဲ့ရသော မကောင်းမှု အကုသိုလ်များကို သေခါနီးမှ သံဝေဂတရားရ ပုလင်းတူဗူးဆို့ ပေါက်လွှတ်ပဲစား ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ရန် အစီအစဉ်မရှိကြောင်း ပြေးလွှား ပုန်းရှောင် ပွင့်လင်းမြင်သာ ပုလိပ်ရှေ့ကထွက်ဆိုချက်ဟာ တရားရုံးမှာ တရားမဝင် ပြန်လည်သင့်မြတ် ပါဝါကစားပွဲ ပူးသတ် ပြည်သူ့ကျိန်စာ မိနေသော ယူနီဖောင်းဝတ်များ ပြည်သူကြားမှပေါက်ဖွားလာသည့် ပြည်သူ့သားကောင်းရတနာ ပြည်သူ့ချဉ်ဖတ် ပြာသွားတယ် ပြည်သူတွေ မျှော်လင့်တောင့်တတဲ့အတိုင်း ပြသနာကောင် ပြဿနာကို ပုံကြီးချဲ့ ပြဿနာကိုမီးခွက်ထွန်းရှာ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင် ပွတ်သဘင် ပတ်သက်မိ ပြည်သူလူထုမှာ ကုန်းကောက်စရာ မကျန် ပြည်သူသည်သာအမိ၊ ပြည်သူသည်သာအဖ ပြည်သူ့အသံ။ ပြည်သူ့ဆန္ဒ ဖား။ ကပ်ဖားရပ်ဖား၊ စားဖား။ ဖော်လံဖား၊ ဖားခံသူ၊ ဖော်လံဖား။ ဖားသူ၊ အိုင်ထဲကဖား ဖြတ် ၄ ဖြတ် - လူထုဆက်ဆံမူကင်းကွာရေး၊ သတင်းဆက်သွယ်မူဖြတ်တောက်ရေး၊ ငွေကြေးဘဏ္ဍာချွတ်ခြုံကျရေးနှင့် စားနပ်ရိက္ခာပြတ်တောက်ရေး ဖုတ်ကောင်ကြီးကို အသက်သွင်း ဖင်ကြားခဲခုထိုင် ဖဲချပ်တစ်ချပ်။ ခေါ်ဖဲ။ ပစ်ဖဲ။ ဝှက်ဖဲ။ လိုက်ဖဲ ဖိစီးတဲ့ဥပဒေ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက် ဖက်ဆစ် မြန်မာ ဖြုတ်ဦးနှောက် ဖဦးထုပ် ၃ လုံးလမ်းစဉ် - ဖြတ်ကနဲပေါ်၊ ဖြုတ်ကနဲထ၊ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းပြုလုပ်ခြင်း ဖွတယ်။ လိုက်ဖွနေတယ်။ ဖွပြီးပြဿနာရှာ ဖန်တီးထားသော ဟန်ပြပစ္စည်းအဖြစ် မျက်တောင်လေး ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ် ဖြုတ်ထုတ်သတ် ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ် ဖာနိူင်ငံ ဖနောင့်နဲ့ ထပေါက်ချင်စရာ ဖောက်ပြန်တဲ့လူတမ်းစား ဖေ ပု ရှိန် - ဦးဘဖေ၊ ဦးပု နဲ့ ဦးထွန်းရှိန် တို့ ၀ံသာနုခေါင်းဆောင်သုံးဦး ဖဲ့ဖို့သက်သက်လုပ် ဖျက်မြင်း ဖယောင်းတိုင်ထွန်းဆန္ဒပြကြတဲ့လူထု ဖယောင်းသုတ် ဖားရှာစား ငါးရှာစား ကိုကိုလှိုင် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ အမှန်တရားတရပ် ဖိုးသုညတွေ၊ ဖိုးအကြီးတွေ ဗိုလ်ချုပ်တိုင်း သည်းခြေကြိုက်တဲ့နေရာ ဗိုလ်ချုပ်နောက်ကွယ်မှ ဝံပုလွေများ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ၏ဇနီး မှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၏ဇနီးကို ခေါ်ယူ၍ ပါးရိုက်သတိပေး ဗိုင်းဒါမ လဲ့လဲ့ဝင်းဆွေ (ကြံ့ ဖွတ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်) ဗမာကြီးစိုးတဲ့အစိုးရ ဗျာမထူး ဘုရားထူး ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ ပြဇာတ်အဖွဲ့ကြီး ဗိုက်အငှားနဲ့ ဓားထိုးခံ ဘဲကြီး ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့ချည်း ကြိတ်ဝိုင်းတွေလုပ် ဘေးကြပ်နံကြပ် ဘာကောင်မို့လို့လဲ။ မင်းကဘာကောင်မို့လဲ ဘူးတလုံးဆောင်ပေါ်လစီ - မသိ၊ မကြား၊ မပြော ဘက်ထရီလည်းမဝယ်နိူင်၊ အင်ဗာတာလည်း ငါမပိုင်၊ ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့မှိုင် ဘေးထွက်အကျိုးများ။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဘနဖူးသိုက်တူး ဘာဖြစ်လို့ ညာဖြစ်လို့ ဘောင်ဘီချွတ်ထမိန်ဝတ်စစ်အစိုးရ ဘိုးဘွားပိုင် ဘာမှ မပက်သက် မသက်ဆိုင်မှန်း မသိတာလဲ မဟုတ်၊ သိသိရက်ကြီးတွေနဲ့ ခုလိုဆက်ပြောနေကြ ဘက်မလိုက်ကြားနေ ဘီလူးစည်း လူ့ စည်း ဘီလူးဆိုင်း ဘာလားညာလား စိတ်ဝင်စားစရာ ဘီလူးမျက်နှာဖုံးချွတ် ဘ၀တူတိုင်းရင်းသား ဘဝနွံညစ် ဘ၀ပျက်။ ဘဝ ပျက်သွားရတာ ဘ၀ပျက်ခံ၊ ခန်းကြုံတွေ့ ဘ၀ပေးနိူင်ငံရေးအသိအမြင် ဘ၀င်မကျဘူး ဘ၀မမေ့ ဘ၀လုံခြုံမှု ဘဝင်လေဟပ် ဘယ်သူမှ ထောင်ထဲနေချင်သည် မဟုတ် ဘာသာရေးခုတုံးလုပ် မြင်းကို ချိုတပ်ပေး မျက်ကြောတင်း မိုးကောင်းတုန်းလုပ် မျက်ကန်းမျိုးချစ် မိုးကျရွှေကိုယ် စစ်ဗိုလ် မိုးကျရွှေကိုယ် အမတ် မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ မိတ်ကပ်လိမ်း ပန်းပန် မိတ်ကပ်ဝိုင်းလိမ်း မင်းက အမေ့သားလေ မေးခွန်းကောင်းတွေထွက်မလာ မဲခိုးကြံ့ဖွတ်အမတ် မျိုးချစ်စိတ် မျက်မှန်စိမ်း မခုတ်တတ်တဲ့ကြောင် မောင်းခတ်ပေး မီးခိုးမဆုံး မိုးမဆုံး မေးခွန်းမေးပါ မျက်ခြည်မပြတ်စောင့် ကြည့် မျက်ခုံးလှုပ် မိုးခြိမ်းသောအခါ မိုးကြိုးပါတတ် မေးခွန်းဟောင်းကြီး မျက်စိစပါးမွေးစူး မီးစိမ်းပြ။ မီးနီပြ မျက်စိမှိတ်ထောက်ခံတတ်တဲ့အကျင့် မဇ္ဈိမပဋိပဒါလမ်း မျက်စိလည်နေပြီဗျာ “မ” စ လို့ ရတာပေါ့ဗျာ မျက်စိလည် လမ်းမှား မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင် မဆင်ခြင်တတ်သူကဖြန့်၊ မဝေဖန်တတ်သူကအဟုတ်ထင် မျိုးဆက်တွေနဲ့ချီ အချိန်ယူ မဲဆန္ဒရှင် မင်းဆိုးမင်းညစ်ကို သံဃာတော်တွေက လက်မခံ မဆလ ခေါ် မြန်မာဆင်းရဲမွဲတေရေး လမ်းစဉ် မဏ္ဍပ်တိုင်တက်ပြ မြွေတွေခြေဆန့်မတူတာဘေးဖယ် တူတာတွဲလုပ် မှန်တာပြော ဟုတ်တာလုပ် မတရားမှု ကိုတွန်းလှန် မတရားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက် မတရားဖိ နှိပ်အုပ်ချုပ်သောအာဏာရှင်စံနစ်ဆိုး မိုးထဲ၊ လေထဲ၊ မုန်တိုင်းထဲမှာ ကျော်ဖြတ် မထူးဇာတ်ခင်း မီဒီယာ။ မှန်ဘီလူးမီဒီယာ၊ လော်စပီကာ မီဒီယာ မီဒီယာတွေသမတာ နည်းတောင်နည်းသေး မီဒီယာသမား မျက်နှာကြောတင်း မျက်နှာကြည့်ပြော မျက်နှာငယ် မျက်နှာပြောင်တိုက် မျက်နှာဖုံးကွာကျ မျက်နှာဖုံးစွပ် မျက်နှာလွဲခဲပစ် မပြောခဲ့ပါဘူး မြောင်းပုတ်ထဲ တွန်းချ မပျံနိူင်တဲ့ ငှက်ကလေး မြေပေါ် လူထု တိုက်ပွဲလမ်းကြောင်း မြေပုံလေး ပိန်ချိုင့် မြို့ပြ သတင်းလောက မှိုပေါက်သလို ပေါ်ပေါက် မိန့်မှာ မိမိကိုယ် မိမိယုံကြည် မင်မခြောက်ခင် တိုက်ပွဲဖြစ် မင်းမဲ့စရိုက် မူမဲ့တဲ့ နိူင်ငံရေး မင်းမဲ့တိုင်းပြည် မြန်မာ့ထုံးစံ မီးမောင်းထိုးပြ မြန်မာ့နိူင်ငံရေးတွင် ပစ်ပယ်၍မရ မြန်မာ့နိူင်ငံရေးမှ စွန့်ခွာ မြန်မာ့နည်းမြန်မာ့ဟန် မြေမနင်း အိမ်ရှေ့မင်းသား ဖိုးခင်ညွန့် မှေးမှိန်ပျောက်ကွယ် မျောက်မှိုင်မှိုင် မှားမှန်ရောထွေး လုပ်ကြံရေးသား မီးမရှိဘဲ မီးခိုးမထွက်ဘူး မြန်မာသိ၊ ကမ္ဘာသိ ထုတ်ဖေါ်ကြေညာ မယုံမရှိပါနဲ့ မွေးရပ်ဌာနေ မျက်ရည်တွေကိုသော့ခတ် မရိုးဖြောင့်တဲ့ အကျင့်ဆိုး မရှက်မကြောက်အကြိမ်ကြိမ်ပြောင်လိမ်ညာရဲ မရေမရာ နှုတ်ကတိ မရေရာ၊ မသေချာသောအကြိမ်ပေါင်းများစွာ ဆွေးနွေးပြောဆိုမှု မရရင် အရင်း၊ ရရင် အမြတ် မူလီကြပ်ထား မျှော်လင့်ချက်မဲ့တဲ့ကိစ္စ မျှော်လင့်ချက်မှားတွေပေး မုန့်လုံး စက္ကူကပ် မီးလောင်တိုက်သွင်းမလွယ်ဘူးနော် မလုပ် ၊ မရှုပ် ၊ မပြုတ် မီးလောင်သွားတဲ့မီးခိုးဗုံး မသေချာတဲ့ သဘောနဲ့ သံသယရှိတဲ့ အသုံးအနှုန်း မိသားစု ကော်မတီ မသာထမ်းစင်နဲ့ ဂုဏ်ပြု မီးသတ်ဗိုလ် မေးသင့် မေးထိုက်တဲ့ မေးခွန်း မှတ်သားလောက်တယ် မသုံးလုံးဗိုလ်ချုပ် - မရိုးသား၊ သဘောထားမကြီး၊ မရင့်ကျက် မဟုတ်က ဟုတ်ကလုပ်ကြံတိုက်ခိုက် မဟုတ်တယုတ်။ မဟုတ် တရုတ် မဟုတ်မမှန်တာလုပ်လေ့ရှိသော စစ်အစိုးရ၏ လက် ကိုင်တုတ်များ မင်းဟာ မင်းသာ ဆုံးဖြတ် မဟုတ်ရင်မခံတတ်တဲ့စိတ်ဓါတ် မိအေးနှစ်ခါနာ မူအားဖြင့် သဘောတူ မီးအရုဏ်ဆွမ်းကပ် မြေအောက်လှုပ်ရှား ယုံကြည်ချက်ကို မိမိအသက်ထက် ပိုတန်ဖိုးထား ယုံကြည်မူလွန်ကဲ ယဉ်ကျေးမှု ထိုးဖောက် ယုန်ကို မုန်လာဥဂိုဒေါင်စောင့်ခိုင်း ယ္ခုပြော နောက်ငြင်း ယူဂျီ ပေါက်သွားတယ် ယုတ္တိရှိရှိစဉ်းစား ယူနီဖေါင်းချွတ်လိုက်ရင် အာဏာလက်လွတ်ဖြစ်ရတဲ့ဘဝ ယမ်းပုံမီးကျ ယိုးမယ်ဖွဲ့ ယုတ်မာ၇က်စက် ယုံရခက်ကြီးပါ ရွေးကောက်တင်မြှောက် ရှက်ကြောပြတ် ရူးကြောင်မူးကြောင် ရန်ကုန်မြို့ကြီး နေပြည်တော်လို မီးလင်းပါစေ၊ မြန်မာပြည်တဝှမ်း မီးလင်းပါစေ ရေကြည်အိုင်မှာ ရေတိမ်နစ် ရေချိန်မညီတဲ့ ကစားကွင်း ရေချိန်မြင့်လာ ရူးချင်ယောင်ဆောင် ရန် ငါစည်းအမြင် ရေငုံနှုတ်ပိတ် ရန် ငါ အကွဲများ ရိုက်စား ရက်စက်ကြမ်းကြုတ် ရက်စက်လိုက်ကြတာဗျာ ရက်စက်လှချည်လား ကွယ် ရို့ ရေဆာဘီယာသောက် ရမ်းတုတ် ရေတိမ်နစ် ရာထူးကြီးလေ မင်္ဂလာရှိလေ ရာထူးတိုး အပေါ်သို့ ဆွဲတင် ရှုပ်ထွေးမှုကို ပိုဆိုးစေ ရှောင်နိူင်လေ ကောင်းလေ ရှစ်ပူးကြီး ရေပေါဆီ ရန်ပြေမာန်ပြေစကား ရှမ်းပြည်ရေခဲနှင့်ယပ်တောင် ရွှေပြည်အေးတရားဟော။ ရွှေပြည်အေးတရား ဟောမနေနဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်စိတ် သံယောဇဉ် ရှေ့မတိုးသာ နောက်မဆုတ်သာ ရေမီးဖုန်းလမ်း ဖြတ်တောက် ရမယ်ရှာ ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ ပြုလုပ် ရှေးရိုးစွဲ ရွှေရေစိမ်လွတ်လပ်ရေးကြီးလိုပဲ ရွှေရည်စိမ်ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံကြီး ရေရှည်ဆွဲမယ့်သဘောထား ရိုးရာဓလေ့ အစဉ်အလာ ရောရောင်ပေါကြောင် ရှင်းရှင်း ဘွင်းဘွင်း ရုရှားရောက်စစ်သားတွေ ရရင်ရ၊ မရရင်ချ ရလက။ ရန်လိုကျွဲ ရောက်လိုက်တဲ့ဒုက္ခ ရှင်းလို့ မရတဲ့ ပြဿနာ ရေလှိုင်းလိုလို၊ ငွေလှိုင်းလိုလို စစ်ဆင်ရေးဖြင့်ဝါဒဖြန့်ရွာသားတွေရဲ့မျက်ရည် ရိုက် သတ် ထောင်ချ ဝါဒဖြန့်ရမ်းသန်းဖျန်းသန်း ရောသမမွှေခံရ ရန်သူမရှိ မိတ်ဆွေသာရှိ ရန်သူသဖွယ် သဘောထား ရွက်ဟောင်းကြွေ ရွက်သစ်ဝေ ရဟန်းပျို ရဟန်သံဃာတော် ရိုးအီနေတဲ့ မြင်ကွင်းတွေပေါ့ လောက်ကောင် လှည့်ကွက် လူကြားကောင်းရုံ ပါးစပ်ပြော လေကုန်ခံ ဟစ်မနေနဲ့ လောကငရဲ လက်ကိုင်တုတ် လူကိုယ်နဲ့တိရိစ္ဆာန်စိတ် လုပ်ကြည့်ပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ လေ့ကျင့်ယူရမယ့် အကျင့်ဓလေ့ လမ်းကြုံ၍ ခဏတဖြုတ်ပါဖူးရုံသာ လက်ခုပ်ထဲကရေ လိုက်ခဲ့ပါဦး ဆိုပြီး လာဖမ်းပြန် လက်ခလယ်တချောင်းထဲနဲ့ ပဲအလေးပြု လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကြေညာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာပေး လူငယ်သည် အနာဂတ်၏ ခေါင်းဆောင် လုပ်ငန်း အဆင်ပြေရေးအတွက် ဝန်ကြီးကို အိတ်ထဲ ထည့်ခြင်း ဟူသော ဖော်မြူလာ လူစိမ်း၊ မျက်နှာစိမ်း လူစုခွဲဖို့သတိပေးစာ လက်စောင်းထက် လက်စဖျောက် လေးစားလိုက်နာပါမည် လှည့်စားအချိန်ဆွဲ လိမ်ဆင် လဆွဲတွေ လီဆယ် တိုင်တန်း လှည်းဆိုထင်း၊ နွားဆိုဟင်း၊ လူဆိုကျင်း။ ကျားဆိုပေါ်တာ၊ မဆိုဖာ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ချင်း မပြုလုပ် လိုကြောင်း လေဥတွေပြုံဥ လူဦးရေတိုးပွားနှုန်းနဲ့ ထိန်းချုပ် လက်ညှိုးထောင်ခေါင်းညိတ်အမတ် လူတွေကိုချကျွေး လူတတ်ကြီးလုပ် လူတွင်ကျယ်လုပ် လမ်းတခြမ်းခင်း အောင်သိန်းလင်း လိုင်းတင်တောင်းဆို လိုတိုရှင်း လွှတ်တော်အတွင်း လွှတ်တော်အပြင် လူထုတိုက်ပွဲ လူထုနဲ့ ရန်တိုက်ပေး လူထုလှုပ်ရှားမှု လက်ထပ် သင်ကြားပေး လန်ဒန်မြေပဲယို လက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲ လက်နက်ကိုင်လမ်းစဉ် လက်နက်ချ ငြိမ်းချမ်းရေး လန်းနေဆဲပါ လက်နက်မိုး၍ အုပ်ချုပ် လက်နဲ့ ရေး ခြေနဲ့ ဖျက် လက်နက်အားကိုး လုံးပြော လူပြိန်းကြိုက်နိူင်ငံရေးစကားလုံး လူပုဂ္ဂိုလ်စိုးမိုးရေးစနစ်။ လူပုဂ္ဂိုလ်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ် လေပြေထိုး ပြောခိုင်း လားပေါင်းများစွာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူတဲ့ဓလေ့ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ ဒို့ရန်သူ လိပ်ပြာသန့် လှည့်ဖြား လေဖမ်းဒန်းစီး လောဘမျက်ကန်းတွေ လူမွေး။ တပည့်မွေး လူမိုက်ကြီး လူမျိုးကိုချစ်တယ် လာမယ် ကြာမယ် လူမိုက်ဆန်ဆန် အနိူင်ကျင့် ဗိုလ်ကျသည့် လုပ်ရပ်များ၊ ဖြစ်ရပ်များ လူမဆန်တဲ့လုပ်ရပ် လယ်မြေတွေသိမ်းတဲ့ချစ်တီးဦးခင်ရွှေ လူမှုဒုက္ခမျိုးစုံ လူမွဲနင်းပြား လူမိုက်မွေး လိုက်မမှီအောင် တက်နေသော ကုန်ဈေးနှုန်း လက်မရွံ့ကြေးစား လူမျိုးရေးစိတ်ဒဏ်ရာ လူမျိုးရေး စိမ့်ဝင်ထိုးဖောက် လူမလေးခွေးမခန့်ရာထူး လိုင်းမာ လိုင်းပျော့ လူမသိဘဲ တွေ့တာပိုကောင်းသလိုပေါ့ လွတ်ရက်ကျော် လက်ရှောင်တယ် လက်ရင်းတပည့် ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းများ လာရွဲ့နေတယ် လူရာမဝင်ဘူး လုပ်ရိုးလုပ်စဉ် စစ်သားထုံးစံ လူရာဝင်တဲ့လူ လက်ရှိအခြေအနေ အဆိုးအကောင်းတွေကို ထင်ဟပ် လူလည်ကြီး၊ လူလည်ကြီးသားသမီး လေလုံးထွား လိမ်လည်လှည့်ဖြား လေလည်သံ လေလှိုင်းသံလူသတ်သမား လူလဲသေ သမိုင်းလဲသေ လက်ဝါးကြီးအုပ် လက်ဝေခံ လက်ဝါးချင်းရိုက် လက်ဝဲ လက်ယာ လူသားဂုဏ်သိက္ခာ လည်သူစားစတမ်း လူသားဆန်မှုကင်းမဲ့စေသည့်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှု လက်သံပြောင်ပြောင်နဲ့ ကြိုဆို လက်သတ်မွေး လူသူမသိ အမှောင်ချ လက်သင့်ရာ စားတော်ခေါ် လူသစ် လူဟောင်း လူသစ်၊ လူဟောင်း ပြသနာ လူ့အခွင့်အရေး လှအောင်ပြောတာပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ အခြေခံသဘာဝ “ဝါး” တော့တာပါဘဲ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲ ဝါဒဖြန့်ချီရေးလက်နက်တရပ် ဝါဒဖြန့် မိန့်ခွန်း အရှည်ကြီး ဝါဒမှိုင်း ဝိုင်းပြီး ဆွမ်းကြီးလောင်း ဝံပုလွေကြက်ခြံစောင့် ဝရမ်းပြေး ဝှေ့ လည်ကြောင်ပတ် ၀ါဝါမြင်တိုင်းရှစ်ခိုး ဝက်အူကျပ် သူ။ ကိုယ်ကျိုးအတွက် အာဏာကို အလွဲသုံးစားလုပ် သဘောထားတင်းမာသူ၊ ကျောခိုင်းခဲ့သူ၊ ကျော်ခွချင်သူ၊ ကိုယ့်စကား ကိုယ်တာဝန်မယူရဲသူ၊ ကျေးဇူးခံ ကျေးဇူးစားလုပ်ကြသူ၊ ကမ္ဘာမကြေဘူးသူ၊ ကျပ်မပြည့်သူ၊ ကျောရိုးမပါသူ၊ ကန့်လန့် ကန့်လန့် ပါနေသူ၊ ကွယ်လွန်တဲ့အထိ ပြည်သူ့ဘက်က ရပ်တည်ခဲ့သူ၊ ခေတ်နောက်ပြန် ဆွဲလိုသူ၊ ခေတ်နောက်ပြန်ဆွဲသူ၊ ခါးနာရသူ၊ ခမောက်ကြိုက်သူ၊ ခေါင်းမာသူ၊ ခေါ်သူနှင့်ပြန်သူ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသူ၊ စီပွားရေး စားကွက်ရှာသူ၊ စစ်ဖက်နီးစပ်သူ၊ စည်ဘူးထောပတ်စားသောက်ကာ ဇိမ်ကျနေသူ၊ စစ်ရေး လေ့လာအကဲခပ်သူ၊ ဆင်ကြံကြံနေသူ၊ ဆွမ်းကြီးလောင်းချင်သူ၊ ဆန္ဒပြမည်သတင်းထွက်တိုင်း ဘုမသိဘမသိဆွဲစိခံရသူ၊ ဆန္ဒပြရာတွင် ရှေ့တန်းမှ ပစ်သတ်ခံရသူ၊ ဦးနှောက်ဖေါက်စားကြသူများ နဲ့ဖေါက်စားခံရသူများ၊ ဥပဒေစည်းကမ်းကို ဂရုမစိုက်ဘဲ စိတ်ကူးပေါက်ရာ လျှောက်လုပ်သူ၊ တည့်တည့်ပြောတတ်သူ၊ တထွာတမိုက်ဘဲကြည့်သူ၊ တဘို့တည်းကြည့်တတ်သူ၊ တရုတ်ကြီးကြောက်ရသူ၊ တာဝန်သိသူ၊ ထမင်းရှင်ပြည်သူ၊ ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်အား အနီးကပ် ပြုစုလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့သူ၊ ဒီမိုကရေစီလိုလားသူ၊ ဓါးသွားအောက် လှံစွပ်တပ်သေနတ်အောက်မှာကြီးပြင်းရသူ၊ နောက်ကျည်ဆန်နဲ့ကျဆုံးသွားသူ၊ နောက်ကွယ်မှစီစဉ်သူ၊ နိူင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်ဖုိ့အတွက် လုပ်နေတဲ့သူ၊ နိူင်ငံတော်အား ကယ်တင်မည့်သူ၊ နိူင်ငံရေး စိတ်အားထက်သန်သူ၊ နိူင်ငံရေးရင့်ကျက် ပြည့်ဝသူ၊ နိူင်ငံရေးလုပ်စားသူ၊ နိူင်ငံရေး အကင်းပါးသူ၊ နွေနေအပူ ရွှေချိုးကူလည်း ရင်တွင်းအပူ ရေငတ်သူ၊ နေရာရတဲ့သူနဲ့ မရတဲ့သူ၊ ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာ သုံးသပ်သူ၊ ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာ နောက်ကျန်နေသူ၊ ပညာပြည့်ဝတဲ့သူ၊ ပေါ်တာဆွဲခံရသူ၊ ပိုတာတွေရောင်းစားသူ၊ ပါတီနိူင်ငံရေး အာပတ်သင့်တဲ့သူ၊ ပြည်တော်ဝင်ရန် ခတ်ကွင်းပြင်နေသူ၊ ပဒေသရာဇ် အရိပ်နင်းတဲ့သူ၊ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လိုလားပြီး အသက်နဲ့ဘဝ ရင်းနှီးပေးဆပ်ခဲ့သူ၊ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းသူ၊ ပလက်ဖောင်းပျောက်နေသူ၊ ပြည်သူလူထုနှင့်တသွေးတသားတည်းရှိသူ၊ ဖွချင်ပွချင်သူ၊ ဖျာခင်းသူ ၊ ဖားခံသူနှင့်ဖားသူ၊ ဖယောင်းတိုင်ချစ်သူ၊ ဖါးယားပြီး မျက်နှာလုပ်ချင်သူ၊ ဖျာဝင်ခင်းသူ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ရုံးတွင် ရှိနေသရွေ့ နေ့ရောညပါ အနားတွင် ရှိနေသူ၊ ဘိုင်ကျဘုပြောနေသူ၊ ဘိုးဘိုးအောင်နှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်သူ၊ ဘယ်လို ကစားသလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်အကဲခတ်သူ၊ ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး ပြောနိူင်ခဲ့သူ၊ ဘာသာရေးအစွန်းရောက်သူ၊ မှောက်ချီလှန်ချီ အသုံးတော်ခံ နေကြရတဲ့ သူ၊ မျက်စိကြီး နားကြီး ဦးနှောက်ကြီးတဲ့သူ၊ မြင့်မြတ်တဲ့ အကျင့်သီလ သိက္ခာ ပညာနဲ့ ပြည့်စုံသူ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ကြီးပွား တိုးတက်ရေးအတွက် စေတနာရှိတဲ့သူ၊ မြန်မာ့သမိုင်းကို နား မလည်တဲ့သူ၊ မြန်မာ့အရေးကို စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ၊ ယုံကြည်ချက်ရှိတဲ့သူ၊ ရိကြ ထေ့ကြ ခနဲ့ကြတဲ့သူ၊ ရန်စကျူးကျော်သူ၊ ရေဆန်လေဆန်ကို အန်တုဖြတ်ကျော်ရသူ၊ ရာဇဝင် ရိုင်းခဲ့တဲ့သူ၊ ရှုံးနိမ့်ဆုတ်ခွာရသူ၊ ရှစ်ပူးကြိုက်သူ၊ ရှေးရိုးစွဲသူ၊ လှေကြုံစီးလိုက်သူ၊ လူကောင်းသူကောင်း အသိတရားပြည့်သူ၊ လမ်းတခြမ်းခင်းခဲ့သူ၊ လူထုကို ဗိုလ်ကျနေကြသူ၊ လူပျော့ လူညံ့ သွေးမသန့်သူ၊ လူမှုရေး စိတ်အားထက်သန်သူ၊ လက်ယာယိမ်းသူ၊ လက်ဝဲယိမ်းသူ၊ လူသားချင်းမစာနာကြတဲ့သူ၊ ဝင်ငွေကောင်းကောင်းမပြနိူင်ပဲ ချမ်းသာသွားအောင်လုပ် နိူင်သူ၊ ဝိသမ လောဘ စီးပွားရှာသူ၊ သွေးခွဲ ရန်တိုက်ပေးနေသူ၊ သွေးခွဲလိုသူ၊ သြဇာကြီးမားသူ၊ သေနတ်မပစ်တတ်တဲ့သူ၊ သွေးပျက်တတ်သူ၊ သိမ်ဖျင်းတဲ့အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ဌာနကိုအုပ်ချုပ်နေသူ၊ သမိုင်းစစ်ကိုအမှန်အကန် သိထားသူ၊ သမိုင်းတခေတ်တွင် ဂုဏ်ကြက်သရေရှိသူ၊ သမိုင်းပျောက်သူ၊ သမိုင်းလိမ်ဖြင့် လုပ်စားရန် ကြိုးစားသူ၊ သမိုင်းဝင်ချင်သူ၊ သူရဲဘောကြောင်သူ၊ သံအမတ်ကြီးအဖြစ် လွင့်သွားခဲ့သူ၊ ဟန်ကိုယ့်ဖို့ လုပ်နေသူ၊ အောက်ကပေးပြီးပြန်ပေါင်းတဲ့သူ၊ အစာမကြေနေသူ၊ အစိုးရဆင်ထားသည့်ကစားဝိုင်းမှာ ပွဲဖြစ်အောင် ပါရမီဖြည့်ပေးရသူ၊ အဆီရစ်နေတဲ့သူ၊ အာဏာရှင်ထံမှ အရိုးအရင်းမျှော်လင့်သူ၊ အတွင်းကြိတ်အလံဖြူထောင်ထားသူ၊ အတွင်းစိတ် စေတနာ ဖြောင့်မှန်သူ၊ အန္တရာယ်ရှိသူ၊ အတွေ့အကြုံ ရှိသူ၊ အထီးကျန်ဆန်လွန်းသူ၊ အနုပညာအားကောင်းသူ၊ အနေမထိုင်တတ်သူ၊ အပါယ်ခံရသူ၊ အပေါ်စီးရနေသူ၊ အဖယ်ရှားခံရတဲ့သူ၊ အောင်မြင်ကျော်လွှားနိူင်သူ၊ အမြင်စူးရှတဲ့သူ၊ အမေ့ဆံဖျားနဲ့ လှေကားလုပ်ချင်သူ၊ အင်မတန်ကောက်ကျစ်တဲ့ စစ်အစိုးရ အရေခွဲလဲထားသူ၊ အမှန်တရားလိုလားသူ၊ အမုန်းမခံရဲကြသူ၊ အမျိုးသားရန်သူ၊ အရင်လူဟောင်း အုပ်ချုပ်သူ၊ အသိပေးလိုသူ၊ အလုပ်ရှိသူနဲ့ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေသူ။ သာကူး သက်ကုန်ကာနီးမှ သဘောပေါက် သူ့ကိုယ်မယုံ ကိုယ့်သူမယုံ သင်္ကြန်ရေဖြင့် မေတ္တာရေအေးပက်ဖြန်း သွေးခွဲစည်းရုံး သွေးချင်းတွေ သံခင်းတမန်ခင်း သိက္ခာထိတယ် သခင် နိူင်ငံရေးသမားကြီး သေခါနီး ရိက္ခာယူ သည်းခြေပျက်ရူးသွပ်စေမည့် ခေါင်မိုးမလုံသည့်ဇာတ်လမ်း သိက္ခာမရှိတဲ့ လက်နက်ကိုင်လူရမ်းကားတွေ သခင်မျိူးဟေ့ ဒို့ဗမာ၊ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမယ် သော့ခလောက်ကြီး သော့ခလောက်ဖြုတ်၊ တခါးတချပ်ဖွင့် သူခိုးသေဖော်ညှိ သူခိုး သူဝှက် သွေးခွဲအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် သံဃာတွေ မီးလောင်တိုက် အသွင်းခံရ သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကြီး သူငယ်ချင်းအရင်းကြီး သွေးစုတ် သွေးစည်းညီညွတ်မှု သွေးစက်လက်နဲ့ ပိုးလိုးပက်လက် သွေးစွန်းသွားပြီ သစ္စာသွေးသောက်။ သစ္စာရေသောက် သွေးဆာနေသူ စစ်ဝါဒီများ သက်ဆိုင်ရာသို့ စာပေပို့တိုင်ကြားခဲ့ သော်လည်း အကြောင်းပြန်ကြားမှုမရ သူညာနေပြီ သတ္တိကောင်းရင် အသည်းမာ သွေးတိုးစမ်း သူတောင်းစားခွက်ပျောက် သတိဆွဲခိုင်း သတိထားကြပါခင်ဗျာ သတိနှင့်ဆင်ခြင်တုံ့ပြန်ကြလော့ သတိပေး သတင်းပို့ သားတပည့် ဗိုလ်ချုပ် သတင်းဖွ သတင်းမဟုတ် သတင်းလုပ် သတင်းရောင်စုံ။ အနီရောင်သတင်း၊ အဝါရောင်သတင်း၊ အစိမ်းရောင်သတင်း သက်တမ်းရှည်အောင် အောက်စီဂျင် သွင်းပေး သတင်းလွှင့် သူတလူ ငါတမင်း လွှတ်တော် သူတို့သုံးနေကျ နည်းဟောင်းကြီး သတင်းသမား မျက်စိ သူ့ထက်ကြီးတာမရှိတော့ဘူး သွေးထွက်သံယိုမရှိ သွေးနားထင်ရောက် သေနတ်ပြောင်းအောက်က ဒီမိုကရေစီ သေနတ် မုိုးထားတဲ့ စကားဝိုင်း သွေးနီးသွေးစည်း သွေးနု သားနု ဒီမိုကရေစီနိူင်ငံသစ် သာပေါင်း ကပ်ပေါင်း သင်ပုန်းချေ သာပေါင်းညာစား သူပါရင် ငါမလာဘူး သူပုန်သတင်းဌာန သေဖော်ညှိ သေဖေါ်သေဖက် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် အစွဲများ သဘောထားကြီးမှု သဘောရိုး မဟုတ် သမား။ ကိုယ်ကျိုးကြည့်သမား၊ ကိုယ်ကျိုးရှာနိူင်ငံရေးသမား၊ ကိုယ်ကျိုးရှာ ဘေးတီးသမား၊ ကပ်ပါး ဖေါက်ပြန်ရေးသမား၊ ခါတော်မှီတော်လှန်ရေးသမား၊ ခါတော်မှီနိူင်ငံရေးသမား၊ စာနယ်ဇင်းသပိတ်သမား၊ တော်လှန်ရေးအရေးခြုံလျက် ကိုယ်ကျိုးရှာ နေရာသမား၊ တောင်သူလယ်သမား၊ ဒီမိုကရေစီသမား၊ နိူင်ငံရေးသမား၊ နိူင်ငံရေးယုံကြည်ချက်မရှိ ပြည်သူအကျိုးအတွက်မလုပ်ဘဲ အယောင်ဆောင်နိူင်ငံရေးသမား၊ နိူင်ငံရေးသမားပေါက်စ၊ ရေပေါ်ဆီ သမား၊ ပါးစပ်ကဘုရား လက်ကကားယားသမား၊ ပေါ်ပင်နိူင်ငံရေးသမား၊ ဖောက်ပြန်ရေးသမား၊ မသာအိမ်ရှာနေတဲ့ ဖဲသမား၊ လက်ရွေးစင်နိူင်ငံရေးသမား၊ လက်ဝဲအချောင်သမား၊ ဝါရင့်နိူင်ငံရေးသမား၊ ဝိသမ လောဘသမား၊ သက်ကြီးဝါကြီး နိူင်ငံရေးသမား၊ သံဃာသတ်သမား၊ သွေဖီရေးသမား၊ သားသတ်သမား၊ အချောင်သမား၊ အခွင့်အရေးသမား၊ အညံ့စားနိူင်ငံရေးသမား၊ အွန်လိုင်းတော်လှန်ရေးသမား။ သမိုင်းကိုင်း သမိုင်းကွေး သမိုင်းကြွေး သူများကိုနှိမ့်ချပြီး အပေါ်ရောက်ဖို့လုပ် သမိုင်းကြောင်းရှည်လျား သွေးမြေခ၊ သွေးချောင်းစီး သမဂ္ဂ သမိုင်းတွင်ပါရော သေမင်းတမန်လမ်း သူမနာ ကိုယ်မနာ သမီးနဲ့အုန်းသီး မထိရင်ပြီးတာဘဲ၊ ကျန်တာလုပ်ချင်လုပ် သေမင်းမှ စောစောခေါ်ယူသွား သမိုင်းမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ သမိုင်း မလှ သမိုင်းရိုင်း သမိုင်းလိမ် သမိုင်းသေသွားပါပြီ သမိုင်းအမှိုက်ခြင်း သာယာစီးသမား သူရောက်လေရာ နှစ်ခြမ်းဖြစ် သီလကြောင် သူ့လူ ငါ့ဘက်သား သံဝေဂ ရစရာကောင်းပါဘိဗျာ သက်ဝင်ယုံကြည် သူသေကိုယ်ရှင် သေသေချာချာနားနားနေနေနဲ့ လည်လှီးတဲ့သဘော သာသနာပိုင်ကျသည့်မျက်ရည် သုံးသပ်မှုများ အတွင်းပိုင်းမှ တီးတိုးထွက်ရှိ သံသယစိတ် သံသယရဲ့ဓါးစာခံ သံသယဝါဒီ သားသုံးသား - ဘုရားသား၊ ကျောင်းသား၊ စစ်သား သေသောသူကြာရင်မေ့ သွေးအလိမ်းလိမ်းနှင့်မ၀င်းမော်ဦး ဟာကွက် ဟိုကောင်ကြောင့်၊ ဒီကောင်ကြောင့် ဟန်ချက်ညီညီ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက် ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင်အပြုံး ဟိုတုန်းကနဲ့ အခုမတူ ဟုတ်တာမဟုတ်တာ အပထား ဟန်ပြ ညီညွတ်ရေး ဟန်ပြလုပ်ရပ် ဟပေးလိုက်တဲ့ အခြေအနေ ဟိုမရောက် ဒီမရောက် ဟိုယောင်ယောင် ဒီယောင်ယောင် ဟိုလိုလိုလူ ဒီလိုလိုလူ အက်ကြောင်း အကွဲကွဲအပြားပြား အကျယ်ချုပ် အကျဉ်းစံဘဝ အကြောက်တရား။ အကြောက်တရားတွေ ဖိစီး အကျဉ်းထောင် နံရံ အကျဉ်းထောင်အတွင်း ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက်မှုရဲ့ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် အကျိုးနဲ့အကြောင်း အန်ကယ်ပြောင်ကြီး ဖောင်ဒေးရှင်း အကျင့်ပျက်ခြစားမှု အကြံပြုစာ အားကြိုးမာန်တက် အကျိုးမျှော် နှိုးဆော် အကျဉ်းသားဝတ်စုံ (အဖြူရောင်) ဝတ်ဖို့ ပြင်ထား အကြေအလည်ညှိနှိုင်း အချင်းချင်းကို မညှာမတာ သေလမ်းပို့တဲ့ အပြုအမူ အချင်းချင်းခွပ် အချင်းချင်း ရန်ဆောင် အချင်းချင်း လည်ချောင်းသွေး နဲ့ ခြေဆေး အခြေခံအုဋ္ဌ်မြစ် အချိန်ဆွဲ အခုတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲဗျာ အခွင့်ထူးခံ လူတန်းစား အချက်ပေး အချိန်ဖြုန်းတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် အိမ်ခြံမြေယာ အချိန်ရမှ ဖြေပါ အချောင်သမား အခင်းအကျင်း အချုပ်အခြာအာဏာ အခွင့်အရေး မညီမျှ အာဃာတ အစကောက် အစွန်းကုန် လိမ်လည်မှု အိပ်စိုက်ချနေရတယ် အစဆွဲထုတ်ကြည့်ခြင်း အစွမ်းပြ အစာမကြေ။ အစာမကြေဘူး အစိုးရက ဝါဒဖြန့်ချီ အစိမ်းရောင်စီးပွားရေး အစိုးရဆင်ထားတဲ့ ထောင်ချောက် အစိုးရတပ်အား နေရာမရွေး တိုက်ခိုက်ရန် အစိုးရနောက်ကွယ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေရာယူ အစိုးရပျက်ကြီး အစုလိုက်အပြုံလိုက် မီးလောင် တိုက်သွင်း အစိတ်သား အစဉ်အလာကောင်း အစဉ်အလာရှိ အစအလယ်အဆုံး အဆင့်ဆင့် သစ္စာခံစနစ် အောက်ဆွဲတပည့်တွေ အဆင့်မရှိတဲ့လုပ်ရပ် အဆင်အခြင်မဲ့၊ အမျှော်အမြင်မဲ့၊ အထောက်အညှာမဲ့၊ ဖိနှိပ်ကွပ်ညှပ်မှု အာဇာနည်။ ဗမာ့အမျိုးသမီးအာဇာနည် အာဏာကိုဆက်ကိုင်ထားလိုတဲ့သဘော အာဏာ ကပ်ပါး အာဏာကို သုံးရာမှာ တစ်ခါတည်း မှားရုံနဲ့ ထိုင်ခုံပြုတ် အာဏာချုပ်ကိုင် အာဏာခွက်လု အာဏာပိုင် အာဏာရူး၊ ဘုရင်ရူး၊ မိဖုယားရူး၊ သမီးတော်ရူး အာဏာရှင် အာဏာရှင်စံနစ် အာဏာရှင်နဲ့ပြည်သူတွေကြားက ပြဿနာ အာဏာရှင်နောက်မြီးဆွဲ အာဏာရူးပြီး ကတိတွေပေး အာဏာရှင်ပေါက်စ အာဏာရှင်ရုပ်လုံး အာဏာရလေ ပျက်စီးလေ အာဏာရူး လက်သစ်များ အာဏာလုပွဲ အာဏာသိမ်း အာဏာအလွဲသုံးစား လုပ်တဲ့စရိုက်ဆိုး အိမ်တော်ကြီးနဲ့ နှစ်အိမ် တစ်အိမ် နေ အတိတ်ကိုပဲပြန်အန်ထုတ် အတွင်းကြိတ်ဝေဖန် အောက်တန်းစားစိတ်ဓါတ် အတွင်းစိတ်အရင်းခံ အတူတူ နဲ့အနူနူဘဲ အတုတွေအရည်ခွံလဲ အတိဒုက္ခ အတွေးနယ်ချဲ့ အတု ယူလောက်စရာပါ အတော်ရွံရှာမိပါသည် အတင်းအကြပ် အတွေ့အကြုံ။ အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့ အကြံပေးတွေ အတိအကျသတင်းနှိုက် အတွေးအခေါ်။ အတွေးအခေါ် ရိုက်ထည့်ပြီး ဦးနှောက်ဆေး အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီအင်အားစု အထက်က။ နေပြည်တော်က။ အထက်ကခိုင်းတာ အထုပ်ဖြေ အထက်ဖါး အောက်ဖိ အဲဒါကဟိုဒင်းလေ ၊ ဒီလိုပေါ့ ၊ ဘယ်လိုပြောမလည်းဆိုတော့ အဓိကရုဏ်း နှိမ်နှင်းရေးရဲ အေးဓါးပြတိုက် အဓမ္မပြုကျင့် အဓမ္မ ပြောင်းရွေ့ အဓမ္မလုပ်အားပေး အနီးကပ်စောင့်ကြည့် အားနည်းချက် အားသာချက် အနံ့တထောင်းထောင်း အနားပျာ အနီမှပန်းရောင်ဖြစ် အနှောင့်အယှက်အိုပယ် အပီကျွေးတာ အပြောကတော့ ရွှေမန်း အပုပ်ချ အပျောက်ဆော် အပျော့ဆွဲ ဆက်ဆံရေး အပျော့ဆွဲနှပ်ကြောင်း အပြောနဲ့ လက်တွေ့ ထင်ဟတ်ချက် အပြစ်ပြောသလိုနဲ့ ကြော်ငြာလုပ်ပေး အပင်ပမ်းအဆင်းရဲ ခံဖော်ခံဖက် အောင်ပွဲ မှတ်တိုင်ကြီး အပြစ်မဲ့ အချုပ်သားဘဝ အပေါ်ယံ အပြုသဘောဆောင် အပြုသဘော မဆောင် အပျက်သဘောဆောင် အပေါ်အောက် အပီအပြင် အပေးအယူ။ အပေးအယူလုပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီသဘော အပြောင်းအလဲ။ အပြောင်းအလဲများက အခုမှစသည် အဖဲ့ခံတာကိုးဗျ အဖမ်းခံရမှာစိုးလို့ ပဇင်းတက် အဖေဆိုပွဲပြီးတာကြာလှပြီ အဖက်ဖက်တွင် ယိုယွင်းပျက်ဆီးလျက် ဖောက်ပြန်ခြစားမှု အဖိမခံ အထိမခံ ခွပ်ဒေါင်းဇာတိမာန် အဖွဲ့အစည်းစိတ်ဓာတ် အဖွဲ့အစည်းများတွင် နှစ်ဖက်ခွနင်း ဝင်နေရာယူ အဘိုးကြီးရုံးခန်းသို့ မောင်းသွင်း အမြင်ကွဲ အမြင်ကပ် ဥပဒေပုဒ်မ အမြင်ကတော့ ရိုင်းတယ် အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်းနေတဲ့ကောင် အမြင်ကျဉ်းမြောင်း အမှားကို အမှားနှင့်ဖုံး အမွေက အမွှေဖြစ် အမေ့ခံနိူင်ငံရေး အကျဉ်းသား အမာခံအဖွဲ့ဝင် အမည်းစက် အမေစုကိုချစ်တယ် အမေစုကျမ္မာပါစေ အမွေဆိုးဆက်ခံ အမည်ဆိုးနဲ့ နာမည်ကျော် အင်မတန်ကို သေးသိမ်တဲ့လုပ်ရပ် အမြင်တိမ်းစောင်း အမိန့်နဲ့တာဝန် ခွဲခြားမသိ အမြင်နောက်ပြန်ဆွဲ အမည်ပျက်စာရင်း အမိန့်ပေးမှ လုပ်တတ်တဲ့ ဓလေ့ အမြင်မကြည် အမျိုးမစစ်သော သားသမီးတွေထွန်းကား အမှတ်ယူ။ အမှတ်ဝင်ယူ အမှိုက်ရှင်း ရန်ရှင်း အားမလို အားမရ အမွှေးသပ်ခံရတဲ့ဘူသီး အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ အမျိုးသားသစ္စာဖောက် အမျိုးသားအကျိုးစီးပွါး အမှီအခိုကင်း အမြော်အမြင် အမြီးအမောက်မတည့် အမေအိုများ၏သားပျောက်ရှာနေသောအဖြစ် အယုတ်တမာ အယူအဆ အရူးချီးပန်း အရေခွံပြောင်းကြံဖွတ်စစ်အုပ်စု အရိုးစွဲ အရောင်ဆိုးလိုက်တာ အရုပ်ဆိုး အကျဉ်းတန် အရိုးတွန် အရေးတော်ပုံ၊ အောင်ရမည် အရှုတ်ထုတ် အာရုံနောက် အရမ်းပြိုင်းတယ် အိမ်ရိပ် ပေးမနင်းဘူး အရူးဘုံမြှောက် အာရုံ မညွှတ်ဘူး အရည်မရ အဖတ်မရ အရူးမီးဝိုင်း အရူးလင်လုပ် အရာရှိလောကအတွင်း ဂယက်ရိုက် အရိပ်လို ပုဂ္ဂိုလ်တွေ အရင်အတွေ့အကြုံတွေအရပြောရရင် အလကားမတ်တင်း အလွန်တန်ခိုးထွား အလိုတော်ရိ အာလူးတွေ လာနေပြီ အောက်လမ်းနည်း။ အောက်လမ်းနည်းလမ်းမျိုးစုံ အလုပ်ဖြစ်တယ် အလံဖြူထောင်ပြပြီး လက်ဆွဲ နှုတ်ဆက် အလွှာမတူညီတဲ့လူတန်းစား အလိုမရှိ အလံမလှဲစတမ်း အလုပ်လက်မဲ့ပညာတတ် အလစ်သုတ် အလွှဲသုံးစား အားလုံးသိတဲ့လျှို့ဝှက်ချက် အလိမ်အညာ အောင်သောင်းကြောင့် အသည်းကြားကမဲတပြား အသက်ကို ဖက်နှင့် ထုပ်ထား အသက်ကိုလောင်းကြေးထပ် အသက်ကို အာမခံ အသုံးချခံ လက်ကိုင်ဒုတ်ဘဝ အသုံးချနေတယ် အာသွက်ခြေသွက် အသက်စတေး အသားညှော်နံ့ အသုံးတော်ခံအမတ်ကြီး အသားထဲကလောက်ထွက် အသက်နဲ့ခန္ဓာ တည်သရွေ့ အသိပေးတင်ပြ အသံပျောက်နေတာပဲ အသရေဖျက် ဝါဒဖြန့် တဲ့ နည်းဗျူဟာ အာသွက် လျှာသွက်ပြောတဲ့ စကားတွေ အောင်သောင်း၏ သားများအပါအဝင် စစ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနှင့် နီးစပ်သော စီးပွားရေးသမားတစု၏ လက်ဝါးကြီးအုပ် အင်အားမမျှလို့ ယာယီနောက်ဆုတ်ပေးလိုက်ရ ဧရာမ ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ ဧရာဝတီဆိုတာဒို့နိူင်ငံပဲပေါ့ကွာ
ကံကုန်ခါနီးတော့ ဥာဏ်ထုံ ကျားကိုက်ပါသည်ဆိုနေမှ အပေါက်ကြီးနှင့်လားမေး ကိုယ်ကောင်းရင် ခေါင်းဘယ်မှမရွေ့ဘူး ကျွမ်းကျင်ရာ လိမ္မာ ကျောချမှ ဓါးပြမှန်းသိ ကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ် ကံဆိုးမသွားရာ စီမံကိန်း လိုက်လို့လာ ကြွေးတင် ဘုရင်ဆပ် ကြက်တူရွေးကတော်တော် မယ်ဘော်ကကဲ ကြွေတလှဲ့ကြက်တခုန် ကြွေးတင်လျှင် ဝက်မွေး ကိုယ်ပေါင် ကိုယ်လှန်ထောင်း ကျူပင်ခုတ် ကျူငုတ်မကျန် ကျွဲပါးစောင်းတီး ကြောင်သူတော် ကြက်သူခိုး ကုသိုလ်လည်းရ ဝမ်းလည်းဝ ချောင်းကိုမြစ်ထင် ဇရက်ကို ချိုးထင် ချေးခြောက် ရေနူး ချစ်စကိုရှည်စေ၊ မုန်းစကိုတိုစေ ခံစားချက်နဲ့ မလုပ်၊ ခံယူချက်နဲ့ လုပ် ချီးမွမ်း (၇) ရက်၊ ကဲ့ရဲ့ (၇) ရက် ခွေးမြီးကောက် ကျည်တောက်စွပ် ခြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ ခဲမှန် ဖူးသည့် စာသူငယ် ခင်ရာဆွေမျိုး ခုရေတွင်းတူး ခုရေကြည်သောက် ခွေးဝမ်းသာအောင် လေလည်ပြ ငါးကြင်းဆီနဲ့ငါးကြင်းကြော် ငကန်းသေ ငစွေပေါ် ငါးခုံးမ တစ်ကောင်ကြောင့် တလှေလုံးပုတ် ငါ့စကားနွားရ ငတ်တလှည့် ပြတ်တလှည့် ငါ့မြင်းငါစိုင်း၊ စစ်ကိုင်းရောက်ရောက် ငါ့အဖေရန်ဘက်၊ ငါတို့ မနှစ်သက် စကား၊ စကား ပြောပါများ စကားထဲက ဇာတိပြ စကားတစ်ခွန်း အစွန်းသုံးဖက် စကားနောက် တရားပါ စကားနည်း ရန်စဲ စိုင်ကော်လို့ခြုံပေါ်ရောက် စကောလောက်မှ ဇောက်မနက် စားစရာမရှိသော်လည်းလျော်စရာရှိရမည် စေတနာမှန် ကံဖြစ်စေ စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ ကန်သင်း စလုံးရေးစ စေသည်ကျွန် ထွန်သည့်နွား စာအုပ်စာပေ လူမိတ်ဆွေ ဆင်ကန်းတောတိုး ဆန်ကုန်မြေလေး ဆီကိုရေချိုး၊ ဆေးရိုးမီးလှုံ၊ စပါးတောင်လိုပုံ ဆင်စီးပြီး မြင်းရံ ဆွမ်းဆန်ထဲ ကြွက်ချေးရော ဆင်ပြောင်ကြီး အမြီးကျမှတစ် ဆရာများ သားသေ ဆင်လီး ခွေးမျှော် ဆုပ်လဲစူး၊ စားလည်းရူး ဆင်သွားရာ လမ်းဖြစ် ဥစ္စာရင်လို ဥစ္စာရင်ခဲ ဥမကွဲသိုက်မပျက် ညောင်သီးလည်းစား၊ လေးသံလည်းနားထောင် တကြောင်း၊ တဂါထာ၊ တရွာ၊ တပုဒ်ဆန်း တံခါးမရှိ ဓားမရှိ တခါသေဘူး ပျဉ်ဖိုး နားလည် တံငါနားနီးတံငါ၊ မုဆိုးနားနီးမုဆိုး တစိတ်ကို တအိတ်လုပ် တဦးမေတ္တာ တဦးစေတနာ တုန်းတိုက်တိုက် ကျားကိုက်ကိုက် တူတာတွဲလုပ် မတူတာခွဲလုပ် တိမ်တောင်သဖွယ် မင်းရေးကြွယ် တစ်နွယ်ငင် တစ်စင်ပါ တနေ့တလံ၊ ပုဂံဘယ်ပြေးမလဲ တပူပေါ်နှစ်ပူဆင့် တောင်မင်း မြောက်မင်းမကယ်နိုင် တောမီးလောင် တောကြောင်လက်ခမောင်းခတ် တယောက်တမျိုး ရှေ့မတိုး တရားကိုနတ်စောင့် တစ်ရွာမပြောင်း သူကောင်းမဖြစ် တွေ့ ရာသင်္ချိုင်း ဓါးမဆိုင်း တံလျှပ်ကို ရေထင် တစ်လှေတည်းစီး၊ တစ်ခရီးတည်းသွား ထင်းခွေမကြုံ၊ ရေခပ်ကြုံ ထိုးမဲ့ဆင် နောက်တလှမ်းဆုတ် ထောင်မြင်ရာစွန့်။ ထောင်မြင်ယာစွန့် ထမင်းရေပူလျှာလွှဲ ဒူးနေရာဒူး တော်နေရာတော် ဒီပုပ်ထဲကဒီပဲ ဒေါင်းယောင်ဆောင်သောကျီး ဒိုင်းဝန်းထက်ကဲ မောင်ပုလဲ နတ်ကရာကျီးမော့ နုတ်ကြောင့်သေ လက်ကြောင့်ကြေ နွားခြေရာခွက် ထဲကဖား နောင်ခါလာ နောင်ခါဈေး နားနဲ့ မနာ ဖ၀ါးနဲ့နာ နဖူးကချွေး ခြေမကျ နာမည်ကြီးရာ ဟင်းဖတ်ပါ နွားရှေ့ ထွန်ကျူး နီးရာဓါးကြောက်ရ နူရာဝဲစွဲ၊ လဲရာသူခိုးထောင်း ပေးကားပေး၏ မရ ပဲစော်နံ၊ တီးစော်နံ။ မဲစော်နံ၊ ဒီမိုကရေစီစော်နံ။ ပညာမြှင့်မှ လူမျိုးတင့် ပညာရဲရင့် ပွဲလည်တင့် ပညတ်သွားရာ ဓာတ်သက်ပါ ပြည်တင်းမင်းမခံနိူင် ပတ္တမြားမှန်ရင် နွံမနစ် ပျော့ပျော့နဲ့နံတဲ့ကြောင်ချီး ပြည်ပအားကိုးပုဆိန်ရိုး ပေဖြစ်လျှင်ခံ၊ တူဖြစ်လျှင်နှံ ပြောမှသိ ထိမှနာ ပျားရည်တစက်ကြောင့် ပြည်ပျက် ပျော်ရာမှာမနေ၊ တော်ရာမှာနေ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်း ပါးလှည့်နားရိုက် ပလိုင်းပေါက်နဲ့ ဖားကောက် ပန်းသတင်း လေညှင်းဆောင်၊ လူသတင်း လူချင်းဆောင် ပျက်အစဉ် ပြင်ခဏ ဖွဲကိုထောင်း၍ ဆန်ကောင်းမရ ဖွတ်ကျောပြာစု ခရုအဆန်ကျွတ် ဖောင်စီးရင်း ရေငတ် ဖွတ်မိကျောင်းဖြစ်၊ မြစ်မချမ်းသာ ဖုတ်လေတဲ့ငါးပိ၊ ရှိလေမှန်းမသိ ဖွတ်လှောင်ရှိ သစ်ခေါင်းပျက် ဖိုသူတော်မျက်စိလည်ရင် ဆွမ်းဆန်ပိုရတယ်။ ဗောင်းတော်ငြိတ် စိတ်တော်သိ ဗိုလ်နေမြဲ ကျားနေမြဲ ဗမာတစ်ကျပ် ရှမ်းတစ်ကျပ် ဘုန်းကြီးအမှု ရွာပတ် ဘုမသိ ဘမသိ ဘုရားလည်းဖူး လိပ်ဥလည်းတူး ဘူးလေးရာ ဖရုံဆင့် ဘဝဆိုတာက ပျော်ရာမှာမနေ တော်ရာမှာနေ ဘ၀ပေးအသိ ဘယ်သူ သေသေ ငတေမာရင် ပြီးရော မကူညီချင်နေ၊ မနှောက်ယှက်နဲ့။ မကောင်းမှုဆိုတာ စိတ်ကွယ်ရာမရှိ မိုးကျရွှေကိုယ် မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲ မကောင်းသူပယ် ကောင်းသူကယ် မီးခဲပြာဖုံး မှိုချိုးမျှစ်ချိုး မီးစင်ကြည့်က မုန်းစကို တိုစေ၊ ချစ်စကို ရှည်စေ၊ နာစရာရှိရင် လွမ်းစရာနှင့်ဖြေ မြေစမ်းခရမ်းပျိုး မီးစတဖက် ရေမုတ်တဖက် မျိုးစေ့မမှန် အပင်မသန်မစားရ ညှော်ခံ မစားရ ဝခမန်း မုတ်ဆိတ်ပျားဆွဲ မေးထူးခေါ်ပြော မြေနိမ့်ရာ လှံစိုက် မျက်နှာလွဲခဲပစ် မျက်နှာလို၊ မျက်နှာရ မြွေပွေးခါးပိုက်ပိုက် မျောက်ပြ ဆန်တောင်း မေးပါများ စကားရ မပြောမပြီး မတီးမမြည် မပြေးသော် ကန်ရာရှိ မီးဘေးရှောင် မလောင်ခင်တား မင်းမှာကတိ၊ လူမှာသစ္စာ မြေမကိုင်မိ လက်မကိုင်မိ မြွေမြွေချင်း ခြေရာမြင် မြွေမှန်ရင် တွင်းဝင်ဖြောင့် မမှားသောရှေ့နေ၊ မသေသောဆေးသမား မယောင်ရာဆီလူး မယုံလျှင်ပုံပြင်မှတ် မရှိတာထက် မသိတာခက် မိုးရွာတုံး ရေခံ။ မီးလာတုံး ရေတင် မရဲဘဲနဲ့ ကျွဲစီးပြ မရှိ မကောင်း၊ ရှိ မကောင်း မုန့်လုံးစက္ကူကပ် မီးလောင်ရာလေပင့် မင်းလိုလိုက် မင်းကြိုက်ဆောင် မည်သူမပြု မိမိမှု မျှော်သာမျှော် ပေါ်မလာ မသိသူကျော်သွား သိသူဖေါ်စား မဟုတ် မခံ မိအေးနှစ်ခါနာ ယုန်ကိုမြင်၍ခြုံကိုထွင် ယနေ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသား၊ နောင်ဝယ် အစိုးရ ယနေ့ လူငယ် နောင်ဝယ် လူကြီး ယာရှင်မျောက်မောင်း ယိုသူမရှက် မြင်သူရှက် ရေကြည်ရာ မြက်နုရာ ရန်စကို တိုစေ၊ ချစ်စကို ရှည်စေ ရာဇဝင်ပြောင်၊ အိမ်ထောင်မှုလပ် ရာဇဝတ်ဘေး ပြေးမလွတ် ရွှေပြည်တော် မျှော်တိုင်း ဝေး ရေမြင့်ကြာတင့် ရှေ့မျက်နှာနောက်ထား ရောမ ရောက်ရင် ရောမ သားလိုကျင့် ရိုးရိုးကျင့် မြင့်မြင့်ကြံ ရိုးလွန်းတော့ အ။ ရလေလိုလေ ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ ရလေအိုတစ္ဆေ လှေခွက်ချည်းကျန် အလံမလှဲ လူချင်းတူပေမယ့် အသက်ရှုကွဲတယ် လှေနံဓားထစ် လှေနံနှစ်ဖက်နင်း လှည်းနေလှေအောင်း မြင်းဇောင်းမကျန် လူပြောမသန် လူသန်မပြော လွယ်မယောင်နှင့် ခက်၊ တိမ်မယောင်နှင့် နက် လူမလေးခွေးမခန့် လူမိုက်အားပေး၊ အဆိပ်ပင်ရေလောင်း လူမှာအမျိုး ကြက်မှာအရိုး လူရိုသေရှင်ရိုသေ လသာတုန်းဗိုင်းငင် လျှာအရိုးမရှိ ဝမရှိဘဲ ဝိလုပ်ပြ ဝါးလုံးခေါင်းထဲလသာ သက်ကြီးစကား သက်ငယ်ကြား သက်ကြီးစကား သက်ငယ်လေးစား သင်္ကြန်အမြောက် သူခိုးက လူပြန်ဟစ် သေချင်တဲ့ကျား တောပြောင်း သူခိုးဓါးရိုးကမ်း သခင်အစ ကမာပုလဲကျေးရွာက သတိမမူ ဂူမမြင် သူတလူ ငါတမင်း သတ္တ၀ါတခု ကံတခု သေနတ်ပြောင်းဝမှာ အာဏာတည် သေမြေကြီး ရှင်ရွှေထီး သောင်မတင်ရေမကျ သမင်မွေးရင်း ကျားစားရင်း သုများယောင်လို့ ယောင်ရသည်၊ အမောင်တောင်မှန်း မြောက်မှန်းမသိ သားရေပေါ်အိပ် သားရေနားစား သိသာသိစေ မမြင်စေနဲ့ ဟိုကွေ့ ဟိုတက်နဲ့လှော်၊ ဒီကွေ့ ဒီတက်နဲ့ လှော် အုတ်ကျစ်ကျော်အေး မန္တလေး၊ အင်ကြင်းကြာအုံ ရတနာပုံ အုတ်ကြားမြက်ပေါက် အကျိုးလို၍ညောင်ရေလောင်း။ အကျိုးလိုလို့ ညောင်ရေလောင်း အချိန်တန်ရင် နားပိန်ကန် အင်္ဂလိပ်အခက် ဗမာ့အချက် အစကောင်းမှ အနှောင်းသေချာ အုတ်တချပ်၊ သဲတပွင့် အိုင်ထဲကဖား အထိမခံ ရွှေပန်းကန် အနာခံမှ အသာစံရ အပ်နဲ့ထွင်ရမဲ့ကိစ္စကို ပုဆိန်နဲ့ ထွင်းရ အနာပေါ်တုတ်ကျ အားနာရင် ခါးပါ အိပ်နေသောနဂါးကြီးကိုမနှိုးပါနဲ့ အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက် အမှိုက်ကစ ပြဿဒ်မီးလောင် အမေကျော်ဒွေးတော်လွမ်း အူမတောင့်မှ သီလစောင့် အမြီးထွက် အမြီးစား၊ ခေါင်းထွက်ခေါင်းစား အမြီးမောက်မတည့် အရူးက တစ်မူးသာ အရင်းစစ် အမြစ်မြေက အရိပ်နေနေ အခက်ချိုးချိုး အနာပေါ် ဒုတ်ကျ အရက်မူးကျွဲခိုးပေါ် အရပ်ရပ်နေပြည်တော်၊ ကြားကြားလို့မှ မတော် အရင်းလဲ အဖျားထင်းဖြစ် အရင်လို အရနှေး အလိုကြီး အရနည်း အလိမ္မာ စာမှာရှိ အင်းလဲမလှုပ် ၊ အဲလဲမလှုပ် အသက်ကိုဉာဏ်စောင့် အသံကြောင့် ဖားသေ အသိခေါက်ခက် အ၀င်နက် အသားထဲက လောက်ထွက် အိမ်သာလို့ ဧည့်လာ အေးအတူ ပူအမျှ
၇ရက် ၇လ ၁၉၆၂ ကိုလုံးဝမမေ့နဲ့။ (မြောင်းမြကိုကျော်ဝင်း) ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအနေနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးကို ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာ အတက်နိုင်ဆုံး အငြင်းပွားစရာ ကိစ္စတွေ၊ မပြောမဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကလွဲပြီး တော်တော်များများကို သည်းခံပြီး ရှောင်ရှားနေခဲ့ပါတယ်။ (ကိုကိုကြီး၊ ၉ ဇွန် ၂၀၁၂) ၁၉၉ဝ ဇန်နဝါရီမှာ ကျွန်တော် အူကျရောဂါ ရတယ်။ အိပ်ရာထဲ ဗုန်းဗုန်း လဲတဲ့အဖြစ် ဆိုက်တယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ဘာကုသမှုမှ မလုပ်ပေးဘူး။ ပြောမရ ဆိုမရဘဲ။ ၅ နှစ်တိတိ ကြာတယ်။ နောက်ဆုံး အူတွေခေါက် သေမလောက် ဖြစ်မှ ဆေးရုံပို့တယ်။ ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီး ခွဲစိတ်ခန်းထဲကို တိုက်ရိုက်ပို့ရတယ်။ ခွဲစိတ်ရတယ်။ လူတော့ မသေဘူး။ မွေးရာပါ တစ်ရှဉ်းတော့ “နတ်သင်း” ဖြစ်ရတယ်။ (ဟံသာဝတီ ဝင်းတင်၊ မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့် ဂျာနယ် / မောင်ကိုသက်၊ ဖဘ၊ ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ၁၉၉၁ ကနေ ၁၉၉၈ အထိ သွား ဝတ်လစ်စားလစ် ပါးစပ်နဲ့ ထောင်ထမင်းကြမ်း ဟပ်နေခဲ့ရတယ်။ ၇ နှစ်အကြာ ၁၉၉၈ ရောက်မှ သွားတုတပ်ခွင့် ပေးတယ်။ (ဟံသာဝတီ ဝင်းတင်၊ မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့် ဂျာနယ် / မောင်ကိုသက်၊ ဖဘ၊ ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေရဲ့ပေါ်ပေါက်လာရာသမိုင်းစဉ်မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ခံမှုမပါခဲ့တဲ့အပြင် ခါးခါးသီးသီးရှုံ့ချမှုတွေရဲ့ အပြင်ဖက်ကနေ အာဏာရှင်တွေ တဖက်သတ်ဖန်တီးသွားခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ဝေဖန်ပေးပါ။ (အိုးဝေအောင်၊ ၁၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) ကျုပ်ကတော့ ဒီလို တောရမ်းပယ်ဖွဲ့ စကားမျိုး ချောကလက် အတောင့်လိုက် စားပြီး ပြောတောင် မယုံရေးချ မယုံဗျ။ (ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်၊ ၃၀ မေ ၂၀၁၂) ကိုယ့်ကြမ္မာကိုယ်ဖန်တီးနိူင်ခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု စာပေတွေကို ထိန်းသိမ်းခွင့်တွေ မရမချင်းတော့ တိုင်းပြည်အေးချမ်းမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ (ဒီဗီဘီ၊ ၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃) ကွက်ကျားမိုးလေးကျတာကို မိုးကောင်းတယ်ပြောရခက်လှပါတယ်။ ကြမ်းကျွံရင် နုတ်လို့ ရပေမယ့် စကားကျွံရင် အနုတ်ရ ခက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကျိုးရှာမရှာဆိုတာ ပိတ်ကားပေါ်မှာဆက်ကြည့်ရမဲ့ကိစ္စ လေ။ ကြည်ကြည်လင်လင် မြင်တတ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ကြောင်ကို ဝမ်းနှုတ်ဆေး ကျွေးမိသလို .. ကျွေးမိသလို… ပျော့ပျော့ လေးနဲ့ နံမယ့် ပုံပေါ်တယ်။ ကြွေးကြော်သံ တိုင်တတ်တာပေါ့။ ကွန်မြူနစ်ပဲ။ ကြည့်ကောင်းအောင်ပြောပြီး လက်မခံ။ (ခင်မောင်တိုး / နစ်နေမန်း၊ ဖဘ၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂) ကိုယ်ချင်းစာနာစိတ်လေးများ ရှိပေးပါ။ (နန်းအောင်ထွေးကြည် -ABSDF-NB ရဲမေဟောင်း၊ ဖဘ၊ ၂၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ စစ်ပွဲဟာ ရိုးသားတဲ့ စစ်ပွဲတခုမဟုတ်ဘူး။ သည်စစ်မှာ လျို့ဝှက်ထားတဲ့ အကြံအစည်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ တရုတ်ရဲ့ သဘောထားတွေ၊ ပတ်သက်မှုတွေများ ဆက်စပ်နေသလားလို့ စဉ်းစားစရာတွေ ဖြစ်လာတယ်။ (ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ မေ ၇၊ ၂၀၁၂) ကချင်ပြည်နယ်သည် စစ်မြေပြင်ဖြစ်နေပြီ။ ကိစ္စတွေနဲ့ နပန်းလုံးနေတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာရှိတာ လုပ်ချင်တာလေးတွေ အားရပါးရ လုပ်ချင်တယ်။ (ခင်မောင်တိုး၊ ၂၀၁၀ / အာရ်အက်ဖ်အေ၊ ၁၅ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂) ကျွန်တော့်ကို တိုက်ခိုက်တဲ့စာတွေကို ဥာဏ်နဲ့ယှဉ်ပြီးသာ ကြည့်ကြပါတော့လို့ ပြောပါရစေ။ ကောင်းတော့ကောင်းတယ်၊ မျက်စိစပ်တယ်။ (မိုးကြိုး၊ JACBA ၊ အာရ်အက်ဖ်အေ၊ ၁၅ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) ကျွန်တော်တို့အားလုံး မိန်းမတွေပါရှင်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်ရှာစားနေကြတဲ့လူတွေချည်းပါ။ (သက်တန့်ချို၊ ဖဘ၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) ကတိပေးထားတဲ့ အချက်တချက်ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားနေတာပါဆိုတာ နားလည်သင့်ပါတယ်။ ကြိုက်တာမကြိုက်တာထက် ပြောသင့်တာကိုတော့ ပြောရမယ်။ ကိုယ်တိုင် မလုပ်ချင်တာကို သူတပါးကို မလုပ်ခိုင်းပါနဲ့။ ကိုယ့်တာဝန် ကိုယ်ယူရဲ ရမှာပေါ့။ (သီတာနွယ် - ဆရာဝန်၊ ၆ ဇွန် ၂၀၁၂) ကျနော့်ကျေးဇူးရှင်အစစ်ဟာ ကျနော့်အဖေနဲ့ အမေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော် ကျနော့်သမီးကို သမီး နားလည်သလား။ တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နားလည်တယ်ဆိုရင် ပြော၊ နားမလည်ဘူးဆိုရင် သူများရဲ့ အသုံးချခံဘ၀ကိုတော့ မရောက်စေပါနဲ့၊ အဲဒီဟာကို မလုပ်ဖို့ မကိုင်ဖို့ဆိုတာကို ကျနော်ပြောတယ်။ (မြအေး၊ ၉ ဇွန် ၂၀၁၂) ကျနော်စိတ်ထဲမှာတော့ အရေးကြီးလို့ရှိရင် ကျနော်တို့အချင်းချင်း သွေးနီးတယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကလေးတော့ရှိတယ်။ ကိုယ့်နိူင်ငံ၏ လုပ်အားအရင်းအမြစ် ဆုံးရှုံးမှုသည် တိုင်းပြည်၏ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်သည်ကို အလေးအနက်ထားရန်လိုပါသည်။ ကျနော်တို့ ကချင်စစ်ပြေးတွေအားလုံးကို ပြောချင်တာက ဘုရားသခင်ကို ယုံကြည်ပါ။ ယုံကြည်ရင် ဘုရားသခင်လမ်းပြပေးမှာပါ။ (အောင်လအင်ဆန်း၊ မဇ္ဈိမ၊ ၁၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ကျနော်တို့ကတော့ စာပေစိစစ်ရေး အလုပ် မလုပ်နိူင်ဘူး။ နိူင်ငံတကာမှာလည်း စာနယ်ဇင်းကောင်စီဆိုတာ သတင်းသမားတွေကို ကာကွယ်တာ၊ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်တာ။ စာပေစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူး” ဟု ဦးသီဟစောက ဆိုသည်။ (ဧရာဝတီ၊ ၁၄ သြဂုတ် ၂၀၁၂) ကျနော် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေနဲ့ ယှဉ်ပြီး ကျောင်းသား သမဂ္ဂ အကြောင်း ရေးတာပါ၊ အဲဒီ အတွက် တိုင်းပြည် မပျက် သွားပါဘူး။ (ဦးမြင့်၊ ဧရာဝတီ၊ ၂၄ မေ ၂၀၁၂) ကျနော်တို့ခေတ်မှာ မွေးစားစကားလုံးတွေ များလာတယ်လို့မြင်ပါတယ်။ (ဖိုးထက်၊ မိုးမခ၊ ၁၁ မေ ၂၀၁၂) ကျနော်တို့တွေ အခုလက်ရှိ အစိုးရ၊ အတိုက်အခံလို့ ပြောတဲ့ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူတွေအားလုံးက ခေတ်ရေစီးကြောင်းမှာ မျောပါနေတယ့်သဘောမျိုးလို့ထင်တယ်။ လိုက်လျောညီထွေသူတွေသာ ဆက်ပြီးရှင်သန်ကျန်ခဲ့မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ (ဌေးအောင်၊ ဗွီအိုအေ၊ ၁၇ မေ ၂၀၀၂) ကျနော်တို့နိူင်ငံမှာ အကျင့်ပျက် ခြစားမှုကို အမြစ်ကနေ လှန်နိူင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေ ကျနော်တို့ လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (ရွှေမန်း၊ ဧရာဝတီ၊ ၁၉ မေ ၂၀၁၂) ကျနော်တို့နိူင်ငံရဲ့ လက်ရှိ မီဒီယာ လွှတ်လပ်ခွင့် အနေအထားက ဘယ်လောက်အထိ ရှိနေပြီလဲဆိုတာ အခု နိူင်ငံတကာက ကျနော်တို့နိူင်ငံရဲ့ မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်ကို သတ်မှတ်တဲ့ အဆင့်တွေကို ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ နိူင်ငံရဲ့ လက်ရှိအနေထား အဖြေက ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ (ကိုဝေဖြိုး - Weekly 11 ဂျာနယ် အယ်ဒီတာချုပ်) ကျနော်တို့ဘက်က ဘယ်သူမှ လုပ်မယ့် လူမရှိဘူးလားဗျာ။ ကျနော်တို့ရဲ့ ပျက်ကွက်မှုပါ။ ကျနော်တို့ရဲ့ မူတွေကို စွန့်လွှတ်တယ်ဆိုတာ မကောင်းဘူးဆိုပြီး တင်ပြဆွေးနွေးတယ်။ ကျနော်တို့လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု၊ ဘာသာရေးခွဲခြားမှု တွေ အတွက် ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့တယ်။ ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်။ ကျနော့်မှာ ဘာမှဝေဖန်စရာ မရှိပါဘူး။ ကျနော် မြန်မာပြည်ကို ချစ်ပါသည်။ (ဒေါက်တာမြန်အောင်၊ ၃ ဇွန် ၂၀၁၂) ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်နဲ့ ချင့်ချိန်နိူင်မှာပါ။ ကိုယ်ပြုတဲ့ ကောင်းခြင်း ဆိုးခြင်းကို ကိုယ်သာ ပြန်ခံစားရတယ်။ ကိုယ်ဖြစ်စေလိုတဲ့ အပြောင်းအလဲကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြလိုက်ပါ။ ကြံ့ဖွတ်စစ်အာဏာရှင်တွေ ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ လူထုဖိနှိပ်ရေး၊ တော် လှန် ရေး အင်အားစုတွေ ချေမှုန်းရေး ဟာရှိမြဲ ရှိနေတာပါ။ (အေးဆောင်၊ ၁၆ မေ ၂၀၁၂) ကြံ့ဖွတ်စစ်အာဏာရှင်တို့ သြဇာအရှိန်တက်လာခြင်းသည် ပြည်သူများအတွက်များစွာအန္တရာယ်ကြီးမားလှပေသည်။ ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို လူထုက ငြင်းပယ်လိုက်ပြီ။ (ဝင်းတင် - ဟံသာဝတီ၊ ဧရာဝတီ၊ ၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ကိုယ့်ဘ၀တွင် ကိုယ်သာအရှင်သခင် ဖြစ်ပါသည်။ ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တစ်ခုကို ကျင့်သုံးနိူင်ဖို့အတွက် အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိသလို၊ ပြည်သူတွေမှာလည်း တာဝန်မကင်းပါ။ ကျမတို့ တိုင်းပြည်မှာ လူတယောက်ရဲ့ တနေ့ လုပ်အားခဟာ ထမင်းတနပ်စာတောင် မရှိပါလားလို့တွေးမိတော့ စိတ်မကောင်းခြင်းကြီးစွာနဲ့ စိတ်ထဲ တနှံ့နှံ့နဲ့ နုန်းချိရပါတယ်။ (မေသင်္ကြန်ဟိန် - မြစ်မခ၊ ၂၁ မေ ၂၀၁၂) ကျွန်မတို့ တောင်သူလယ်သမားတွေရဲ့ ဘဝကို ဝိုင်းဝန်းကူညီ ကယ်တင်ကြပါရှင်။ ကိုယ်မွေးတဲ့ မီး ကိုယ့်ဘာသာ ပြန်ငြိမ်းဖို့ လိုကြပါလိမ့်မယ်။ ကျမတို့မှာ ခေါင်းဆောင်မရှိဘူး။ ရှင်တို့မှာခေါင်းမရှိဘူး။ (စိမ်းခက်စိုး၊ နေ့သစ်၊ ၉ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀၁၀) ကျမတို့ မပျော့ပြောင်းတဲ့နေရာက ဒူးခေါင်းပဲရှိတယ်။ ဒူးတော့ မထောက်ဘူး။ ကျွန်မတို့ မေ့မထားဘူး ဆိုတာကို ဘယ်တော့မှ သံသယ မဖြစ်ပါနဲ့။ ရွှေ့ပြောင်း အလုပ်သမားတွေကို ဘယ်တော့မှ မမေ့ထား ပါဘူးလို့ ပြောပါရစေ။ (အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၃ ဇွန် ၂၀၁၂) ကျွန်မပြောပြီးမှ ဆုံးဖြတ်ကြပါရှင်။ ကျမ ပြန်မေးပါရစေ။ ကောင်းမျိုးအထွေထွေရယ်နှင့်၊ ချွန်စေမြစေစော၊ ဒေါင်းအိုးဝေရယ်လို၊ တွန်စေ ကစေသော။ (ကိုယ်တော်မှိုင်း) ကိုယ်ရေးတဲ့ အလိမ်အညာ၊ အဆိပ်အတောက်တွေအတွက် ကိုယ်တာဝန်ယူရပါမယ်။ ကြည့်ရင် မြင်နိူင်ပါတယ်။ ကောင်းရာသုဂတိ မလားပါစေနဲ့။ ကာလ၊ ဒေသ၊ ပရောဂ အပေါ်မှာပဲ မူတည်ပါတယ်။ ကုလားကြီးနဲ့အရာကြီးပါ။ ကွဲလွဲတဲ့အမြင်နဲ့ ခြားနားတဲ့ အယူအဆ ရှိတာဟာ သဘာဝဘဲ။ ကလောင်ဖျား ဓါးသွားထက် ပို၍ထက်သည်။ (ခင်မျိုးချစ်၊ "သတင်းစာလောက"၊ ၁၉၅၂) ကိုယ့်လူမျိုးကို ချစ်တယ်ဆိုတာ အခြားလူမျိုးကို မုန်းဘို့ မဟုတ်ဘူး။ (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမြ၊ ကေအင်ယူ / အောင်ထူး၊ ဖဘ၊ ၇ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ကိုယ့်လူမျိုး အလုပ်သမားတွေ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ အခွင့်အရေးတွေရအောင် ဖန်တီးတည်ဆောက်ပေးရပါမယ်။ (မောင်ဝံသ၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၂) ကိုယ်လုပ်သမျှကိုကိုယ်တာဝန်ယူရမယ်။ ကျုပ်သိချင်တာက ဘယ်သူတွေက ဘယ်သူတွေကို ဘယ်လောက်ကိုယ်စားပြုထားလဲ ဆိုတာသိချင်တယ်။ ကိုယ့်သေတွင်းကိုယ်တူးရာရောက်တယ်လို့ သတိပေးသွားတယ်။ ကျောင်းသားများနှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်များဖြင့် မဟားတရားနှိပ်စက်ခံရသည်။ ကိုယ့်အခွင့်အရေး ကိုယ်မသိဘူး။ ကိုယ့်အတွက်ထက် သူ့အတွက် ပူတာပေါ့။ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ်လုပ်ကြရုံဘဲပေါ့။ ခုချိန်မှာ ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေဟာ ဘာလဲ ဘယ်လဲ ဆိုတာ သေချာပြန်ဆန်းစစ်ကြစေချင်တယ်။ ခြေစုံကန်သာ ပစ်ဝင်လိုက်ပါကွယ်။ ခေါင်းဆောင်မှု ကောင်းရင် အချိန်တိုတိုမှာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာလိမ့်မယ်။ ခေါင်းဆောင်မှုအပိုင်းမှာ မပါတော့ဘူးဆိုရင်တော့ ကောင်းတဲ့အလားအလာလို့ ပြောချင်ပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်ရင် တာဝန်ယူရဲတဲ့သတ္တိရှိရပါတယ်။ (သန်းဝင်း၊ ဖဘ၊ ၁၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂) ခွပ်တဲ့ ဒေါင်းမှ ခွပ်ဒေါင်း၊ ဖွတ်နဲ့ပေါင်းရင် ဖွတ်ဒေါင်းတဲ့။ (ဇော်ဝင်း၊ ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း) ခုတော့ နန်းမရခင်က နန်းကျသွားခဲ့ပါပြီ။ ချည်ပြီးတုပ်ပြီး အသေရိုက်သတ်တာကို ခံရနိူင်ဖွယ်ရှိပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကူညီချင်ရင် အရမ်းကို ဆင်းရဲ ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ကူညီစေချင်တယ်။ ခင်ဗျားတို့ တသက်လုံး မြန်မာ ဖြစ်နေသရွေ့ မြန်မာ လို့ စဉ်းစား ဖို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ မီးရောင်တွေ ကြောင့် ဘာမှတောင် ကောင်းကောင်း မမြင်ရတော့ဘူး။ (သမတ သိန်းစိန်၊ မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့်ဂျာနယ်၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ခင်ဗျားတို့ဟာ တရားသူကြီး တွေအနေနဲ့ အချင်းချင်းဘယ်လိုပဲ သဘောထားကွဲကြသည်ဖြစ်စေ လူထုကို မသိစေသင့်ပါဘူး။ လူထုနဲ့ဆက်ဆံရာမှာဖြစ်ဖြစ် အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းနဲ့ ဆက်ဆံရာမှာဖြစ်ဖြစ် ခင်ဗျားတို့ဟာ အပြင်ပန်းအားဖြင့် စည်းစည်းလုံးလုံးဖြစ်နေသင့်တယ်။ အသံထွက်ရင်လည်း တစ်သံတည်းပဲဖြစ် သင့်တယ်။ အချင်းချင်း သွားပုပ်လေလွင့် စကားတွေပြောပြီး လူထုကိုဒုက္ခမပေးသင့်ပါဘူး။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို မျက်နှာလိုမျက်နှာရ မလုပ် သင့်ပါဘူး။ (ဦးဘဦး၏ ကိုယ်ရေးအထ္ထုပ္ပတ္တိ) ခင်ဗျား ရူး သွားပြီလား။ ခရိုနီတွေပါသရွေ့ နိူင်ငံရေး မတည်ငြိမ်နိူင်ဘူး။ ခိုးဝင်လာခဲ့သူတွေကိုမြန်မာနိူင်ငံသားအဖြစ် ရောက်အောင်လုပ်တာတွေကိုတော့ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှ လက်မခံနိူင်ပါဘူး။ ခွေးသေကောင်ပုပ် လည်ပင်းဆွဲစရာ မလိုဘူး။ ခက်သည်မှာ အတုအယောင်များက နိူင်နိူင်နေတတ်၏။ အတုအယောင်တို့က လွှမ်းမိုးတွင်ကျယ်သဖြင့်၊ လက်ဦးစွန့်၍ တည်ထွင်သူ အစစ်တို့မှာ ဖုံးကွယ်ခြင်း ခံနေရတတ်၏။ လူထုမှာ အတုအယောင်များက ကာထားသဖြင့် အစစ်ကို မမြင်ကြရပေ။ (ဒဂုန်တာရာ၊ ၁၉၄၈ ဇွန်လ။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး စာပေဖြန်ချိရေးမှ ပထမအကြိမ် ထုတ်ဝေတဲ့ 'ဒဂုန်တာရာ-ရုပ်ပုံလွှာ' ၁၉၅၅ခုနှစ်၊ စာအုပ်) ခေတ်အဆက်ဆက်၊ မျိုးဆက်ပေါင်း အဆက်ဆက် တိုက်ပွဲ ဝင်ရင်းနဲ့ အသက်ပေးသွားရတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက် စစ်တိုက်တယ်ဆိုတာ အရူးစကားပါ။ စစ်ကို တကယ်တိုက်ဖူးသူ မှန်သမျှ ဘယ်တော့မှ စစ်ဆိုတဲ့အသံကိုတောင် မကြားချင်ပါဘူး။ (ကြည်မောင် / နီမိုလှိုင်၊ အာအက်ဖ်အေ၊ ၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃) ငွေစက္ကူကို မီးရှို့၍ ရေနွေးအိုးတည်သောက်သည်။ ငါစစ်ထဲဝင်တာ တိုင်းပြည်အတွက်ဘဲ။ ငါတို့ ဆီက ထွက်ပြေးတဲ့ကောင်တွေ တစ်နှစ်လောက်တော့ ခံဆိုပြီး မငြိုးပါနဲ့။ (သီတာနွယ် - ဆရာဝန်၊ ၆ ဇွန် ၂၀၁၂) ငါတို့ ဘုရားစေတီတော်ကို ငါတို့အသက်စွန့်ကာကွယ်ရမယ်။ (သွဲ့သွဲ့ဝင်း၊ အေးနက်၊ ဖြူဖြူဝင်း / နေမျိုးဝေ၊ ဖဘ၊ ၂၅ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ငါတစ်ယောက်ပဲ အမိုက်ခံမယ်။ ငါ့သားသမီးတွေတော့ ငါ့လို ဆင်းဆင်းရဲရဲ မရုန်းကန်စေရဘူး။ ငွေတောင်းလို့ လူနာရှင်ဘက်က အဲဒီငွေမပေးနိူင်တာကြောင့် ဆေးကုသမှုမခံယူတော့ဘဲ ဆေးရုံက ပြန်ဆင်းသွားတယ်။ ငယ်တဲ့အမှု ကြီးအောင်၊ ကြီးတဲ့အမှု ရှင်းမရအောင် လုပ်နေတဲ့ သဘောဖြစ်နေတာ သတိထားမိပါတယ်။ (သားဆွေ၊ ၈ ဇွန် ၂၀၁၂) ငါတို့အိမ်မှာ ငါတို့သာ အရှင်သခင်ဖြစ်ရမယ်။ ငြိမ်နေရင် ပင့်ကူအိမ်တောင် ငြိတယ်။ ရုန်းထွက်ရင် သံကြိုးတွေတောင် ပြတ်တောက်တယ်။ (စအောင်လှ၊ ဖဘ၊ ၁၄ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂) ငါမကောင်းရင် ငါ့ကိုရေး၊ ငါ့မိဖုရားမကောင်းရင် ငါ့မိဖုရားကိုရေး၊ ငါ့သားတော်သမီးတော်တွေမကောင်းရင် ငါ့သားတော်သမီးတော်တွေကိုရေး၊ မှူးမတ်တွေမကောင်းရင် မှူးမတ်တွေကိုရေး။ မင်းတို့သတင်းစာတိုက်၌ အပြစ်မရှိစေရ။ နန်းတော်ထဲကို သတင်းစာတိုက်က မည်သူမဆို အဆီးအတားမရှိ ဝင်စေ၊ထွက်စေ။ (မင်းတုန်းမင်း) ငရဲခွေးကြီးလွတ်နေပြီ။ (အိုးဝေ-ကိုညိုမြ၊ အယ်ဒီတာကိုအောင်ဆန်း) စိန်ကို စိန်ကပဲ ဖြတ်နိူင်တယ်။ စည်းကမ်းမရှိတဲ့စစ်တပ် ရှိနေမယ့်အစား အဲဒီစစ်တပ်မရှိတာ တိုင်းပြည်အတွက် ပိုကောင်းတယ်။ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း) စစ်ခုံးရုံးက စီရင်ချက်ချတဲ့အခါမှာ ရှေ့နေငှားခွင့်၊ ထုချေခွင့် မပေးဘူး။ စစ်စကားနဲ့ပြောရရင်တော့ ခြုံခို တိုက်လိုက်တာပေါ့လေ။ စဉ်းစားကြည့်ပေးပါ။ စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။ (မောင်စိန်ဝင်း - ပုတီးကုန်း၊ 'ဒေါင်းကတဲ့နေ့' ၊ တာချီလိတ်၊ ၃ မတ် ၂၀၁၃) စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ မြင်သာပါတယ်။ (မောင်ဝံသ၊ ပြည်သူ့ခေတ်ဂျာနယ်၊ ၈ မေ ၂၀၁) စစ်ဆိုရင် ရေတောင်စစ်မသောက်ဘူး။ စစ်တပ်က ခေါင်းမရှိပဲ အုပ်ချုပ်လာတာအာဏာတည်မြဲရေးအတွက် ဘာမဆိုလုပ်တယ်။ (ကြည်ဖြိုး၊ ၈ ဇွန် ၂၀၁၂) စတုထ္တမဏ္ဍိုင်၏ပင်မတာဝန် ဖြစ်သည့် မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်အားစောင့်ကြည့် ရန်နှင့် ယင်းတို့၏ အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများ၊ တာဝန်ပျက် ကွက်မှု များနှင့် ဥပဒေမဲ့ပြုမူမှုများကို ဖော်ထုတ်ရေးသားရန် တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုပြုပါသည်။ စေတနာမရှိတဲ့စစ်အစိုးရကို ပြည်သူလူထုကလည်းစေတနာမထားပါ။ စစ်ထောက်လှမ်းရေးတွေ အခန်းရှေ့ ရောက်လာကြတယ်။ လွှတ်ဝရမ်း ဖတ်ပြတယ်။ ပြီးတော့ ပုဒ်မ ၁ဝ(ဃ) ကပ်တယ်။ တစ်ကျော့ပြန် ထောင်ကျတယ်။ (ဟံသာဝတီ ဝင်းတင်၊ မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့် ဂျာနယ် / မောင်ကိုသက်၊ ဖဘ၊ ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များနှင့် နယ်စပ်ဒုက္ခသည်များဘ၀မှာ ကြုံဖူးမှသိပါမည်။ စိန်ပြီးရင် ရွှေအလှည့်လာမယ်။ စီးပွားရေး အကျိုးအမြတ်အတွက် ရမယ်ဆိုရင် နိူင်ငံအကျိုးကို သိပ်ပြီးထည့်တွက်မယ်ပုံ မရဘူး။ စစ်ဖိနပ်အောက် ဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူး။ (ဆလိုင်းတင်မောင်ဦး) / မင်းတို့စစ်အုပ်စုလက်အောက်မှာ ဘယ်တော့မှဒူးမထောက်ဘူး။ (ဆလိုင်း တင်မောင်ဦး) စက်ရုပ်ကြီးလိုမခံစားတတ်သူကြီးမဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ ခင်ဗျာ။ စိတ်ရှည်တာ၊ သည်းခံတာ အတိုင်းအတာတခုထိ ရှိပါတယ်။ စစ်ရှိနေ တမျှတော့ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်ဆိုတာ ရှိနေမှာဘဲ။ ဒါကြောင့် ကျနော် တွေ့ရ မြင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကတော့ စိတ်ချမ်းသာစရာ မရှိဘူးဗျ။ (မြအေး၊ မဇ္စျိမ၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) စာရွက်ပေါ်မှာအမြင်လှဖုို့ပဲရှိနေတယ်။ စာရဲ့အဓိပ္ပါယ် နှင့် စာရဲ့စေတနာကို နားလည်ပါတယ်။ စစ်သားမှ စစ်သားဆိုတော့ သူတို့တွေက ထူးပြီး နဖူးမှာ ဂျိုပေါက်နေကြလို့နဲ့တူရဲ့။ စစ်သားအမတ်တွေဟာ ဂျိုလိမ်တယ်၊ နားရွက်ပဲ့တယ်။ စစ်အစိုးရဟာ ဘယ်တော့မှ မရိုးသားတဲ့အတွက် သူတို့ ဘာပြောပြောမယုံဘူး။ စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်ကို လေ့လာကြည့်ရင် မြန်မာပြည်မှာ နိူင်ငံရေးဒီရေ မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်တိုင်း အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို အာရုံစူးစိုက်မှုလွှဲမှားစေမယ့် နိူင်ငံရေးကစားမှုတွေ လုပ်လေ့ရှိတာကို သတိထားမိပါတယ်။ စစ်အာဏာရှင်တွေကို တကြိမ်ဒူးထောက်ရင် တကြိမ်ပြီး တကြိမ် အကြိမ်ကြိမ် ဒူးထောက်ရစမြဲ ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာကို နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံ ရှိသူတိုင်း သိပြီးသားပါ။ တခါ ဦးကျိုးပြီးသားလူကို အကြိမ်ကြိမ် နှိမ်တာ ချိုးတာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ အကျင့်ပဲ။ ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့ စစ်အာဏာရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ် လူထုကိုတော့ လုံးလုံး လွန်ဆန်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ဖဘ၊ ၂၉ ဇွန် ၂၀၁၂) စစ်အာဏာရှင်တို့ သည် နိူင်ငံရေးသမားများအား မည်သို့ နည်းနှင့်မျှ အာဏာလွှဲပြောင်း ပေးချင်သည့်သူများမဟုတ်။ စစ်အာဏာရှင်တို့ သဘောထားအမှန်ပေါ်လာပြီ။ စစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများနှင့်အတူ စစ်တပ်သည် ကမ္ဘာ့တံတွေးခွက်တွင် ပက်လက်မျောခဲ့ရပေသည်။ (အောင်ခိုင်မြင့်၊ 8888peoplepower ၊ ၅ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂) စစ်အာဏာရှင် အစိုးရက ဖမ်းဆီးတယ်။ ချုပ်နှောင်တယ်။ ပြီးတော့ ထုံးစံ အတိုင်းပေါ့။ ညှဉ်းပန်းတယ်။ နှိပ်စက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သံတိုင်နောက်က ထောင်ငရဲခန်းထဲ သွင်းလိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ထောင်ထဲမှာ နှစ်ပရိစ္ဆေဒတွေ အကြာကြီးပိတ်လိုက်တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ကို လူ့ငရဲခန်းထဲပိတ်ထားခိုက် စစ်ထောက်လှမ်းရေး ယမမင်းတို့ လုပ်ကြံမှုတွေစိတ်ကြိုက်လုပ်ကြတယ်။ လွတ်ချိန်သင့်လို့ လွတ်ခွင့်ကြုံလာရင်တောင် အကျဉ်းသားရဲ့လူ့သိက္ခာ၊ နိုင်ငံရေး သိက္ခာ၊ ယုံကြည်ချက် သိက္ခာကို ဖဲ့ခြွေချိုးဖျက်တဲ့ ခံဝန်ချက် အမျိုးမျိုးကို လက်မှတ်ထိုး ခိုင်းတာတွေ၊ အဲဒါတွေ အားလုံးအတွက် စစ်အာဏာရှင် ပါးကွက်သားတွေ ငါတို့ (နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ)ကို ဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်။ ငါတို့ အဖွဲ့အစည်းတွေကို ဝန်ချ တောင်းပန်ရမယ်။ ငါတို့ ဘက်က ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူလူထုတွေကို ဝန်ချ တောင်းပန်ရမယ်တဲ့။ (ဟံသာဝတီ ဝင်းတင်၊ မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့် ဂျာနယ် / မောင်ကိုသက်၊ ဖဘ၊ ၁၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ဆင်ဆိုတာ တိရိစ္ဆာန်ပဲကွာ၊ ရှိခိုးစရာ မလိုပါဘူး။ ဆင်ဖြူဆိုတာကလည်း ခရုသင်းစွဲနေတာပဲကွာ။ (ဆရာကြီး ဒေါက်တာ သန်းထွန်း) ဆင်းရဲချမ်းသာ ကွာဟမှုတွေက ကြီးသထက်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။ ဆင်းရဲတာခံနိုင်တယ်၊ ချမ်းသာတာမခံနိုင်ဘူး။ ဆေးရုံးမှာ ကုတင်နှင့်ဆရာဝန် ဘဲရှိတယ်။ (သန်းမြင့်အောင်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ ၁၁ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) ဆရာသည် ကျောင်းသားများအတွက် စံနမူနာ ဖြစ်ရမည်။ အစိုးရ အမှုထမ်းအရာထမ်းများတွင် လက်ရွေးစင်များ ဖြစ်ရမည်။ (ဦးသန့်၊ ၁၉၀၉-၁၉၇၄) ဆက်လက် သီးခံနိူင်ခြင်း မရှိတော့ပါ။ ဦးတည်ရန်သူကို စုစည်းပြီးထိုးနှက်၊ တခြားသာမန် ရန်သူကို ဆွဲထား။ (ဗိုလ်နေဝင်း၊ ဗိုလ်မောင်မောင်၊ ဗိုလ်အောင်ကြီး / ဗိုလ်သန်းရွှေ၊ ဗိုလ်သိန်းစိန်၊ ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင် / ဗကပ) ဦးနှောက်နဲနဲသုံးပြီး ချင့်ချိန်ပါဦး။ ဥပဒေအထက်တွင် မည်သူမျှ မရှိစေရပါ။ ဥပဒေ အထက်မှာ သေနတ်ရှိတယ်။ ဥာဏ်လွှာပြီး စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် က သူ့အခြေခံဥပဒေနဲ့သူ အုပ်ချုပ်နေတာပါ။ ကျနော်တို့က အဲဒီအခြေခံဥပဒေ ကို လက်မခံဘူး။ (ဦးဆွမ်လွတ်ဂမ် - ကေအိုင်အို / ချိုတူးဇော်၊ ဖဘ၊ ၅ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂) ဌာနေငါးတွေ မရှိတော့ဘူး။ သူတို့မိနေကျ ငါးတွေ မရှိတော့ဘူးဆိုတာပဲ သူတို့သိတယ်။ တကောင်ကြွေးပြီဘုရင်မကိုစားပစ်လိုက်တာပါပဲ။ (ကြည်ဖြိုး၊ ၁၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) တကယ်တော့ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာ ရှေ့က ဦးဆောင်ချီတက်ရတာပါ။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၂) တကယ်တော့ မကောင်းတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေက ပိုများတယ်။ တကယ်တော့ သူလည်း မြန်မာ၊ ကိုယ်လည်း မြန်မာ။ သူလည်း ဒီမိုကရေစီကို ရည်မှန်းသလို ကိုယ်လည်း ဒီမိုကရေစီကို မျှော်မှန်းတာပါပဲ။ တကယ်ပဲ မြောင်းတွေ ချောင်းတွေ ပုံမှန် မစီးဆင်းတော့ဘူးဗျ။ တကယ်ဖြစ်ချင် တကယ်လုပ် အဟုတ်ဖြစ်ရမည်။ (ဦးသုခ) တွေးကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ နိူင်ငံရေးသမားတွေ မပေးဘူးတဲ့ ကတိဆိုတာ မရှိသလောက်ပဲ။ ပြီးတော့လည်း သူတို့လုပ်ချင်တာ လုပ်ကြတာပါပဲ။ တကယ့်အခြေအနေဟာ ရေးတာထက် ပိုပြီးရှုပ်လှပါတယ်။ တကယ့်အဖြစ်အပျက်တွေဟာ စိတ်ကူးယဉ်မျှော်လင့်ထားမှုတွေထက် ပိုမိုဆန်းကြယ်တယ်။ တခုခုတော့မှားယွင်းနေပြီထင်ပါတယ်။ တိုင်းချစ်ပြည်ချစ် တပ်မတော်သားများနဲ့ မျိုးဆက်သစ် တပ်မှူးများကို အထူးပြောကြားလိုတာကတော့ သားသုံးသားမှာ သားနှစ်သားဖြစ်တဲ့ ဦးဇင်းတို့ ဘုရားသား ရဟန်း သံဃာတော်များနဲ့ ကျောင်းသားများဟာ တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ တာဝန်မကျေသေးတာ နောက်ဆုံး သားတစ်သားဖြစ်တဲ့ စစ်သားဘဲ ကျန်ပါတော့တယ်။ (အရှင် ဦးသြဘာသ၊ စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ဝက်ဘ်ဆိုဒ်၊ ၂၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) တိုင်းချစ်ပြည်ချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဝင်ရောက်တားဆီးဘို့ကျနော်မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဗျာ။ တစ်ခါမှ တိုက်ရိုက် မတုန့်ပြန်ဘဲ မူးကြောင် ရူးကြောင် ရှောင်သွားနေခဲ့တာချည်းပါဘဲ။ တစ်ဦးပေါ် တစ်ဦး နားလည်မှု ရှိကြပါ။ တပ်တွင်း ဒီမိုကရေစီဆို သည်မှာ မူး၍ပင်ရှူစရာမရှိ။ ဒီမိုကရေစီဆိတ်သုဉ်းကင်းမဲ့လှပေသည်။ (ဦးမျိုး - ဥပဒေ၊ ၁၃ ဇွန် ၂၀၁၂) တိုက်တွန်းနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ တောင်တို့မည်သည် သူ့သဘောလောက် အလိုလိုပြိုရန် ခက်ခဲသော်လည်း လူတို့၏ လောဘဖြင့်ဖြိုလျှင် လပိုင်းအတွင်း ပြိုတတ်ပါကလားဟု အသိတွေတိုးလာ၏။ တောင်တစ်လုံးအသစ်ဖြစ်ရန် ကပ်ကမ္ဘာတစ်ခုမျှ ဖြစ်တောင့်ဖြစ်ခဲဖြစ်ပေါ်ရန် လွန်စွာခဲရင်းသော်လည်း လောဘသားတို့ ဖြိုလေသော် တစ်လ၊ နှစ်လ ဖြိုရုံမျှဖြင့် ပြိုရုံမက ပျောက်ကွယ်တတ်ပါကလားဟု သင်္ခန်းစာသစ်တွေ တိုးလာ၏။ ရတနာသတ္တုသိုက်တွေရှိခြင်းက လှပသောမိန်းမပျိုကလေးကဲ့သို့ အန္တရာယ်များလွန်းလှသည်။ (မယ်ငွေဥ၊ 7days ဂျာနယ် / ခင်ဦး / ကျော်သန်း၊ ၂ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂) တိတ်တိတ်လေး ကွဲနေကြသည်။ တော်တော် အရည်ထူနေပုံရတယ်။ တပ်ထဲမှာ မှန်ကန် တယ်ဆိုတဲ့ စကားခေတ်စားနေတာ။ ဆိုလိုရင်းက မှန်ရင် ကန်ခံရမယ်။ ဇိမ်ချင်ရင် ငြိမ်နေပေတော့။ တတ်ရင်တော့ ငတ်ပြီပေါ့။ ထက်ရင်လည်း မျက်တော့တာဘဲ။ (ဗိုလ်အောင်မြေ၊ ဖဘ၊ ၈ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) တယ်ပြီး ကွက်ကျော်မြင်နေကြပါလား။ တိုင်းပြည်ကို နိူင်ငံရေးလက်တည့်စမ်းစရာတခုအဖြစ် သတ်မှတ်တာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါ။ တိုင်းပြည်နစ်နာလှပါတယ်။ တိုင်းပြည်ကို အစိုးရပိုင်တာမဟုတ်ဘူး။ တိုက်ပွဲတွေမှာ တတ်နိူင်တဲ့ ဘက်က ကူညီဦးမှာပါ။ ဘယ်သူတွေ ကန့်ကွက် ဆန့်ကျင်ပါစေ၊ ဘယ်လိုပြောပြောပါ။ ကျနော် အဖိနှိပ်ခံ ပြည်သူဘက်က ဆက်ပြီး ရပ်တည်နေမှာပါ။ (ဟန်ဝင်းအောင်၊ ဧရာဝတီ၊ ၁၈ မတ် ၂၀၁၃) တွေ့ပါပြီ။ မြန်မာတွေ၊ စက်ဘီးတွေကိုယ်စီနဲ့ အလုပ်ပြီးလို့ အိမ်ပြန်ဖို့ မြို့ပြင်ထွက်လာကြတာ။ တိုင်းပြည်ဘဏ္ဏာကိုအလွှဲသုံးစားလုပ်၊ စစ်တပ်ကြီးတည်ထောင်ပြီးပြည်သူကိုသေနတ်မိုးအုပ်ချုပ်နေတာ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်လူမျိုးတွေကိုလူညွန့်တုံးအောင်လုပ်နေတဲ့ မျိုးဖျက်စိတ်ဘဲဖြစ်တယ်။ (ထွန်းအောင်ကျော်၊ ဖဘ၊ ၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၂) တိုင်းပြည်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ပြဿနာဆိုတာကို အရှိအတိုင်းလက်ခံဖို့လိုတယ်။ (ကိုကိုကြီး၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၂) တပည့်ရင်း ဖြစ်တာနဲ့အညီ အစွမ်းပြပါတယ်။ တော်ပီ ရေးလေ ရေးလေ ရင်ထုမနာလေပဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနေအထားကလည်း စစ်အာဏာရှင်တွေ၊ စစ်အာဏာရှင်တပိုင်းတွေ၊ စစ်အာဏာရှင်ဝန်းရံသူတွေ၊ စစ်အာဏာရှင် လက်ဝေခံတွေ၊ နောက်လိုက်တွေ၊ အစုအဖွဲ့တွေကလည်း ပြည်သူတွေကို နှစ်ပေါင်းများစွာ အနိူင်ကျင့် ဖိနှိပ်ထားတယ်။ အဲသည်မှာ ပြည်သူတွေကလည်း အဲဒီ လူတွေ၊ အစုအဖွဲ့တွေ၊ အခြေအနေတွေကို စက်ဆုပ်ရွံရှာ ကြောက်လန့်နေတာကနေပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အကြောင်းပြုပြီး ပြောရဲ ဆိုရဲဖြစ်လာတယ်။ အကြောက်တရားကို ဖယ်ရှားဖို့ ကြိုးစားလာကြတယ်။ နည်းလမ်းတွေ ရှာလာတယ်။ ဒီအင်အားစု ၂ ခုရဲ့ အားပြိုင်မှုဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်က မြင်တယ်။ လူထုက ဖြစ်နိူင်မယ်ဆိုရင် အဲသည်အာဏာရှင်နဲ့ နောက်လိုက်နောက်ပါ အားလုံးကို ဘင်္ဂလားပင်လယ်ထဲ ကန်ချလိုက်လို့ ရရင် ကန်ချပစ်ချင်နေတာ ကြာပြီ။ (ဦးဝင်းတင်နဲ့ မေးခွန်းများ၊ မိုးမခ၊ မေ ၇၊ ၂၀၁၂) တိုင်းပြည်အတွက် ကောင်းတဲ့ အလားအလာတော့ မဟုတ်ပါ။ တွေ့ဖူးကြုံဖူးတော့ ပစ္စည်းလေး ဘာလေး သိမ်းထားရတာပေါ့။ တန်ဖိုးနည်း အိမ်ရာစနစ်က ပေါ်သင့်တာ ကြာပါပြီ။ တပ်မတော်သည် တိုင်းပြည်အတွက်၊ တိုင်းပြည်သည် တပ်မတော်အတွက် မဟုတ်။ စည်းကမ်းမရှိတဲ့စစ်တပ် ရှိနေမယ့်အစား အဲဒီစစ်တပ် မရှိတာ တိုင်းပြည်အတွက် ပိုကောင်းတယ်။ (အောင်ဆန်း) "တပ်မတော်သာအမိ တပ်မတော်သာအဖ လို့မပြောကြပါနဲ့၊ ပြည်သူသာအမိ ပြည်သူသာအဖ လို့သာ ပြောကြပါ။ ပြည်သူတွေကိုသာ ဂရုစိုက်ကြပါ" (ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော) တပ်မတော်ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ချစ်ကြည်လေးစားမှုကို ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ကိစ္စကြီးငယ်ဖြစ်ရင် တိုင်းရင်းသားတွေဘက်က အမြဲမှန်တယ်။ မင်းတို့ စစ်ဒေသ ဘက်က အမြဲမှားတယ်။ (ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဇော ၁၉၁၉-၂၀၁၂ / သူရတင်ဦး၊ ဧရာဝတီ၊ ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) တစ်မျိုးသားလုံး စည်းရုံးကြဖို့၊ သေရေးရှင်ရေးဖြစ်ကြောင်း၊ ရန်သူအားပေးတစ်စင် မထောင်ကြဖို့လိုကြောင်း နားချလိုက်ပါတယ်။ (တင်မိုး၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၈) တယောက်တပေါက်နဲ့ ပြည်သူကြားမှာ သွေးကွဲမှုမဖြစ်ကြပါစေနဲ့ လို့တော့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။ တရားဆိုတာညှာလဲမညှာ၊ ညာလဲမညာ၊ သာစေနာစေမရှိ၊ ပကတိ သူ့သဘောသူဆောင်ခြင်းပဲ။ တရားစွဲမယ်။ ဓါးဆွဲမယ်။ တိရစ္ဆာန်များတောင် စည်းဆိုတာနားလည်ပါသည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာ လူ့ဆန္ဒမပါဘဲ တရားဥပဒေအတိုင်းဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်။ တရားမျှတမှုနှင့်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိသေးသလို၊ နောင်တွင်လည်းဖြစ်ပေါ်လာဖို့အလားအလာမရှိသေးပါ။ တရားရုံးက ကြာဦးမှာ၊ မီဒီယာမှာ ပါသွားရင် သူတို့ ပျာယာခတ်ပြီး လာညှိ ကြတာ များတယ်။ တော်လှန်ရေးသမားကောင်းဖြစ်ရမယ်။ တော်လှန်ရေးသမားဆိုတာ သင်္ချိုင်းမရွေးဘူး။ (ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ) တော်လှန်ရေး အဓွန့် ရှည်ပါစေ။ တော်လှန်ရေး အောင်ရမည်။ တာဝန်ရှိတဲ့ဆရာတော်ကြီး တွေအနေနဲ့မဟနအဖွဲ့အတွင်းမှာရော အောက်ခြေသံဃာထုအတွင်းမှာရော အမှန်တကယ်ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာ ပြန်လည်သုံး သပ်ဖို့လိုနေပြီဖြစ်ကြောင်း လျောက်ထားပါတယ်ဘုရား။ တသွေးတသံတမိန့် တသဘောတည်းနဲ့ တိုင်းပြည်ကို ပုံစံသွင်းချင်သူတွေမို့ ပါတီစုံ၊ အသံစုံ၊ အရောင်စုံ၊ ဘာသာစုံ၊ လူမျိုးစုံတွေကို သီးခံ ခွင့်လွှတ် နားလည် ဆင်ခြင် ညှိနှိုင်းပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ပုံဖော်တည်ဆောက်ရတဲ့ ဒီမိုကရေစီစနစ်အတွက် သူတို့မှာ အချိ်န်ယူနေရဦးမှာပဲလို့ အတွေးပေါက်မိပါတယ်။ (မောင်ရစ်၊ ၁၆ ဇွန် ၂၀၁၂) တသက်လုံး ထိုင်စားလို့ ရသွားပြီ။ ထောင်ကျတယ်ဆိုတာ 'အ' လို့ပါ။ သမိုင်းအရ ထောင်မကျဘူးသော နိူင်ငံရေးသမား သုံးဦးမှာ အောင်ဆန်း၊ ကိုယ်တော်မှိုင်း နှင့် မောင်စွမ်းရည် ဖြစ်သည်။ (မောင်စွမ်းရည်၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို၊ ၂၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) ထောင်ဆိုတာ လူကောင်းတစ်ယောက် မနေသင့်တဲ့ အရပ်ပါ။ အနေဆင်းရဲ၊ အအိပ်ဆင်းရဲ၊ အစားဆင်းရဲ နဲ့ သုခ ကင်းမဲ့တဲ့ မှောင်မိုက်သော အဋ္ဌာန တစ်ခုပါပဲ။ ထောင်ထွက်ဖြစ်လျှင် ထုတ်ဝေမည်။ (လင်းရောင်၊ ဖဘ၊ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) ထိုးနှက်ချက်တွေကို တန်ပြန်ဖို့ အင်အားကောင်းရမယ်။ ထွက်ပေါက်မရှာ ဖေါက်ထွက်ပါလော့။ ထမင်းငတ်နေတဲ့လယ်သမားတွေ အများကြီးရှိတယ်။ (စုစုနွေး၊ ၂၅ မေ ၂၀၁၂) ထမင်းရည်ပဲ သောက်နေပါမယ်။ ထောက်လှမ်းရေးဆိုတာ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်ပဲ။ ထောက်လှမ်းရေးမှာ စာရင်းပေါက်သွားတယ်။ ဒါက ကစားပွဲတစ်ခု၊ လှည့်ကွက်တစ်ခုပါပဲ။ (ဘာတီးလင့်တ်နာ၊ YPI ၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ / သူရိန်ဝင်း) ဒါကတော့ ၇တန်းကျောင်းသား လောက်တောင်သိပါတယ်။ ဒါကတော့ ရိုးရိုးသားသား ကျနော် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါးကိုဒါးချင်း လှံကိုလှံချင်း ရင်ဆိုင်ဘို့သာရှိတယ်။ (ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်း) ဒုက္ခပါပဲ။ ခက်တော့နေပြီ။ ဒီစစ်တပ်ကဘယ်တော့မှ ကြည်ကြည်သာသာလုယူထားတဲ့ ပြည်သူ့အာဏာကိုပြန်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒေါ်စုနေရာမှာ နည်းနည်းလောက် ၀င်ပြီး ခံစားကြည့်တာနဲ့တင် အတော်ခေါင်းခြောက်ပါတယ်။ ဒေါ်စုအရိပ်ခိုပြီးနောက်ကလိုက်မှာပေါ့။ ဒီတော့ ကျွန်မတို့ ပြည်သူတွေဟာ ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ပိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီမိုကရေစီအရေးမှာ သဲတစ်ပွင့် အုတ်တစ်ချပ် တတ်နိူင်တဲ့ဘက်က ပါဝင်ကြပါလို့ ကျွန်မအနေနဲ့ မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။ (အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၂၂ မေ ၂၀၁၂) ဒီတိုင်းဆက်သွားရင်တော့ ပြည်သူမုန်းတဲ့ တပ်မတော်ကြီးဖြစ်သွားမှာပါ်။ ဒုတိယ ဒီပဲယင်း ဖြစ်စဉ်ကဲ့သို့ ဖြစ်မည်ကို စိုးရိမ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ကစားနေတာပါ။ ဟိုဘက်လှည့်မြှောက်ပေး၊ ဒီဘက်လှည့်မြှောက်ပေးလုပ်နေတာပါ။ တင်းလိုက်လျော့လိုက်၊ ခြောက်လိုက် ချော့လိုက် လုပ်နေတာပါ။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ၁၀ ဇွန် ၂၀၁၂) ဒီနေရာက ဦးလေးရဲ့ အိမ်နေရာ၊ ဟိုဘက်နားက ဦးလေးပိုင်တဲ့လယ်၊ ခုတော့ အားလုံး မင်းစာ ဖြစ်သွား ပြီကွယ်။ ဒီနေ့လက်ပံတန်းတောင်းကိစ္စဟာလူမှုရေးအရကော၊ စီးပွားရေးအရကော၊ နိူင်ငံ့အကျိုးစီးပွားနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းအရကော တရားမျှတမှုမရှိဘူး။ လူထုခေါင်းဆောင်ဆိုတာလူထုနဲ့ အမှန်တရားဖက်မှာရပ်တည်ရမယ်။ ဒီအခြေအနေတွေကိုသိရက်သားနဲ့အလယ်မှာရပ်တယ်ဆိုတာကြားပွဲစားအဆင့်ပဲရှိတယ်။ (ရဲထွဋ်၊ နယူးယောက်မြို့၊ ၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂) ဒီပြဿနာက ရေနဲ့ ဖျန်းတာပဲ၊ ဒါပေမဲ့ ငရဲပြည်က ရေဖြစ်နေတယ်။ သမိုင်းတွင်မည့် မီးသင့်သင်္ကန်း။ (သီတဂူဆရာတော်၊ လက်ပံတောင်းတောင် ဆန္ဒပြပွဲ၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ / ဗွိုက်(စ)) ဒီဘုန်းကြီးတွေက အမေ့ခံလူသားတွေ၊ အမေ့ခံနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအဖြစ်နဲ့နေရတယ်။ (ဦးဂမ္ဘီရ ၏အသက်(၆၃) နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော မိခင် ဒေါ်ရေး / စူးရှ၊ The Myanma Age ၊ ၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂) ဒီဘက်ခေတ်မှာတောင် နေပြည်တော်ဆိုပြီး လူမသိသူမသိ မြို့တော်အသစ် တောကြီးမျက်မည်းထဲ တည်ခဲ့သေးတာပဲ။ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘဏ္ဍာတွေကို ဘယ်လိုသုံးစွဲပြီး တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အခုထက်ထိ ဘယ်သူမှ ရှင်းရှင်းလင်း မသိကြပါဘူး။ (အောင်ဇော်၊ ဧရာဝတီ၊ ၁၁ မေ ၂၀၁၂) ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကူးပြောင်းရင်၊ တပ်မတော်မှာလည်း အကျင့်တွေ ပြောင်းရတော့မယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်မှာ အတိုက်အခံပါတီဆိုတာ ရှိစမြဲပါ။ ထိုအတိုက်အခံပါတီရှိမှ နိုင်ငံတော်တိုးတက်တာပါ။ ဒီမိုကရေစီမှာအများစု၏ဆန္ဒကိုလိုက်နာပြီးအနည်းစု၏ဆန္ဒကိုလည်းအများစုကလေးစားလိုက်နာရတယ်။ ဒီမိုကရေစီလိုလားတဲ့ အစိုးရမျိုး ထူထောင် ရမယ်။ ဒီမိုကရေစီလိုလားသော အတိုက်အခံများကို တိုက်ခိုက်သည်။ ဒီမိုကရေစီအတွက် လူတိုင်းမှာ တာဝန်ရှိတယ်။ (အောင်ဆန်းစုကြည်) ဒီမေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေကြည့်စေချင်ပါတယ်။ “ဒီမှာဦးကြီး ကျွန်တော်ဟာရှေ့နေဘဲ၊ ဦးကြီးကမတရားခံရတာ။ ဒီအမှုဟာရုံး ရောက်ရင် နိူင်ကိုနိူင်ရမယ်။ ဦးကြီးသာအမှုတင်ပါ။ ကျွန်တော်လိုက်မယ်။ ရှေ့နေခတစ်ပြားမှပေးစရာမလိုပါဘူး။ ကျွန်တော်မတရားမှုကိုမကြိုက်လို့ပါ။” (စောဘဦးကြီး၊ ကေအင်ယူ / မောင်ကျော်၊ ဖဘ၊ ၃ သြဂုတ် ၂၀၁၂) ဒါများအဆန်းလုပ်လို့ ။ လေတပ်ဦးစီးချုပ်ဆီကို ဖုန်းဆက်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲ။ ဒုံရင်းက ဒုံရင်း ပါပဲ။ လူမှန် နေရာမှန် မရှိလို့ကတော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်း ပါပဲ။ ဒီရာထူးနေရာကိုလဲ အဖါးတော်လို့ ပေးထားတာကတော့ ကလေးကအစ သိပါတယ်။ ဒီရေးသားချက်တွေကို ကြည့်ရင် ဗိုလ်မှူးဇော်ဌေးကို နာဇီဇော်ဌေးလို့ ခေါ်ရုံမှတပါး တခြားသင့်တော်တဲ့ နာမည် မရှိတော့ပါဘူး။ ဒီလူတွေငွေရမယ်ဆိုရင် ဘာမဆိုလုပ်မယ့်အစားထဲကပါပဲဗျာ။ (ဆွေသန့် - နယူးယောက်၊ ၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) “ဒီလူတွေမှာ ကြောက်စိတ် အရမ်းကြီးနေတုန်းပဲ။ သူတို့တွေဟာ အမှန်တရားကိုလည်း မဖော်ထုတ်ရဲဘူး။ အမှန် တရားကိုလည်း ရင်မဆိုင်ရဲဘူးသေးဘူး။ သူရဲဘော ကြောင်နေသေးတုန်းပဲလို့ ကျနော်မြင်တယ်” လို့ ဒါရိုက်တာ ချိုတူးဇော်က ဧရာဝတီကို ပြောပါတယ်။(၂၅ မေ ၂၀၁၂) ဒီလိုပဲ ကောက်ချက်ချရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ မီးလောင်ပြီးတိုင်း မြန်မာတွေက မြို့သစ်ကို ဆုတ်ဆုတ်ပေးရတယ်။ ကျနော်တို့ မန္တလေးသူ၊ မန္တလေးသားတွေ အပြောနဲ့ဆိုရင် ကြွက်နဖားတောင်ခြေ ရောက်တော့မယ်လို့ ပြောတယ်။ (ညီပုလေး၊ ဧရာဝတီ၊ ၁၁ မေ ၂၀၁၂) ဒါလေးများ ဗမာဆေးစား ပျောက်ပေါ့။ ဒေသခံပြည်သူတွေ လယ်သိမ်း၊ ယာသိမ်းခံရလိုက်တာပဲ အဖတ်တင်ခဲ့တယ်။ ဒါဟာ စဉ်းစားစရာ အများကြီး ရှိတယ်။ ဒါဟာ အင်မတန် စိတ်ပျက်စရာကောင်းတဲ့ အလားအလာပဲ။ ဒီအကြောင်းကို ပြောတိုင်း အလွန် ၀မ်းနည်းပါတယ်။ ဒီအစိုးရကြောင့် ဒို့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲရတာ။ (ဒေါက်တာမင်းဇော်ဦး၊ Voice ၊ ၁၃ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ဒီအစိုးရဟာ လူတွေကို ငွေကြေးချို့တဲ့တာထက်ကို စိတ်ဓါတ်တွေပျက်စီးချွတ်ယွင်းအောင်လုပ်တယ်။ အကြောက်တရားနဲ့ အမြဲတန်းကြောက်နေအောင်လုပ်တယ်။ (ကြည်ကြည်လွင်၊ ၁၈ မေ ၂၀၁၂) ဒါ အမြင့်ဆုံးပြစ်ဒဏ်တွေကို ချမှတ်လိုက်တာပဲ။ ကျနော်တို့ကတော့ မကျေနပ်ဘူး။ (ကိုဖြိုးဝေအောင်၏ရှေ့နေ ဦးကျော်ဟိုး၊ ဧရာဝတီ၊ ၈ မေ ၂၀၁၂) ဒါအင်မတန် ရိုင်းစိုင်းပါတယ်ရှင်။ ဒေါင်းအိုးဝေတွေ တွန်ကစေပါစို့။ နောက်ကြောင်းမလှည့်ဘူး ပြောထားတယ်၊ ရှေ့ရောက်အောင်လည်း ချီတက်ပါဦး။ နိူင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်း ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်တာဟာ ရူးနှမ်းတဲ့ကိစ္စပဲ။ တကယ့်အမှန်က အဲဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ အစိုးရက အလွန်ကို သိမ်မွေ့တဲ့ ကစားနည်းတစ်မျိုးကို ကစားနေတာပါ။ လေးနက်တဲ့ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်နေပြီလို့ နိူင်ငံခြားသားတွေ ယုံကြည်အောင် လုပ်ပြနေကြတာပါ။ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေကတော့ သူတို့ကို ဖိအားပေး လှုပ်ရှားနေတာ ပဲလို့သိကြတယ်။ (ဘာတီးလင့်တ်နာ၊ YPI ၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ / သူရိန်ဝင်း) နိူင်ငံတကာ ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေများနှင့် အမြီးအမောက် မတည့်သော စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တော့ တန်းတူမထိုင်သင့်ဟု နားလည်သည်။ နိူင်ငံတော်အကြီးအကဲ၏လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရန် တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ နိူင်ငံရေးဆိုသည်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ နေ့ချင်းညချင်း ပြောင်းလဲသွားနိူင်သည့် အခြေအနေမျိုးလည်း ရှိတတ်ပေရာ လုံးဝမဖြစ်နိူင်ဟုတော့ မဆိုဝံ့ချေ။ (ရဲထွန်း - သီပေါ၊ ဗွိုက်(စ)၊ ၂၇ မတ် ၂၀၁၃) နိူင်ငံရေးတွေမပြောကြေးနော်။ နိူင်ငံရေး တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ အဓိက ကတော့ ရိုးသားမှုရှိဖို့ပါပဲ။ နိူင်ငံရဲ့ပေါ်လစီကို မိမိတို့စိတ်တိုင်းကျပြုလုပ်ဖို့ နဲ့ခြယ်လှယ်နိူင်ဖို့ ဘာမဆိုလုပ်နိူင်တဲ့ အင်အားစု တွေရှိတယ်။ နိူင်ငံရေးပြဿနာတွေ မပြေလည် ရင် ငြိမ်းချမ်းရေးမရနိုင်ပါဘူး။ နိူင်ငံရေးမှာ ထာဝရ ရန်သူ၊ ထာဝရ မိတ်ဆွေ ဆိုတာ မရှိဘဲ ထာဝရ အကျိုးစီးပွားသာ ရှိတယ်။ (ဌေးအောင် - အန်ဒီဒီ၊ အာရ်အက်ဖ်အေ၊ ၆ မတ် ၂၀၁၃)နိူင်ငံရေးလောကမှာ အနစ်နာခံပြီး စွန့် လွှတ်ခဲ့တဲ့လူတွေရှိသလို ခုတုံးလုပ်ပြီး ချမ်းသာသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ နိူင်ငံရေးလုပ်တဲ့ ကျောင်သားတိုင်းက အိမ်တွေမှာ မနေကြတော့တာများတယ်။ နိူင်ငံရေးလက်နက်ကို ထုတ်သုံးပါတယ်။ နိူင်ငံရေးလုပ်လာတဲ့သူက ဘယ်ရောက်ရောက် နိူင်ငံရေးလုပ်နေကြတာပါဘဲ။ (ဆရာတော်ဦးသုန္ဒရ၀ံသ၊ ၈၈ အရေးအခင်းကာလက မြင်းခြံခရိုင် သပိတ်ဥက္ကဋ္ဌ / အရှင်ပညာနန္ဒ၊ မိုးမခ၊ ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) နိူင်ငံရေးသမားအစစ်အမှန်တွေနဲ့ မျိုးချစ်ပြည်ချစ်တွေ ဘယ်တောမှ မဖါးဘူး။ ဒူးမထောက်ဘူး။ နှစ်ဦးလုံးက အလိုတူအလိုပါ။ နောက်ထပ်လျှော့ရင် ပုဆိုးဘဲ လျှော့စရာရှိတော့တယ်။ နည်းနည်းတော့ လိုလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ နည်းနည်းဘေးရောက် သွားတာပေါ့။ နောက်ပိုင်း စစ်အာဏာရှင်တွေ တက်လာတော့လည်း ပိုလို့တောင် ဆိုးသွားပါတယ်။ နဖူးပေါ် လက်တင်ပြီး စဉ်းစားကြပါဗျာ။ နာမည်ကြီး ပုဂ္ဂိုလ်တဦးအဖြစ်မှ နိူင်ငံရေးသမားဖြစ်လာပြီ။ နားမျက်စိ ပိတ်ထားတာဘဲ။ နာမည်တွေက သင်္ဘောနာမည်လိုလို၊ ကားဂိတ်နာမည်တွေလိုလို အများစိတ်ထဲမှာ ရယ်စရာတွေ ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ နောက်လိုက်တွေက ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်ကို မြှင့်တင် သလိုလို ဘာလိုလိုနဲ့ ချောက်တွန်းကြတဲ့ မြန်မာ့နိူင်ငံရေး အစဉ်အလာကြီးပေါ့တော်။ (ငြိမ်းရွှေ၊ အာရ်အက်ဖ်အေ၊ ၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) နှစ်အိမ့်တအိမ် အ၀င်အထွက်ရှိတယ်။ ပွဲကြည့်လို့ကောင်းလာပြီ။ ပွဲစားက သေသေချာချာ သွန်သင်ပေးထားတာ။ ရဲနဲ့တွေ့ရင် ဘယ်လိုဆက်ဆံ၊ လဝက ကို ဘယ်လို အချိုသပ်၊ ဆရာဝန်နဲ့ဆေးစစ်ရင် ဘာတွေဖြေ၊ အကုန် ဇာတ်တိုက်ထားပြီးသား။ (စိုးမင်း - ဆရာဝန်၊ အမ်း၊ ဖဘ၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) ပြောင်းချုပ်ထားတဲ့ အဝေးကထောင်ကို ကလေးပါခေါ်ခေါ်သွားပြီးတွေ့ခဲ့ရတာ ကရိကထ များလိုက်ပုံများ မပြောပါနဲ့တော့။ ပုခုံးနှစ်ဖက်ကြားမှာ ခေါင်းပေါက် နေတာချင်းတူတူ လူဟာလူပဲ။ ပါးစပ်စည်းကမ်းမရှိ ပြောချင်ရာပြော၊ ကိုယ်ပြောတဲ့စကား ဘယ်ရောက်လို့ ရောက်မှန်းမသိ။ ပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူက မှန်တော့လည်း တရားမစွဲနိုင် မလုပ်နိုင်တာနဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ ရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ သူကနိုင်ပြီး မတရားတာတွေ ဖြစ်နေတယ်ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ဦးကြီးမြင့်ကပြောသည်။ (၅ ဇွန် ၂၀၁၂) ပြင်စရာရှိရင် ပြင်ရမယ်။ ဒါဘဲ။ ပညာ ဘယ်လောက်တော်တော် ဗဟုသုတ မရှိတဲ့ သူနဲ့ဆွေးနွေးရတာ အလကားပဲ။ ဒီလိုပဲ ထင်မိတယ်။ (အညတရစစ်သည်တော်တစ်ဦးရဲ့ရှေ့ တန်း ဘဝ ဒိုင်ယာရီ / နစ်နေမန်း၊ ဖဘ၊ ၇ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃) ပညာ မတတ်တဲ့ မျိုးဆက်ကို ဖြုတ်ပစ်ရမည်။ (ရှင်ဦးသောပါက၊ ဧရာဝတီ၊ ၁၆ သြဂုတ် ၂၀၁၂) ပညာရှင် အမှန်အကန်တွေဟာ ဘယ်သူ့ကိုမှ ဖေါ်လံဖါး မလုပ်ဘဲ အဖြောင့် ဘဲရပ်တည်တယ်။ (သိန်းဝင်း၊ ဖဘ၊ ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ပြဌာန်းထားတဲ့ တရားဥပဒေ စည်းမျဉ်းအတိုင်းလုပ်ရင် အစိုးရမင်းကို ကြောက်စရာမလိုပါ။ ပြည်တွင်းကနိူင်ငံရေသမား၊ နယ်စပ်ကတော်လှန်ရေးသမား ၊ တတိယနိူင်ငံတွေကလှုပ်ရှားသူအဟောင်းကြီးတွေဟာ ယနေ့ အထိ အပြောင်းအလဲကို မခံစားရသေးပါဘူး။ ပုတီးကိုင်မလား။ သေနတ်ကိုင်မလား။ (ဗိုလ်သန်းရွှေ) ပါတီတွင်း ဒီမိုကရေစီမရှိဘဲ တဦးတည်းသဘောနဲ့ ဆုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်နေရင် ပါတီဟာ အနှေးနဲ့အမြန် ကျဆုံးနိူင်ပါတယ်။ ပြိုင်တူတွန်းလျှင် ရွေ့နိူင်ပါသည်။ ပြောင်းတော့ ပြောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ မပြောင်းဘူး။ (လူထုစိန်ဝင်း၊ Eleven ၊ ၈ ဇန္န၀ါရီ ၂၀၁၂) ပေးတဲ့ အပစ်ဒဏ်ကို ခံယူမယ်။ ပြည်ထောင်စုကြီးပြိုကွဲတော့မှာကို လက်မတင်လေး ကယ်တင်လိုက်ရသည်။ (ဗိုလ်နေဝင်း၊ ၁၉၆၂) ပြောနေစရာတောင် မလိုဘူး ထင်ပါတယ်။ အားလုံး သိပြီးသားတွေ ပဲလေ။ ပြောပြရင် သဘောမကျ၊ သင်ပေးရင် မယဉ်ကျေး၊ ပြန်ပြောရင် ခံပြောသော၊ စားပြီးနားမလည်သော သူများနှင့် အရှိတရားကို သတိမထားပဲ ငပိစားရအုံးမည့် အခြေအနေများကို စိုးရိမ်လို့နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပြောရက်တယ်ဗျာ။ (ထွန်းလွင် - ဒေါက်တာ၊ မိုးလေဝသပညာရှင်၊ သစ်ထူးလွင်၊ ၂၆ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) ပြောရရင်တော့ မကောင်းပါဘူး။ ပြောင်းလဲနေပြီလို့ မမြင်ပါဘူး။ ပြောင်းလဲဖို့ ခြေလှမ်းစနေပြီလို့ပဲ မြင်ပါတယ်။ (နိူင်ယက္ခ၊ မဇ္စျိမ၊ ၁၀ မေ ၂၀၁၂) ပေါက်လိုက်ရင် ယူဂျီတာဝန်ခံနဲ့ထိပ်ပိုင်းကချည်းစ၊ သတင်းပေါက်တယ်။ ပြည်သူတွေ ဒီမိုကရေစီစိတ်ဓာတ်တွေ၊ ဒီမိုကရေစီအရည်အသွေးတွေ ပြည့်ဝလာအောင် စာအုပ်စာပေများကို များများဖတ်ရှကြဖို့ပါ။ (ဘိက္ခုဓမ္မပိယ - ယူအက်စ်အေ) ပြည်သူတွေဟာ သူတို့နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အစိုးရကိုပဲ ရတယ်။ ပြည်သူတွေ အကျိုးအတွက် ပိုပြီးထမ်းဆောင်နိူင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ပြည်သူတွေ အယုံအကြည် မရှိမှာစိုးလို့ သိုသိုသိပ်သိပ်ပဲ ဒီကိစ္စကို လုပ်ဆောင်နေကြတာ။ ပြဿနာမရှိဘူး ဆိုလည်းပြီးတာဘဲ။ ပြည်သူနဲ့အစိုးရ အားပြိုင်မှုကို အတိုက်အခံက ကြားဝင်မယ်ဆိုရင် အတိုက်အခံနဲ့အစိုးရ အားပြိုင်မှုအသွင်ပြောင်းသွားပြီး ပြည်သူက မြေဇာပင်ပိုဖြစ်သွားနိူင်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ ပြဿနာတိုင်းမှာ အတိုက်အခံပါတီဟာ ကြားဝင်ဖြေရှင်းမယ်ဆိုခဲ့ရင် အစိုးရနဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်လည်း အကျိုးသိပ်မဖြစ်စေနိူင်ပါဘူး။ အတိုက်အခံပါတီကိုယ်တိုင်လည်း အကျိုးမဲ့စေနိူင်ပါတယ်လို့ သုံးသပ်မိပါတယ်။ (မောင်ပါလ၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃) ပြည်သူလူထုကို ဘယ်တော့မှ သစ္စာမဖောက်ဘူး။ ပြည်သူ လူထုကိုလက်တစ်လုံးခြားမလှည့်ဖျားသင့်ပါ။ ပြည်သူလူထုမယုံမကြည်ဖြစ်ခံရတဲ့အစိုးရဟာ နိူင်ငံကိုတိုးတက်အောင်မလုပ်နိူင်ဘူးဆိုတဲ့ အဆိုလေးကိုလဲ သတိရမိတယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ သဘောထားနဲ့ လုံးဝဆန့် ကျင်ပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့ပါတီဟာ နောက် ရွေးကောက်ပွဲမှာ သေချာပေါက်ရှုံး မှာပဲ။ ဘယ်လိုမှ ရပ်တည်လို့မရ တော့ဘူး''ဟု လွှတ်တော်အတွင်း အဆိုနှင့် မေးခွန်းများ ကန့်ကွက် ပယ်ချခံရခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ စာရေးဆရာမောင်ဝံသက သုံးသပ် ပြောကြားသည်။ (သစ်ထူးလွင်၊ ၂၉ သြဂုတ် ၂၀၁၂) ပြည်သူလူထုအားစော်ကားသလိုပြုမူခြင်းများဖြင့် လက်ရှိပြသနာကို ဖြေရှင်းနိူင်မည်မထင်ပါ။ (နီနီမာ - ပေါင်းတည်၊ မိုးမခ၊ ၂၅ မေ ၂၀၁၂) ပြည်သူလူထု အုတ်အော်သောင်းနင်းသိရှိသွားကြမည်ဖြစ်သောကြောင့် နှုတ်ပိတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ပြောင်းသလိုလိုနဲ့ မပြောင်းပါဘူးရှင်။ ပြည်သူ့အစိုးရ ဖြစ်ချင်ရင်၊ ပြည်သူ့ဆန္ဒ လေးစားပါအုံး။ ပြည်သူ့အရေး ကိစ္စမှာ ပတ်သက်ပါ။ ဖျက်ဆီးတဲ့သူတွေကို ကိုးကွယ်နေကြတာကိုး။ ဖြစ်တာ မဖြစ်တာတော့ ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ကိုယ့်ကံပေါ့လေ။ ဖွတ်တွေလုပ်ရင်တော့ ကောင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက် မဖြစ်နိူင်တာ သေချာတယ်။ (မွန်းဒီပါ၊ ဖဘ၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) ဖက်ဒရယ် အကျဉ်းသားတို့ မည်သည် အိမ်ပြန်ရိုး ထုံးစံ မရှိဘူး။ (မင်းလွင် - ရှမ်းပြည်၊ ရှမ်းသံတော်ဆင့် / မဇ္ဈိမ၊ ၃၁ မတ် ၂၀၀၇) ဖိနှိပ်သူကိုမျက်စ မပစ်ပါနဲ့။ (လှတင်အောင်၊ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသား၊ ကွယ်လွန်) ဖွတ်မြီးနှင့်ဖွတ်ချည်ခြင်း ဖြစ်၏။ ဖယောင်းတိုင်တွေကို ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ထွန်းပြီး မီးလေးပိတ်ထားလိုက်ကြပါ။ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်။ (ကိုကိုလှိုင်၊ ၂၄ မေ ၂၀၁၂) ဖယောင်းတိုင်မီးနဲ့ နေပြည်တော်ကို မီးလောင်တိုက်သွင်းမှာကို သူတို့ သိပ်ကြောက်ပါတယ်။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၂) ဖိရင်ကြွမည်၊ ထိရင်ချမည်။ ဖျက်လိုဖျက်ဆီးလုပ်တဲ့အထဲမှာ သူအများဆုံး ပါဝင်ပါတယ်။ ဒီလိုလူတယောက် အနောက်ကိုရောက်သွားတာတော့ တိုင်းပြည်အတွက် အများကြီးကောင်းမယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ (အောင်လင်းထွဋ်၊ ဗွီအိုအေ၊ ၁၇ မေ ၂၀၀၂) ဖြစ်လာ မယ့်အရာကိုလည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းပေးပါမယ် ဆိုတာ ၀န်ခံကတိပြုပါတယ် ဆိုတဲ့ စာသား လက်မှတ်ထိုးခဲ့ရတာပါ။ ဖြစ်လေရာဘဝမှာ တင်အောင်မြင့်ဦးနဲ့ မတွေ့ရပါစေနဲ့၊ မကြုံရပါစေနဲ့၊ သူရှိတဲ့နေရာလည်းမရောက်ရပါစေနဲ့၊ ကိုယ်ရှိတဲ့ နေရာလည်းပဲ သူမရောက်လာပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းဆန္ဒပြုခဲ့ဝန်ကြီးများလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဗဟိုဦးစီးစနစ်ဆိုတာ ကျတော်တို့စီမံချက်မှာ လုံးဝမပါဘူး၊ ဒါပေမယ်လို့ လုံးဝကင်းနေတယ်လို့ ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ်လို့ ဒီကနေ့ ၁၀ ရက်နေ့ကစလို့ ဗဟိုဦးစီးစနစ် မရှိတော့ဘူးလို့ ကျတော်ဒီလိုပဲပြောမယ်။ (ဥာဏ်ဝင်း၊ ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင်အဖွဲ့ဝင်၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ၁၀ မတ် ၂၀၁၃) ဘုန်းကြီးကျောင်းအောက်မှခွေးတောင်သစ္စာရှိသည်။ ဘော်ငွေရောင်ပိတ်ကားးပေါ် ရှုမျော်ပါ။ (မြင့်ဝေ၊ စစ်ပညာနည်းပြ၊ တပ်ရင်း ၁၀၁ ဘုရားသုံးဆူနယ်မြေ ၁၉၈၉၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) ဘာညာစသည်ဖြင့်တွေ ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကွာ။ ဘယ်တော့၊ ဘယ်သောအခါမှ လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဘယ်ထောင်မှာ ထိန်းသိမ်းထားသလဲဆိုတာ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။ ဘိန်းပစ်ဖမ်း၊ ထဘီပစ်ဖမ်း၊ လူပစ်ဖမ်းတတ်တဲ့ သူတို့ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ဒါမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ ဘယ်သူမှ အာမမခံနိုင်ပါဘူး။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ၉ ဇွန် ၂၀၁၂) ဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိဘူး။ ဘာမှ ပြန်မပြောချင်တော့လောက်အောင် ပြည်သူ့ စိတ်ပျက်မှုကြီး ဖြစ်ခဲ့ကြရသည်။ (အယ်ဒီတာ၊ ပြည်သူ့ခေတ်၊ ၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃) ဘာမှန်း မသိဘူး။ ဘာမှန်းမသိရင်၊ ညာမှန်းမသိဘူး။ ဘာမှ အထွန့်မတက်ဝံ့ဘဲ၊ တံဆိပ်တုံးရှောရှောရှူရှူ ထုပေးပြီး၊ သတင်းစာထဲမှာ ကြေညာပေးခဲ့တာချည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘရာစီယာလောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့ အကြံနဲ့ ဆာစပိုင်ဒါလောက်တောင် အဆင့် မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်နဲ့ နိူင်ငံကို ဘယ်လိုများ အုပ်ချုပ်နေတာလဲ။ (တိမ်တမာန်၊ ဖဘ၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) ဘယ်လိုများ နားလည် သဘောပေါက်လိုက်ပါသလဲရှင်။ ဘယ်လိုမှ မြင်ပေးလို့ မရဘူးဗျာ။ ဘဝကို ပုံသေ မတွက်နဲ့။ ဘဝတွေပျက်နေတဲ့ မိသားစုတွေရဲ့  ကိစ္စတွေကို စဉ်းစားသင့်တယ်။ ဘ၀ပျက်သွားချင်လို့လား။ ဘဝရဲ့ ဆင်းရဲ ပင်ပန်းခြင်းဒဏ်တွေကြောင့် ဆုံးသွားရှာပြီ။ ဘယ်သူ့ကိုမှန်းမသိ ကျေးဇူးတင်မိတယ်။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ရန်သူလို သဘောမထားပါဘူး။ ဘယ်သူက လူဆိုး၊ ဘယ်သူက လူကောင်းဆိုတာ ကလေးကအစ၊ ခွေးကအစ သိကြတာ များပါတယ်။ ဘယ်သူ တွေပါးစပ်ကထွက်တတ်တဲ့ အလုံးလဲမသိဘူး။ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ဦး။ ဘာအကြောင်းပြချက်မှ မပေးဘဲ ခွင့်မပြု ဆိုတာ တခွန်းတည်းနဲ့ ပြီးသွားတာပါ။ မကောင်းကြံတဲ့ စိတ်နဲ့လုပ်တဲ့သဘောမို့ပါ။ မင်းက ခွက်ကျလွန်းအားကြီးတယ်။ မကောင်းတာက လူတွေပါ။ မကျေနပ်ရင် ၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ တွေ့မယ်။ မကျေနပ်ရင် တစ်ကပြန်စမယ်။ မကျေနပ်လို့ အတွေးအမျှင်တန်းမိလိုက်တယ်။ မကြာမီသမိုင်းပိတ်ကားပေါ်မှာ စောင့်မျှော်ကြည့်ရူ ကြပါစို့။ မကြားရတာလည်း ထူးခြားတယ်။ မကောင်းလို့ မကောင်းဘူးရေးတာ ပိတ်ပင်တယ် ဆိုတော့ စာပေလွတ်လပ်ခွင့် နဲ့ ပတ်သက်လို့ မေးခွန်း ထုတ်စရာတွေ များလာပြီ။ မြင်းခွာတချက်ပေါက်ရင် မီးဟုန်းဟုန်းတောက်စေရမယ်။ (အောင်ကျော်) မေးခွန်းလိုလို၊ သတင်းလိုလိုဟာမျိုးတွေနဲ့ ၀ါဒဖြန့်သတင်းတွေယူလာပြီး ကျနော်တို့ထံမှာ စနည်းနာ ၀ါဒဖြန့်သည်။ မေးစရာရှိလို့ခဏလိုက်ခဲ့ပါ။ မဲဆန္ဒရှင် ပြည်သူတွေက တာဝန်ကျေခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မတို့ပဲ တာဝန်ကျေဖို့ လိုပါတော့တယ်။ မြစ်ဆုံလည်း သဘာဝအတိုင်းရှိရတာ ကောင်းပါတယ်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းကို ရွေးချယ်လို့ရပေမယ့်အိမ်နီးချင်းကိုတော့ ရွေးချယ်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။ မှတ်ဉာဏ်တွေက အောက်နေပြီ။ မင်းတို့က ပိုက်ဆံရလို့လုပ်နေတာ။ ငါတို့က ထောင်ကျခံပြီးလုပ်နေတာ။ (ကျော်စိုးနိူင်၊ ဒီချုပ်၊ ၁၁ မေ ၂၀၁၂) မင်းတို့စတဲ့အလုပ် မင်းတို့ပြီးအောင် လုပ်ကြပါ။ (ဆရာကြီးဒေါက်တာသန်းထွန်းမှ မင်းကိုနိုင် အပါအဝင်(၈၈)ကျောင်းသားသို့ သြဝါဒစကား၊ ၂၉ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၅ / ဗေဒါလမ်း၊ ဖဘ) မှန်တာပြော ချမ်းသာပါစေဗျာ။ မတရားမှုဆိုတာ ဆိုက်ကွယ်ရာမရှိဘူး။ “မတရားမှုသည် ဥပဒေဖြစ်လာသောအခါ တော်လှန်ပုန်ကန်ခြင်းသည် တာဝန်တရပ်ဖြစ်သည်“ တဲ့။ ဒါဟာ ကမ္ဘာတဝှမ်းက လူထု တော်လှန်ရေးတွေမှာ လက်ကိုင်စွဲခဲ့တဲ့ ဥပဒေသ တရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဖိနှိပ်မှုဆိုတာ ရှိနေသရွေ့ ပုန်ကန်ထကြွမှုတွေ ဆိုတာကလဲ ရှိနေစမြဲပါပဲ။ (ခင်မမမျိုး၊ နိုဝင်ဘာ ၂၀၀၉) မတရားရင်တော်လှန်မှာဘဲ၊ မတော်လှန်စေချင်ရင် အရာရာကိုတရားသဖြင့်လုပ်ကြပါ။ လူဆိုတာအသိစိတ်ရှိတယ်၊ တိရစ္ဆာန် မဟုတ်ဘူး၊ အုပ်ချုပ်သူများနားလည်ပါ။ (သန်းဝင်း၊ ဖဘ၊ ၁၇ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃) များတိုင်းလည်းမမှန်သလို၊ နည်းတိုင်းလည်းမမှားပါဘူး။ မထင်ပေါ်လိုသောရဲဘော်ဟောင်းများစွာမှလည်း ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှ စောင့် ကြည့် နေကြပါသည်။ မီဒီယာကို မီဒီယာနဲ့တိုက်ရမယ်။ “မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံမှ စာထွက်လာသည်။ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်သာသနာရေးမှူး၊ မြို့နယ်သံဃနာယက အဖွဲ့၏ ခွင့်ပြုချက်ကိုရယူပြီးမှ တရားပွဲကျင်းပရန်” အမိန့်ကျလာခြင်းဖြစ်သည်။ မပြောဘဲနဲ့ကို တတိုင်းပြည်လုံးသိတယ်။ မဖြစ်နိူင်တာ မရှိဘူး၊ မဖြစ်သေးတာပဲ ရှိတယ်။ မိမိတို့ကိုယ်တိုင် လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ကြရမည်။ မမျှတရင်တော့ မမျှတဘူးလို့ ပြောရမှာပဲလေ။ မြန်မာနိူင်ငံရဲ့ပြဿနာက လုပ်သင့်တာတွကိုအရင်မလုပ်ဘဲ မလုပ်ရင်လည်းဘာမှမဖြစ် အရေးမကြီးတဲ့အရာတွေမှာ အချိန်တွေဖြုန်းလွန်းလှပါတယ်။ မာန်မာန မောက်မားပြီးတော့ နိူင်ထက်စီးနင်း လုပ်သည်။ မြန်မာပြည်မှာ လိုင်စင်ရ လူသတ်သမား၊ လိုင်စင်ရ မုဒိန်းသမား၊ လိုင်စင်ရ လူလိမ်တို့ လိုင်စင်ရ ထားကြတယ်လေ။ (ချိုတူးဇော်၊ ဖဘ၊ ၂၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) မြန်မာပြည်သူတွေကို လျှော့တွက်လို့ မရဘူး။ မြန်မာပြည်သူတွေ နုံအ နေသူမဟုတ်ပါ။ (နေမျိုးဇင်၊ ဖဘ၊ ၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂) မင်းမမှန်ရင် မင်းတရားခံဖြစ်မယ်။ (ဆရာတင်မိုး) မိမိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘဝတွေကို ဘယ်ထောင့်ကနေကြည့်မလဲ ဆိုတဲ့အချက်ဟာ နိုင်ငံရေးသိပ္ပံပညာရပ်မှာ အရေးပါတဲ့သုံးသပ်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ မိမိရပ်တည်ချက် ယုံကြည်မှု ဆိုတာကအရေးအကြီးဆုံးပါ။ မိမိအတွေးအခေါ်ကို မိမိကိုယ်တိုင် ဖေါက်ပြန်သွားသူမဖြစ် သင့်ဘူး။ မိမိလုပ်ချင်တာလုပ်နိူင်ဘို့ အဖွဲ့အစည်းရဲ အခြေခံမူဝါဒတွေကို အများသဘောနဲ့ဆန့်ကျင်ပြီး မပြင်ရဘူး။ မြန်မာလူငယ် အလုပ်လက်မဲ့ အချိုးအစားဟာ အလွန်မြင့်မားနေပါတယ်။ ဒါဟာ ချိန်ကိုက်ဗုံးတခုလိုဖြစ်နေပါတယ်။ (အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၁ ဇွန် ၂၀၁၂) မြန်မာလို မပြောတတ်ပေမယ့် မြန်မာမှတ်ပုံတင် ကိုင်ထားကြတယ်။ အာဏာပိုင်တွေကလည်း အရေးယူခြင်း မပြုတဲ့အပြင် တဖက်တလမ်းကနေတောင် လူကုန်ကူးတဲ့အမှုတွေမှာ ပါဝင်ပတ်သက်နေပုံရပါတယ်။ မြန်မာ့သမိုင်းဆိုတာ တကယ်တော့အလွမ်းဇာတ်ကြီးပါဗျာ။ (မောရစ်ကောလ်ရစ် / ဆရာနတ်မောက်ဘုန်းကျော် / ကိုညို၊ ဖဘ၊ ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) မြန်မာအစိုးရက အဲဒီလိုပဲ အမြဲစွပ်စွဲတယ်။ မယုံဘူးလား၊ လိုက်ကြည့်နိူင်ပါသည်။ မှန်ရာကို သစ္စာဆိုပါမည်။ မျက်ရည်လည်လာပါတယ်။ မလိုဘူး ငါ့ရုံးနားမှာလက်နက်တွေနဲ့အစောင့်အရှောက်တွေ မမြင်ချင်ဘူး။ ငါ့ကိုလုပ်ကြံမယ့်သူမရှိဘူး။ ချက်ချင်းဖယ်ပစ်ပါ။ (ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း / Htuu Sann / သစ္စာ၊ ဖဘ၊ ၁၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂) မှန်လား မှားလား ဆိုတာကတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲ လေ့လာဆုံး ဖြတ်ကြည့်ကြပါ။ မျှော်လင့်ရုံသက်သက်နဲ့တော့ ဘာမှဖြစ် လာနိူင်မှာမဟုတ်ပါ။ မြင်းလှည်းသံနဲ့ ခြူသံတွေ ပျောက်နေတယ်။ မှော်ဝင်သွားရင် တယ်ပြီးဘရိတ်အုပ်လို့ ရတာမဟုတ်ဘူး။ မင်းသားခေါင်းဆောင်းတဲ့ဘီလူးကို ပွဲထုတ်လိုက်တာပေါ့။ မသေခင် တရားရဖို့ ဘဲ လိုတယ်။ မသိတာတော့ ဟုတ်အံ့မထင်ပါဘူး။ မသောက်ဘဲနှင့် မူးချင်လာသည်။ မသိဘူးလို့များမထင်နဲ့ ပြည်သူတွေက “မြင်” ပါတယ်။ ပြည်သူတွေက “လျင်” တယ်။ (တင်မိုး / ထွန်းကျော်ငြိမ်း၊ 8888peoplepower ၊ ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) မည်သူမဆို လွတ်လပ်စွာ သဘောကွဲလွဲနိူင်ပါတယ်။ မုန်းသူမရှိ၊ ချစ်သူသာရှိ။ ရန်သူမရှိ၊ မိတ်ဆွေသာရှိ။ နိူင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ရန်သူကို မိတ်ဆွေ ဖြစ်အောင်လုပ်တာ။ (ဆရာကြီး ဒဂုန်တာရာ၊ ၁၈ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃ / နှင်းနှင်းမွှေး၊ ဖဘ / မျိုးမြင့်) မသိသေးလို့ လျှော့တွက်မိပါတယ်။ ယုံကြည်ချက်ကို ခုတုံး လုပ်ပြီးတော့ လိမ်ကြတယ်ဗျ။ (﻿ရွှေဟင်္သာသတင်း၊ ၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) ယုံချင်စရာတောင် မကောင်းတော့ဘူး။ ယုံချင်တဲ့သူကို ယုံလို့ရပါတယ်။ မိအေးတို့ကိုတော့ လာမယုံခိုင်းပါနဲ့။ အခါခါလည်း နာခဲ့ရပြီးပြီ။ (စိုးမင်း - ဆရာဝန်၊ အမ်း၊ ဖဘ၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) ယခုလို အဖြစ်အပျက်များကို နိူင်ငံတော်အစိုးရသို့ အကြိမ်ကြိမ် မေတ္တာရပ်ခံ တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့သော်လည်း ယခုတိုင် တစ်စုံတစ်ရာပြန်ကြားချက် မရှိပါ။ ယခင် အငွေ့အသက်များကမူ ယခုအထိ ရှိနေကြဆဲ။ ယူနီဖောင်းချွတ် စစ်ဗိုလ်လူထွက်များကြီးစိုးအုပ်ချုပ်နေသည့်နိူင်ငံတော်တွင်အအုပ်ချုပ်ခံလူထုအတွက်တရားရေးစနစ်နှင့်ဥပဒေများ သည်ဖိနှိပ်ရေးကိရိယာတန်ဆာပလာများသာဖြစ်ပါသည်။ (စစ်အောင်၊ 8888peoplepower ၊ ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ယာရှင်ကိုမျောက်မောင်းသောအဖြစ်များကို အမျိုးသားရေးစိတ်ဓါတ်များဖြင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သွားနိူင်ပါစေ။ (စစ်အောင်၊ 8888peoplepower ၊ ၉ မေ ၂၀၁၂) ယူရင်၊ သူ့လမ်း၊ သူရွေးတာမျိုးဖြစ် သွားမှာပေါ့။ ယုံသားစားပြီးပြောတာတောင် ဒို့မယုံဘူး။ ရှေးက နိူင်ငံရေးသမားကြီးတွေနဲ့ နိူင်ငံရေး ပါတီကြီးတွေရဲ့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကြောင့် လွတ်လပ်တဲ့ မြန်မာနိူင်ငံရယ်လို့ ဖြစ်တည်လာရတာကို ကျေးဇူးမကန်းသင့်ဘူး။ နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော် နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲများအတွင်း၊ ဖက်ဆစ်ဆန့်ကျင်ရေး တိုက်ပွဲများအတွင်း၊ အသက်စွန့်ခဲ့ကြရတဲ့ မျိုးချစ် အာဇာနည်သူရဲကောင်းများရဲ့ ကျေးဇူးကို လည်း မမေ့သင့်ကြပါဘူး။ (လူထုစိန်ဝင်း၊ ဗမာအမျိုးသားသတင်း၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲကြီးမှာ ဒီချုပ် တောင်ပြိုကမ်းပြို နိူင်လိုက်တယ်။ ရေခဲမုန့် စားချင်တဲ့သူကို ဟန်ဘာဂါ မကျွေးဘူး။ ရေခဲမုန့်ဘဲ ကျွေးပါမယ်။ (အာကာကျော်၊ ယူကျွတ်၊ ၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) ရောဂါက အတော်လေး ရင့်နေပါပြီ။ ရိုင်းစိုင်းသောအသုံးအနှုန်းများ ရှောင်ကြဉ်ပေးစေလိုပါတယ်။ ရောက်တဲ့ နေရာတွေကနေ ဖုတ်ဖက်ခါပြီး ထလာကြတယ်။ လူထုပရိသတ်နဲ့ လက်တွဲပြီး လှုပ်ရှားကြတယ်။ (ဝင်းတင် - ဟံသာဝတီ၊ မိုးမခ၊ ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး မိသားစုတွေနဲ့ အဆက်အသွယ် ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရှက်တတ်ရင် ရှက်ဖို့တော်တော်ကောင်းနေပါပြီ။ ရင်ထဲက စိတ်ထဲက ရင်းနှီးခင်မင်နေပြီး တွေ့ခွင့်မရခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေတွေပါ။ ရှုပ်ထွေးပွေလီ၊ မာယာများလှသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံရေး ကျားကွက်တွင် အမျိုးသားရေးသတိမမေ့မလျှော့ရှိကြဖို့လည်း လိုမည်ထင်ပါသည်။ (ကျော်ဝင်း၊ ဖဘ၊ ၁၂ ဇွန် ၂၀၁၂) ရှေ့နေလိုက်ခွင့်ပိတ်ပင်ကြောင်း စာကို တရားရုံးချုပ်က ပေးပို့သည်။ ရေဗူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး၊ ရေပါတာပဲလိုချင်တယ်။ ရှုးမရှုးတော့မသိဘူး။ နဲနဲတော့ချောင်နေပြီ။ (ဇီဇဝါ၊ 8888peoplepower ၊ ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ရလဒ်ကတော့ လုပ်ကြံ ခံရခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ ရန်သူကို မုန်းလို့ရှိရင် ကိုယ့်မျက်စိအောက်မှာပဲ ထားပါ။ (အာသောကရုပ်ရှင် / စိုးမင်း) ရန်သူကို လျော့မတွက်နိူင်ပါ။ ရှင့်သူငယ်ချင်းဖြစ်ပုံကို ကြည့်ပါအုံး။ ရန်သူနှစ်သက်စေမယ့် အရာကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ပါနဲ့။ ရန်သူ့ဗျူဟာထဲနောက်ထပ်မသက်ဆင်းမိကြပါနဲ့တော့။ ရွာသူရွာသားတွေက သူတို့ ဒီရွာကနေ ဘယ်တော့လောက်ထွက်ပေးရမလဲ ဆိုတဲ့ မသေချာမရေရာမှုတွေရှိနေပါတယ်။ “ရိုဟင်ဂျာ ” ကိုသာ ဇောင်းပေးတင်တာဆိုရင်ခင်ဗျား တို့ကိုယ်နှိုက်က ဘယ်လိုရပ်တည်ချက်ဆိုတာ ထင်ရှားလို့နေပြီ ဆိုတာ ရှင်းနေပြီပဲ။ လုပ်ကိုင်ခဲ့၊ လုပ်ကိုင်ဆဲ၊ လုပ်ကိုင်ကြဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လောကမှာ မျက်စေ့ကြီး နားကြီးရှိမှ ဗဟုသုတ စုံတယ်။ (ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း)၊ ၉ ဇွန် ၂၀၁၂) လူကြံရင် မခံနိူင်ဘူး အထူးပင် မှတ်ကြလေ။ (ပြည်တော်ဝင် သီချင်း) လခနဲ့လောက်တဲ့ ဝန်ထမ်း မတွေ့ဖူးသလောက်ပါပဲ။ (သီတာနွယ် - ဆရာဝန်၊ ၆ ဇွန် ၂၀၁၂) လုံခြုံရေးသတိ အမြဲရှိရန် လိုအပ်သည်။ လွှတ်တော်ကလည်း လွှတ်တော်အလုပ် လုပ်ပေါ့။ လူတစ်စုကောင်းစားဖို့ လုပ်နေတာဗျ။ လူတစ်စုကြောင့်တပ်မတော်မှာအခက်တွေ့တာပါ။ လူတဦးချင်းစီရဲ့ အရည်အချင်းပေါ်လိုက်ပြီး ထိုက်တန်တဲ့နေရာပေးရမယ်၊ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် လူညံတွေနေရာယူပြီး တိုင်းပြည်က ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ (ပါမောက္ခဒေါက်တာအောင်ထွန်းသက်၊ မန္တလေးတက္ကသိုလ်မှဖွင့်လှစ်သော MBA သင်တန်းတွင်ပြုလုပ်သောတွေ့ဆုံပွဲတွင်ပြောကြား၊ ၁၉ မေ၂၀၁၂) လွှတ်တော်ထဲက မှူးကြီးမတ်ကြီးများ ဗူးသီးဘတ်ကြီး ဖြစ်မသွားစေလိုပါ။ မိမိနေ့တိုင်းစားနေသည့်ထမင်း လယ်ကွင်းထဲကလာသည်လောက်ကိုတော့ သိကြပေလိမ့်မည်။ လူတယောက်ရဲ့တန်ဖိုးကို သူဖြတ်သန်းကျော်လွှားနေတဲ့ ခေတ်ကြီးက သူ့ပခုံးပေါ်တင်လိုက်တဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်ကို သူဘယ်လောက် သယ်ပိုးထမ်းဆောင်ခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ အချက်နဲ့ တိုင်းတာရမှာပဲ။ (ဗန်းမော်တင်အောင်၊ ၁၉၂၀-၁၉၇၈) လူတော်လူကောင်းကိုသတ်တဲ့သမိုင်းဘဲ။ လာတော့ လာမယ်၊ ကြာမယ်။ လူတိုင်းဟာ ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပြီး ဘယ်သူဘယ်ဝါ၊ ဘယ်အဖွဲ့ အစည်းကမှ ခေါင်းဆောင်တာ မဟုတ်ကြောင်း ပြောကြားသွားပါတယ်။ (ဟန်ဝင်းအောင်၊ ၂၄ မေ ၂၀၁၂) လူထုကဆန္ဒမဲပေးရွေးချယ်လိုက်သူဟာ လူထုအကျိုးစီးပွားနဲ့ လူထုတစ်မျက်နှာထဲသာ ကြည့်ရမယ်။ လူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေ အနေနဲ့ လွှတ်တော်တွင်းမှာပဲ အချိန်ကုန်နေ တာမျိုး မဖြစ်စေလိုတဲ့ အကြောင်း မြန်မာ့ဒီမိုကရေ စီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကပြောလိုက်ပါတယ်။ (ဗွီအိုအေ၊ ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) လူထုတရပ်လုံး ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့နိူင်ငံကို ခေါင်းဆောင်နေတဲ့ အစိုးရတရပ်ဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဘယ်တုံးကမှ မျက်နှာပန်းမလှခဲ့ပါဘူး။ ဂုဏ်သိက္ခာမရှိခဲ့ပါဘူး။ လူထုထောက်ခံသော ပျောက်ကြားစစ်ကို ဆင်နွှဲလျှက်ရှိပါသည်။ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတာ ခံဝန်ထိုးခိုင်းပါတယ်။ လူထု သိနေတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲ။ လူနည်းစုဖြစ်တဲ့တပြည်ထောင်ထဲနေတဲ့ကိုယ့်သွေးချင်း၊ အမျိုးသားအချင်းချင်းကို မျိုးတုန်းအောင် သတ်ဖြတ်ပြီးစော်ကားတဲ့အပြုအမူတွေကတော့နိူင်ငံတကာမှာ ရှက်ဖွယ်လိလိဖြစ်ပါတယ်။ (ဒေးဗစ်၊ ၁၇ မေ ၂၀၀၂) လူ့ပြည်နဲ့ နတ်ပြည်မှာသာ အတူတူနေရတာ။ ငရဲပြည်မှာ အတူတူနေရတာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ထောင်ထဲ လိုက်လာဖို့ စိတ်မကူးနဲံ့။ (လူထုဦးလှ ၁၉၁၉-၁၉၈၂ က ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်အမာ ကို စာအမှတ် ၄၉ မှာ ရေးပေးပါတယ် / ဇော်ဝင်းနိူင်) လူပဲဖမ်းလို့ရမယ် တောင်ကိုမသိမ်းနဲ့။ (တောင်သူ မသွဲ့သွဲ့ဝင်း၊ ၁၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂ / အောင်ပန်း၊ ဖဘ) လယ်ပြင်မှာဆင်သွားသလို မြင်နေရပါသည်။ လူမိုက်ဆန်ဆန်အနိူင်ကျင့် ဗိုလ်ကျသည့် လုပ်ရပ်များ၊ ဖြစ်ရပ်များအား နိူင်ငံအနှံ့အပြား မကြာခဏတွေ့နေရ။ လက်မဆော့နဲ့ ပါးစပ်မရမ်းကြနဲ့ ။ လူမိုက်တို့ဟာ ကံအရှိန်ရှိနေသေးသ၍ မကောင်းမှုကို ပျားသကာလို ချိုမြိန်နေတုန်းပါပဲ။ (သီဂူဆရာတော် ဦးဥာဏိဿရ၊ ၃၀ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ / မိုးသူ၊ ဖဘ) လိုင်းယူတာ မှန်တယ်။ လူရိုးဆိုတာ သင်္ချိုင်းမှာဘဲ ရှိတယ်။ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့် မရတဲ့အခါမှာ လက်နက်ကိုင်တာတွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော့်အနေနဲ့ကတော့ အပြစ်ရှိတယ်လို့ မထင်ပါဘူး။ (KIA အထူးကွန်မန်ဒို တပ်ဖွဲ့မှူး လဖိုင်ဇော်ဆိုင်း၊ မဇ္ဈိမ၊ ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားနိူင်ဖို့ပါ။ လူလုပ်ရမဲ့အလုပ်ဗျ၊ ခွေးတွေက လုပ်ရမဲ့အလုပ် မဟုတ်ဘူး။ လုံးဝ မကျေနပ်ဘူး။ လုံးဝ သည်းမခံနိူင်ဘူး။ လူသားမဆန်တဲ့ ပြစ်မူများစွာကို ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေနဲကျူးလွန်နေစဲ ရှိနေသူတွေက မတရားမူတွေအား တိုက်ဖျက်နေသူတွေကို အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးမယ်ဆိုတော့ ရယ်စရာကောင်းတယ်။ (ရွှေထီး - ၈၈၈၈၊ ၂၇ မေ ၂၀၁၂) လူသတ်မှု၊ ရာဇဝတ်မှုတွေ ကျူးလွန်ခဲ့သူတွေကသာ ပြည်သူလူထုကို တောင်းပန်ပြီး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တောင်း သင့်တာပေါ့။ (အောင်မိုးဝင်း၊ ၂၂ မေ ၂၀၁၂) လူ့သမိုင်းသည် တက်ချည် ဆင်းချည်၊ နိမ့်ချည် မြင့်ချည်ဖြင့် ပြောင်းလဲ နေသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဖြည်းဖြည်းနှင့် မှန်မှန် ပြောင်းလဲ နေသကဲ့သို့ တစ်ခါ တစ်ရံ အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ရုတ်တရက် မြန်မြန် ပြောင်းလဲသည်လည်း ရှိသည်။ လူ့ဘောင်အတွက် အကျိုးစီးပွားကို ဆောင်ကြဉ်းသော ဝါဒ စနစ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း တို့သည် ကြာရှည်စွာ တည်တံ့ ခိုင်မြဲပြီး ဆိုးသွမ်း ရိုင်းစိုင်း၍ ရက်စက် ယုတ်မာသော ဝါဒစနစ်နှင့် လူပုဂ္ဂိုလ် အဖွဲ့အစည်း တို့မှာ လူသားတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို မျက်ကွယ် ပြုခဲ့သဖြင့် ခဏချင်း ကျဆင်း ပျက်သုဉ်းကာ ပြည်သူ တို့၏ ဒဏ်ခတ်ခြင်းကို ခံကြရသည်သာ ဖြစ်သည်။ (သိန်းစိန်ထွန်း၊ "စီးဆင်းနေသောဧရာဝတီ" ၊ မြဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၀ / နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ / Voice) လူသာသေ၊ နံမယ်မသေစေနဲ့။ (ရွှေညဝါဆရာတော် ဦးပညာသီဟ၊ ၁၂ သြဂုတ် ၂၀၁၂) လူအကြောင်းပေါင်းမှသိ၊ ခေါင်းဆောင်အကြောင်း ကြာညောင်းမှသိ။ (မေသင်္ကြန်ဟိန်း၊ ဖဘ၊ ၂၉ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) လူအများအပြားရဲ့ အရေး၊ လူအများအပြားရဲ့ ကံကြမ္မာကို ဆုံးဖြတ်မယ့်အရေးမှာ ကိုယ့်အထင်၊ ကိုယ့်အသိလောက်နဲ့ လွယ်လွယ် ပြောဖို့ မသင့်ဘူး။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ၁၀ ဇွန် ၂၀၁၂) ဝေဖန်ခွင့်နဲ့ ပြန်လည်ဆွေးနွေး တင်ပြခွင့်တွေတော့ ရှိရမှာပါ။ ဝင်ခွင့်မူဝါဒကလည်း ခိုင်မာမှုမရှိ။ အစောပိုင်းလူများက တယ်လီဖုန်း ယူခွင့်မရှိ။ နောက်ကျုတော့ ယူချင်လည်း ယူပါဟု ဖြစ် သွားသည်။ တချို့က လက်ပ်တော့ ယူခွင့်ရသည်။ တချို့ကမရ။ မြန်မာပြည်၏ ကမ္ဘာကျော် သားရေကွင်း မူဝါဒကို သမ္မတ အိမ်တော်တွင် ကျင့်သုံးနေဆဲပင်။ (မြန်မာအင်ဒီပဲန်ဒင့်ဂျာနယ်၊ ၂၆ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ၀န်ထမ်းဆိုးတွေ နှိပ်စက်လို့၊ မတရားလုပ်လို့ အပြစ်မရှိဘဲ ထောင်ထဲ ရောက်ခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေလဲ များလှပါပြီ။ ဝေယျာဝစ္စလုပ်တဲ့ အစုအဖွဲ့မျိုးလိုတော့ မဖြစ်ရဘူးလို့ ပြောချင်တယ်။ (ဝင်းတင် - ဟံသာဝတီ၊ မိုးမခ၊ ၁၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ဝသုံးလုံး လမ်းစဉ် — အလံနီခေါင်းဆောင်ဖြစ်သော သခင်စိုးမှ လက်နက်ချအညံ့ခံနေခြင်းကို မလိုလားစွာဖြင့်ယခုလိုပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ မည်သည့်အဖွဲ့ ၊ မည်သည့်အဖွဲ့ ဝင်ရဲဘော်ဟူသမျှ လက်နက်ချအညံ့ခံလည်း တကိုယ်တည်းကျန်ပါက ဝက်ဝံလိုမျိုး၊ ဝါးရုံပင်အောက်မှာ ဝါးမျှစ်စား ပြီးအသေခံတိုက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုသော ဝသုံးလုံး လမ်းစဉ်ကို ကြေညာခဲ့ပါသည်။ (စစ်အောင်၊ 8888peoplepower ၊ ၂၂ မတ် ၂၀၁၃) ဝယ်သူအမြဲမှန်သည်ဆိုသည့်စကား မှာ ဤလောကတွင် ဟာသသာ ဖြစ်သည်။ သူက တိုင်းရင်းသား အရေးမှာ ဘာပြောလို့ ဖြစ်မလဲ။ သူပြောရင် တပ်မတော်နဲ့ ၃၄ ဖြစ်သွားမှာ ကြောက်ရတယ်လေ။ သူ့ကိုလည်း ရေငုံ နှုတ်ပိတ်ပေါ့လေ။ ခုက အပယ်ခံရမယ့် အဆင့်မှာလည်း ရှိတယ်။ အသုံးခံရမယ့် အဆင့်မှာလည်း ရှိတယ်။ သူက နိုင်ငံတော် လက်ရှိ အစိုးရရဲ့ လက်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ သူကတော့ အသုံး ချရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့။ (ဟိုဝါး ဒူဝါဇော်ဂမ်၊ မဇ္ဈိမ၊ ၁၅ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၃) သူ့ကိုအလေးနီပြုပါတယ်။ (ဦးအေးဆောင်၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) သင်္ချိုင်းတိုးချဲ့ရလိမ့်မည်။ သူခိုး၊ ဓါးပြ လုပ်တဲ့လူကို သူခိုးဓါးပြလို့ ပြောရင် သူဟာသူခိုးဓါးပြမဟုတ်ဘူးလို့ ငြင်းဆိုစမြဲဘဲ။ ဒါ သဘာဝဘဲ။ (ရာဇာမင်းနိုင်၊ 8888peoplepower ၊ ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) သစ္စာဆိုတာ သစ်စက်မှာဘဲရှိတယ်။ သူတို့က ကြွေးကြော်သံမတိုင်၊ ဘာမတိုင်နဲ့ အသုဘပို့သလို ဆိတ်ဆိတ်ကြီး လျှောက်လာကြတာ။ သူတို့ခံစားချက်ကို ကျနော်နားလည်တယ်။ သူတို့ ဘယ်ပြောင်းချင်ပါ့မလဲ၊ အကုန်လုံးထားပစ်ခဲ့ရတာ။ သူတို့ခေါ်တဲ့ ထောင်ရုံးခန်းထဲ လိုက်သွားရတယ်။ ပြီးတော့မှ ဒါလွှတ်တာတဲ့လေ။ အဲဒီတော့ ကျမ အိမ်ပြန်ရောက်တယ်။ (လူထု ဒေါ်အမာ) သွေးတူတာထက် စိတ်တူတာ ပိုအရေးကြီးတယ်။ (အောင်ဆန်း / အေးလွင်၊ ရာရှစ်နှစ်တရာပွဲ၊ ယူကျွတ်၊ ၆ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) သတင်းတွေ ထွက်ထွက်လာနေတယ်။ သူတို့တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံလေးတွေဝတ်ပြတာနဲ့ သူတို့ကို စည်းရုံးလို့ရနိူင်မယ်လို့ ထင်တဲ့ပေါချာချာအကျင့်တွေပြန်စဉ်းစားဘို့လိုတယ်နဲ့တူတယ်။ (ငြိမ်းချမ်း၊ 8888peoplepower ၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃) သတိလေးထားမိဖို့ ကောင်းပါတယ်။ (မောင်ဝံသ၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၂) သတိလေးနဲ့ တွေးလာခဲ့မိပါတယ်။ သင်တို့ အိပ်မက်မက်နေချိန်မှာ ကလေးတွေ ထမင်းငတ်နေတာကို သတိရပါ။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ၇ ဇွန် ၂၀၁၂) သူ့ နူတ်က သူ့ စိတ်ကို ဖော်ပြတာပါ။ သနပ်ခါးလိမ်း၊ ထုံးသုတ်တဲ့ အပေါ်ယံဟန်ပြ ဝါဒ ဖြန်ဖို့ သက်သက်သာ လုပ်ခဲ့တော့ စုတ်ပြတ်သတ်ပြီး ချွတ်ခြုံကျခဲ့ရတယ်။ (ငြိမ်းချမ်းအေး၊ မိုးမခ၊ ၂၄ မေ ၂၀၁၂) သား နောက်တော့နားလည်လာမယ်။ သေတဲ့လူရဲ့ သိက္ခာတော့ မချကြပါနဲ့။ သပိတ်စုံရင် အကုန်ရမယ်။ (ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်) သပိတ်စုံ သူပုန်ထတယ်။ သဘောမတူညီတာတွေကို ကျနော်သဘောတူပါတယ်။ သမိုင်းကို သင်တာ မအအောင်ပေါ့။ သူ့မှတ်ချက်ကို မငြင်းလိုက်ပေမယ့် ကျနော် ဘဝင်မကျ။ သမိုင်းစာရွက်ပေါ်၌ အမြဲတည်ရှိနေမည် ဖြစ်သည်။ သမိုင်းဆိုတာ လူမျိုးတစ်မျိုး၊ နိူင်ငံတစ်နိူင်ငံရဲ့ အသက်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်။ အသက်ကို စောင့် ရှောက်သလို၊ ဂရုတစိုက်နဲ့ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရတယ်။ အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ တန်ဖိုးထား အလေးအမြတ်ပြုရတယ်။ သမိုင်းကို မေ့မပစ်ရ၊ ဖျောက်မပစ်ရသလို ဖျက်လည်း မပစ်ရဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်သလို ပြုပြင် တာလည်း မလုပ်ရဘူး။ အရှိကို အရှိအတိုင်း တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ရတယ်။ (လူထုစိန်ဝင်း၊ ဗမာအမျိုးသားသတင်း၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀) သမတဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သော မြန်မာအစိုးရသည် အကြီးဆုံး ကချင်ခရစ်ယာန်အသင်းတော် ကချင်နှစ်ခြင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ် ကို စတင် ရန်ပြု တိုက်ခိုက်လိုက် ပြီဖြစ်သည်။ (ကချင်သတင်းဌာန၊ ၁၀ မေ ၂၀၁၂) သူများပြောတိုင်းလိုက်မလုပ်နဲ့။ သယံဇာတတွေကို လက်ဝါးကြီး အုပ်ပြီးတော့ ထုတ်ရောင်းခဲ့တာကတော့ ခရိုနီတွေနဲ့ စစ်တပ်ကပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သိမ်းယူထားတဲ့ လူတွေကိုလည်း ဦးလေးနေ့စဉ် မေတ္တာပို့ပါတယ်။ တို့လို နေစရာမရှိ စားရမဲ့မဲ့ ဘဝကို မရောက်ပါစေနဲ့လို့။ သန်းရွှေကိုဝေဖန်ရင် ကြားထဲက ဝင်ဝင်ပြီး ဖင်ကျိန်းသူတွေကလဲ မနည်းဘူး။ သတ်ရဲရင် သေရဲရမည်။ သွားရင်းလာရင်း တွေ့ ရင် ဒါဘယ်သူဆိုတာ သိနေပါတယ်။ သူ့လစာနဲ့မတန်လောက်အောင်ကိုချမ်းသာနေတာကို ကျွန်မတင်ပြချင်ပါတယ်။ သူလဲဘဲတိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့လူတယောက်ပေါ့၊ သုံးသပ်ထင်မြင် ယူဆမိပါသည်။ သာသနာပိုင်လည်း သာသနာကိုမပိုင်တော့ပါဘူးကွာ။ သံသယဖြစ်နေပါသည်ဟု ပြောက လွန်မည်မထင်ပါ။ သွဲ့သွဲ့ဝင်း နဲ့ မအေးနက် လူဆိုးစာရင်းဝင်ပြီ။ ရဲအဖွဲ့ဘက်ကပြောတယ် သွဲ့သွဲ့ဝင်း နဲ့ မအေးနက် တို့ပါရင်ပိုတောင်မရသေး တယ်လို့ ဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စကိုဖြေရှင်းပါတယ်။ (နေမျိုးဝေ၊ ဖဘ၊ ၂၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) သေသောသူသည် သုဿန်သို့သာ သက်သက်သာသာ သွားသင့်သည်။ (ကျော်သူ၊ မိုးမခ၊ ၉ သြဂုတ် ၂၀၁၂) သူ့အစီအစဉ်လာသည်နှင့် လိုင်းပြောင်းကြ၊ တီဗီပိတ်ကြသည်ကို အနှီအကြံပေးဆရာကြီး သိဟန် မတူ။ သူ့အတွေး ကိုယ့်အတွေးဆိုတာလည်း မတူညီနိူင်ပါဘူး။ အပျက်သဘောနဲ့မြင်နိူင်သလို အပြုသဘောနဲ့လည်း စဉ်းစားလို့ရပါတယ်။ (မောင်ပါလ၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃) သူ့အပြုံး အရီ လေးတွေကလဲ ကြွေလောက်တယ်။ (သီတာ၊ ဖဘ၊ ၂၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) သူ့အဖေက မရှိတော့ဘူး။ ရှိရင် စိတ်ဆင်းရဲရှာမှာ။ “ဟ၊ ဒီကောင်ကြီး အခုမှ ကြေးစည်ရိုက်နေပြီ” - ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ကြေးစည်ရိုက်ရင် ခွေးတွေက အူတယ် လေ။ ဒါကြောင့် ဒီကောင်ကြီး အူနေတယ်၊ အူကြောင်ကြောင် ဖြစ်နေတယ်လို့ ကိုယ်ကပြောလိုက်တာ။ (မြရီ၊ ရဲမေ၊ ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီ) ဟောဗျ၊ ကျွန်တော် သည်ဆောင်းပါးလေး ရေးနေတုန်း မီးပြတ် သွားတယ်ဗျာ။ (မောင်ဝံသ၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၂) ဟီးရိုးကြီး (သူရဲကောင်း) လိုတင်ပြီးတုတ်အဖြစ်သုံးကြလိမ့်မယ်။ (ဆရာဦးရွှေထူး / ကိုညို၊ ဖဘ၊ ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုတော့ မလုပ်ကြပါနဲ့လို့။ ဟိုးအရင်တုန်းက မောင်မောင်မြင့်တို့ နွဲ့နွဲ့စန်းတို့ပါတဲ့ ပေါ်လစီဇာတ်လမ်းတစ်ခုကို အားကြီးမုန်းတယ်ဗျ။ (စိုးမင်း၊ ဖဘ၊ ၁၃ ဇွန် ၂၀၁၂) အကိုကြီး လိုအပ်တာရှိရင် ဖုန်းဆက်ပါ။ အကောင်းဆုံးခံစစ်ဟာ ထိုးစစ်ဘဲ။ အကြောင်းပြချက်တော့ရှိသင့်ပါတယ်ရှင်။ အကြံပက်စက်လွန်းပါပေ့။ အကောင်မကလည်း ရေလျှံတဲ့တစ်ယောက်ယောက်အိမ်မှာ နံပါတ်စဉ်ဝင်စီလိုက်ရုံပေါ့။ ဘာဖြစ်သေးတုန်း။ သူတို့လည်း သူတို့နည်းသူတို့ဟန်နဲ့ အမျိုးကိုစောင့်ရှောက်ကြတာပေါ့။ (စိုးမင်း - ဆရာဝန်၊ အမ်း၊ ဖဘ၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) အကျိုးမဲ့အောင် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ပြုလုပ်နေသလို ကျုပ်မြင်နေရတယ်။ အကောင်းလို့တော့ မထင်နဲ့ဟ။ အကြီးအကျယ် တိမ်းစောင်းနေတယ်။ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ပြည်သူလူထုရဲ့ ယုံကြည်မှု ကျဆင်းလာနိူင်ပါတယ်။ အချိန်ကအဖြေပေးလာပါလိမ့်မယ်။ အခြေခံစီးပွားရေးကို မပြောင်းလဲနိူင်သည့် ဘယ်လွှတ်တော် ဘယ်အဆောက်အအုံ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ ဒို့ပြည်သူများက လက်ပိုက်ကြည့်နေကြမည်တော့မဟုတ်။ ကျားနဲ့ဆင် လယ်ပြင်မှာတွေ့မည့်တနေ့ ပေါ်ပေါက်လာမည်က မုချ။ (ဦးမျိုး - ဥပဒေ) အခြေခံ ဥပဒေ ပြင်စရာမလိုဘူးဆိုတာ ကမ္ဘာမှာဘယ်နိူင်ငံမှာမှ မရှိပါဘူး။ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်ရမယ်။ အောက်ခြေမှာတော့ဖိနှိပ်ရေးယန္တာယားသည် အပြင်း၊ အပျော့စည်းချက်နှင့်အညီ လည်ပတ်နေလျှက်ရှိပါသည်။ (စစ်အောင်၊ 8888peoplepower ၊ ၆ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂) အာခံရဲကြမည် မဟုတ်ပါ။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဆိုတာ လက်စသတ်တော့ ထောက်လှမ်းရေး သတင်းပေး အလုပ်မျိုး တာဝန်ပေးခံရသလို ဖြစ်မနေပေဘူးလားဗျာ။ ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာ ဒါမျိုးတွေ မရှိသင့်တော့ပါ။ ကျေးရွာ အတော်များများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးရဖို့ ငွေကို သိန်းချီပေးပြီး လိုက်ကြတယ်။ ရာထူးရတော့ အစွမ်းကုန် ရှာဖွေတော့တာပါပဲတဲ့။ (မောင်ဝံသ၊ ၂၉ မေ ၂၀၁၂) အခုလည်း ဗိုလ်သိန်းစိန် တို့က နတ်သံနှောလို့ တကျော့လာပြန်ပြီ။ အခုလိုမျိုး ပြည်သူလူထုကြီးမှာ စားဝတ်နေရေး လူမှုဘဝတွေမှာ မတရားမှုတွေ ဖိနှိပ်မှုတွေ ခါးစည်းခံနေကြတာဟာ ဘယ်သူတွေလက်သည်လဲလို့ ပြန်မေးရင် အခုလက်ရှိအစုိုးရကြောင့် သူတို့ ဒုက္ခရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ (ဝင်းတင် - ဟံသာဝတီ၊ ၃ ဇွန် ၂၀၁၂) အချုပ်အခြာအာဏာကို ပြည်သူသာပိုင်ရမည်။ (Voice of Burma) အခေါ်အပြော အတွေးအရေးလေးတွေ ညက်တယ်။ အစိုးရဆိုတာကလည်း ဦးတပ်တပ် ဗိုလ်တပ်တပ် ဒီလူတွေဘဲ။ ပြောချင်တာက တိုင်းပြည်မှာ စစ်ဗိုလ်တွေအုပ်ချုပ်နေတုန်းဘဲ။ (ဇင်လင်း၊ ဖဘ၊ ၁၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) အစိုးရတွေ မှားရင် လူထု လမ်းပေါ်တက်တယ်။ လူတွေမှာ လက်နက်မပါဘူး။ ဒါ ဂန္ဒီလမ်းစဉ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (အေးအေးစိုးဝင်း၊ ဖဘ၊ ၁၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂) အစိုးရနဲ့နီစပ်သူတွေသာ အရာအားလုံးကို လက်ဝါးကြီးအုပ်၊ ဝါးမြိုထားတယ်။ အစိုိုးရဘက်က စေ့စပ်ရေးမှူးတွေ ရည်မှန်းချက်က ဗဟုိုအစိုးရရဲ့ ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကို အားလုံးရောက်လာဖုို့ပဲ။ အဲဒီရဲ့အဓိပ္ပာယ် က တုိုင်းရင်းသားလက်နက်ကုိုင်အဖွဲ့တွေကုို အပြီးသတ်ချေမှုန်း တဲ့ သဘောပါပဲ။ (ဘာတီးလင့်တ်နာ၊ YPI ၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ / သူရိန်ဝင်း) အစိုးရမင်းကလည်း တိုင်းသူပြည်သားကို မကြောက်ကြောက်အောင် ခြောက်လှန့်ပြီးအုပ်ချုပ်ပါတယ်။ (မောင်မောင်ကြီး - သမိုင်းဆရာ) အစိုးရရဲ့မူဝါဒတွေကို ပညာရေးဆိုင်ရာနစ်နာချက်တွေက တဆင့် ပြည်သူတရပ်လုံးရဲ့ အကြပ်အတည်းတွေကို မီးမောင်းထိုးပြတောင်းဆိုတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာဟာ နိုင်ငံတကာကျောင်းသားလှုပ်ရှားမှုရဲ့ ဝိညာဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ (အောင်မိုးဝင်း၊ အာရ်အက်ဖ်အေ၊ ၄ ဇူလိုင် ၂၀၁၂) အစိုးရသတင်းစာ။ စာမျက်နှာ - အရှေ့၊ အလယ်၊ အနောက်။ အစိုးရသတင်းစာတွေမှာဖေါ်ပြတာမတွေ့မိပါဘူး။ အစိုးရအတွက်က ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုတာ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ လက်နက်ချပြီး အစိုးရတစ်ရပ်ရဲ့ လက်အောက်ကို ၀င်ရောက်ဖို့ပဲ။ လက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေအတွက်ကတော့ သူတို့ရဲ့ ပြည်နယ်ရရှိ ဖို့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဖို့ တိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ နေပြီ။ ဒါကြောင့် အခြေခံကျကျ ဘုံသဘောတူညီမှုမရနိုင်ကြဘူး။ (ဘာတီးလင့်တ်နာ၊ YPI ၊ ၂၂ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂ / သူရိန်ဝင်း) အစိုးရအာဘော်သတင်းစာတွေမှာ ထိပ်တန်းစစ်ခေါင်းဆောင်တွေက သံဃာတော်တွေကို အလှူအတန်းပြုတဲ့သတင်းတွေကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အစိုးရက အကြီးအကျယ်ဝါဒဖြန့်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆိုတာ ပြောဖို့တောင်မလိုပါဘူး။ အဆင်ပြေမယ်ဆိုရင် တစ်ဖက်အာဏာပိုင်နဲ့ပေါင်းပြီး အခွင့်အရေးယူတာကို ရိုးသားမှုလို့မယူဆပါဘူး။ အာဏာပိုင်တွေက သပိတ်စခန်းတွေကို ဖြိုခွဲရာမှာ မီးလောင်ဗုံးတွေလည်း သုံးတယ်။ "သုံးသွားတဲ့ဗုံးက နှစ်မျိုးပေါ့နော်၊ မျက်ရည်ယိုဗုံးရယ်၊ မီးလောင်ဗုံးရယ်၊ မီးလောင်ဗုံးတစ်မျိုးက ကျွန်တော်အခွံ့တစ်ခုတော့ရထားလိုက်တယ်၊ သူမှာရေးထားတာက LOD 01/12/95" (မြန်မာနိုင်ငံ ဝိဇ္ဇာ၊သိပ္ပံ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ အဖွဲ့တာဝန်ခံ ကိုသောင်းထိုက်၊ အာရ်အက်ဖ်အေ၊ ၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) အာဏာရှင်ကို မီဒီယာသံပုံး တီးလို့ တောခြောက်ထုတ်ပါ။ (ချိုတူးဇော်၊ ဖဘ၊ ၁၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) အာဏာရှင်တွေ ရှိနေသမျှ ငါတို့သူပုန်ဖြစ်နေဦးမယ်။ (ဖိုးဇီဝ၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၁၂) အာဏာသက်ဝင်ခြင်း မရှိသေးပါဘူး။ အောက်တန်းကျ စိတ်ဓါတ်ရှိတဲ့ လူတွေတော့ ပျာပျာသလဲပေါ့။ အတိတ်က အမှားကို အတိတ်ဆီ ပြန်လှည့်ပြီး ပြင်လို့ မရတော့ပေမယ့် ပစ္စုပ္ပန်မှာတော့ ထပ်မမှား အောင် ဆင်ခြင်ပြင်ဆင်လို့ ရပါတယ်။ (ဌေးသိန်း - နောင်ကျော်၊ ၂၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) အတည်ရော အနှောက်ရော ရေးထားပါလေရော။ အထက်ကလာတဲ့စာမို့သာ သူတို့ မပြင်ရဲကြတာပါ။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ၉ ဇွန် ၂၀၁၂) အထက်ဌာနဆိုရင် ကြောက်နေရတယ်။ အိတ်ထောင်ထဲထည့်ထားလိုက်ပြီ။ အဓိကကတော့ ပြည်သူများအကျိုးရှိအောင် မိမိဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာပါဘဲ။ အဓိပ္ပါယ်ကောက်ပါတယ်။ အနာရှိရင် ဆေးရှိတယ်။ အနီရောင်ရယ်၊ အစိမ်းရောင်ရယ်၊ အမည်းရောင်ရယ်၊ ဒီအရောင်သုံးရောင်ကိုပိုင်တဲ့လူဟာ မြန်မာပြည်ကို ထိန်းချုပ်နိူင်မယ် - အနီ ရောင်က ပတ္တမြား၊ အစိမ်းရောင်က ကျောက်စိမ်း၊ အမည်းရောင်ကတော့ ဘိန်းကိုဆိုလိုတာပါ။ (စာရေးဆရာ ဟိုက်ဒီ ယူကီ တာကာနို Hideyuki Takano) အပေါ်ကနေ အောက်စီးတဲ့ အကျင့်ဟောင်းကြီး ဖျောက်ပါတော့။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ဖဘ၊ ၁၂ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂) အပြစ်ရှိတယ် ဆိုရင် ဖမ်းပါ။ ကျနော့် လုပ်ဆောင်ချက်ဟာ နိူင်ငံနဲ့ လူမျိုးကို ထိခိုက်စေတယ် ဆိုရင် ဖမ်းလိုက်စမ်းပါ လို့ ကျနော်ပြောရဲတယ်။ ပန်းတနော်မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲံ့မှူး ဒုရဲမှူးဝင်းမြင့်ထူး ကို အခုလိုပဲ ပြတ်ပြတ်ပြောခဲ့တယ်။ မှန်တယ် ထင်ရင် လုပ်လိုက် ဖမ်းလိုက်။ လူထု က စောင့်ကြည့်နေတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ထင်သလို လုပ်လို့ ရတဲ့ ခေတ်က ကုန်ပြီ ဆိုတာ ကျနော် သက်သေပြလိုက်မယ်။ (နေမျိုးဇင်၊ ဖဘ၊ ၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃) အပြုသဘောဆောင်ပြီးဝေဖန်ခြင်းသည် တိုးတက်မှုကိုဖြစ်စေ၍ ပုတ်ခတ်ဝေဖန်ခြင်းသည် တပါးသူနစ်နာစေတဲ့စိတ်ဆန္ဒပါဝင်နေခြင်းကြောင့် စော်ကားတာနဲ့ အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ (မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ကြီး / ကိုဗလိုင်၊ 8888peoplepower ၊ ၃၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၂) အပြုသဘောနဲ့ သတိပေးတာပါ။ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်နေပြီလို့ ထင်နေကြသည်။ (Voice of Burma) အဖွားကို ဓါးပြတိုက်သလို မပြောပါနဲ့။ (ဒေါ်စန်းရီ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ တောင် ငူခရိုင်၊ ကျောက်ကြီး၊ မြို့မအုပ်စု၊ ၁၉၈၈ တွင်မြေ (၂၅) ဧကခန့် အသိမ်းခံတောင်သူ / ဟော့ဂျာနယ်၊ ၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃ / ကျော်သန်း) အဖွဲ့တွင်း၌ မကောင်းသူတစ်စုဘက်မှ ပင်းနေခြင်းကြောင့် ဖက်ဆစ်ဝါဒ အသက်သွင်းရာတွင် အလိုတူမဖြစ်လိုဟု ဆို၏။ (ဆရာ အိုးဝေဦးညိုမြ) အဖေထောင်ထွက်လာရင် အဖေကလည်းကလေးကိုမမှတ်မိ၊ ကလေးတွေကလည်းအဖေကိုမမှတ်မိနဲ့။ ရင်ထုမနာ အဖြစ်မျိုး ကြုံရ။ အမြတ်က အဲဒါပါပဲ။ အများစု သဘောတူညီချက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ အမှောင်ဆိုတာ စစ်အစိုးရနေထိုင်နေတဲ့ ကမ္ဘာပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ရှက်တတ်ရင်လဲသေဖို့ကောင်းပါတယ်။ အမှန်တရား ဆိုတာ အမုန်းခံပြီးမှ ရေးရတယ်။ အမှန်တရားကို ထာဝရဖုံးကွယ်ထား၍မရပါ။ အမြဲတန်းရန်သူမရှိသလို ထာဝရမိတ်ဆွေဆိုတာလည်းမရှိ။ အမြို့မြို့အနယ်နယ်မှာ များမြောင်လှပသော “မြန်မာ” ကွန်မြူနီတီ အဖွဲ့အစည်းများ ဒီကိစ္စ ကို ၀ိုင်းဝန်းရေးသားကြ၊ စာတွေ ပို့ကြ၊ ကန့်ကွက်ကြဖို့ နှိုးဆော်ပါတယ်။ အောင်မြင်ဖို့တော့ မနေ့ ကထက်စာရင် တရက် ပိုနီးလာပြီ လို့သဘောထား မိပါတယ်။ တနေ့ နေ့ တော့ ဖြစ်လာရမည်မှာ မလွဲပါ။ အမှိုက်ရှိရင်ရှင်းထုတ်ပစ်ဖို့ဘဲရှိတယ်။ မရှင်းရင်ပိုရှုတ်မယ်။ ပိုနံမယ်။ (ဆရာဦးရွှေထူး / ကိုညို၊ ဖဘ၊ ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) "အမျိုးသားနိူင်ငံရေးက သန့်ရှင်း မြင့်မြတ်တယ်။ ပါတီနိူင်ငံရေးက ညစ်ပတ်တယ် ဆိုတဲ့ အယူအဆကတော့ လက်မခံဘူး။ နိူင်ငံရေး လုပ်ရင်လုပ်တယ်၊ မလုပ်ရင် မလုပ်ဘူး၊ နှစ်မျိုးပဲရှိတယ်။ အမျိုးသားနိူင်ငံရေး လုပ်မယ်၊ ပါတီနိူင်ငံရေး မလုပ်ဘူးဆိုတာတွေက အရင်တုန်းက အတွေးအခေါ်ဟောင်းပဲ” ဟု ဦးသီဟစောက ဆိုသည်။ (ဧရာဝတီ၊ ၂ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၁၂)အယူအဆမတူတာ သဘောထား ကွဲပြားခြားနားတယ်ဆိုတာ သဘာဝပဲ။ အယူအဆမတူလို့ ရန်ဖြစ်တယ်ဆို တာက၊ မပြည့်ဝတဲ့သဘော၊ မရင့်ကျက်တဲ့ သဘောဖြစ်တယ်။ လူတိုင်း ကိုယ် ယုံချင်တာ လွတ်လပ်စွာယုံခွင့်ရှိတယ်။ အခိုင်အမာကိုင်စွဲထားခွင့် ရှိတယ်ဆိုတာကို နားလည် သဘောပေါက်ပြီး မငြိုမငြင် လက်ခံနိူင်ခြင်းဟာ စိတ်ယဉ်ကျေးမှု အထက်တန်းကျသူများရဲ့ အခြေခံလူ့ကျင့်ဝတ် တစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ အနှစ်သာရလည်း ဖြစ်တယ်။ (လူထုစိန်ဝင်း၊ ဗမာအမျိုးသားသတင်း၊ ၁၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀) အရှိကိုအ­ရှိအတိုင်းပြောသွားတာတွေပါ။ အရပ်စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ ဗကသ အပေါ် ညွန့်လိုက်တာပါ။ ဗကသ အပေါ်လူပါးဝလိုက်တာပါ။ (ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ဖဘ၊ ၁၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၂) အရင်တုန်းကတည်းက လက်ရှိအစုိုးရကို အယုံအကြည်မရှိတဲ့သဘော၊ သံသယရှိတဲ့သဘော ပြောဆိုနေကြတာတွေက ရှိတာပါပဲ။ အရင်တုန်းက အဘ အဘ နဲ့အခုမှ အစ်မ အစ်မ ဖြစ်သွားတဲ့ လူတွေထဲမှာလည်း ကျွန်တော်မပါဘူး။ (အဆိုတော်ကိုသားစိုး / မြန်မာနေ့စဉ်သတင်း / အေးချမ်းမွန်၊ ဖဘ၊ ၁၈ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃) အရှုတ်တွေရှိတာလည်းအမှန်ဘဲ။ အရင်ဝန်ကြီး ကတော့ စံပြပါပဲ။ သူ့ကိုတော့ ဒေါက်တာကျော်မြင့်လို့ မခေါ်ချင်၊ ဗိုလ်ချုပ်ကျော်မြင့်လို့ ပဲ ခေါ်ချင်ပါတော့တယ်။ သူ့လက်ထက်က management အမှားအကြီးကြီးတွေကို အခုလူတွေလက်ထက်အထိ ခါးစည်းခံရတုန်း ရှိပါသေးတယ်။ ပညာတတ်တွေကို ထိန်းချင်ရင် စစ်တပ်လို တစ်သွေးတစ်သံတစ်မိန့်နဲ့ မရနိုင်ပါဘူး။ (သီတာနွယ် - ဆရာဝန်၊ ၆ ဇွန် ၂၀၁၂) အရိုးသာဆွေးသွားမယ်။ အမှုမဆွေးဘူး။ အရင့်အရင်က အလွန်အကျွံ (တရုတ်နိုင်ငံကို မှီခိုအားထားခဲ့မှုများ)ကိစ္စတွေကိုတော့၊ ပြန်လည် သုံးသပ်ရလိမ့်မယ်လို့ ကျနော် ယူဆပါတယ်။ အလကားလူဟာ အလကားပဲ။ (ဓမ္မဒူတ-အရှင်ပညာဇောတ / မင်းကိုအောင်၊ ဖဘ၊ ၂၉ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၂) အိပ်လိုက်၊ စားလိုက်၊ ဖတ်လိုက်၊ ကြောင်လိုက်၊ အုလိုက်နှင့် ကြာတော့လည်း ပျင်းလာပြန်သည်။ (မောင်ပါလ၊ ၈ ဇွန် ၂၀၁၂) အဲလိုလူတွေကို အတော်ပဲ ရွံရှာစက်ဆုတ်မိပါတယ်ဗျာ၊ ဘုရားစူးပါစေရဲ့။ အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာရှေ့ကိုအလောတကြီးမလုပ်ဖို့ ဖြေးဖြေးမှန်မှန်နဲ့ ချိန်ချိန်ဆဆ လုပ်ကြပါ။ (ဆရာဒေါက်တာခင်မောင်ညိုမှ မင်းကိုနိုင် အပါအဝင်(၈၈)ကျောင်းသားသို့ သြဝါဒစကား၊ ၂၉ နိုဝင်ဘာလ ၂၀၀၅ / ဗေဒါလမ်း၊ ဖဘ) အားလုံးလူတိုင်း မှတ်ချက်ပြုတာက ယနေ့ အထိ စစ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ မရိုးဘူးဆိုတာပါပဲ။ အားလုံး အဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပဲ မျှော်လင့်ပါတယ်။ အလေးအနက် တွေးလေ၊ ကြောက်စရာ ကောင်းလေ။ (ဦးဝီရသူ၊ ၂၃ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၃) အသိပညာနည်းပါးကြတော့ အရှည်ကို မတွေးတော မဆင်ခြင်တတ်ကြဘူး။ ထစ်ခနဲဆို ရိုက်ဟယ်၊ နှက်ဟယ်၊ ခုတ်ဟယ်၊ ထစ်ဟယ်နဲ့။ လုပ်လို့ ကိုင်လို့ ရသမျှကလေးတွေလည်း စားရသောက်ရတယ်ရယ်လို့ကို တယ်မရှိကြဘူး။ ရုံးစား ဂါတ်စားနဲ့ လုံးပါးပါးကုန်ကြတာက အများသားကလား။ (ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ(တောင်စွန်း)၊ ၉ ဇွန် ၂၀၁၂) အသက်ရှူပေါက်ချောင်သွားတယ်။ အေးအေး ဆေးဆေးပဲ နေချင်တယ်။ နိူင်ငံရေးတွေ ဘာတွေလည်း စိတ်မဝင်စားပါဘူး။ ဘယ်အစိုးရ တက်တက် ကိုယ့်ထမင်း ကိုယ်ရှာစားရမှာပဲ။ အင်အားတခုတည်းနဲ့ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်ရင် အမြဲပြဿနာတက်နေပြီး အာဏာကိုင်ထားသူများကိုယ်တိုင် အမြဲတမ်း သူ့တို့ရဲ့လုံခြုံရေးကို စိတ်မချတဲ့ အနေအထားနဲ့ နေကြရလိမ့်မယ်။ (ကြည်မောင်) ဤကမ္ဘာတွင် လူဟူသမျှသည် မိသားစုအဖွဲ့ဝင် ညီအကိုမောင်နှမများ သဖွယ်ဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် သင်သည် လူချင်းဆက်ဆံရာ၌ ကြင်နာစွာဖော်ရွေစွာ ယဉ်ကျေးစွာ ပြုမူသင့်၏။ ဤသို့ထောက်ပြခြင်းမှာ အပျက်ဘက်၊ အဆိုးဘက်မှ မကောင်းမြင်ခြင်းမဟုတ်ဘဲ မဖြစ်သင့်သည်များ မဖြစ်အောင် အချိန်မီ အရေးယူ၊ ပြင်ဆင်နိူင်ရးအတွက် သတိပေးခြင်းမျှဖြစ်သည်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများအနေနှင့် အမြင်ရှင်းရန်လိုပါသည်။ (ခိုင်နှင်းဖြူ၊ မိုးမခ၊ ၁၅ မေ ၂၀၀၂) ဤသည် အမှန်ဖြစ်ပါသည်။ ဤအမိန့်သည် ယနေ့မှ စ၍ နောက်ထပ် အမိန့်တစ်စုံတစ်ရာ ထုတ်ပြန်မှု မရှိမခြင်း အတည်ဖြစ်သည်။ ဧရာဝတီသည် မြစ်ဖျားမှသည် မြစ်ဝဆီသို့ တသွင်သွင် အဆက်မပြတ် စီးဆင်း၍ နေသည်။ ယခင်ကလည်း စီးဆင်း နေခဲ့သည်။ ယခုလည်း စီးဆင်း နေဆဲပင်။ နောင်တွင်လည်း ကမ္ဘာ တည်သရွေ့ စီးဆင်း နေဦးမည်သာဖြစ်သည်။ (သိန်းစိန်ထွန်း၊ "စီးဆင်းနေသောဧရာဝတီ" ၊ မြဝတီ၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၈၀ / နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၂ / Voice)
A. English-Burmese Dictionary
2nd degree murder ဒုတိယအဆင့်လူသတ်မှု accountability တာဝန်ခံမှု activist ပညာပေးလှုံ့ဆော် တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ၊ လှုပ်ရှားပြောင်းလဲရေးဝါဒီ anonymous အမည်မဖေါ်လိုသော Authoritarianism အာဏာပိုင် အာဏာရှင်ဝါဒ award ဆု back down အလျှော့ပေး လိုက်လျောbased အခြေစိုက် behind the scenes နောက်ကွယ်မှ bias အဂတိတရား boycott သပိတ်မှောက် brainwash ဦးနှောက်ကျင်းသည် briefing အကျဉ်းချုပ် အစီရင်ခံ capacity building စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားရေး၊ အရည်အချင်းမြှင့်တင်ရေး caricature ပုံတူရုပ်ပြောင် cause and effect အဖြစ်နှင့်ရလာဒ်၊ အကြောင်းနှင့်အကျိုးceasefire အပစ်အခတ် ရပ်စဲခြင်း celebrities နိူင်ငံကျော်အနုပညာရှင်များ challenge စိန်ခေါ်မှု checks and balances အပြန်အလှန် ထိန်းညှိမှု Chemical Weapon ဓာတုလက်နက် child soldier ကလေးစစ်သား citizen နိုင်ငံသား civil societies လူမှုအဖွဲ့အစည်းများclash of ideas အတွေးအခေါ်အယူအဆ ဆိုင်ရာ ပဋိပက္ခ clean government သန့်ရှင်းသောအစိုးရ climate change ရာသီဥတုအပြောင်းအလဲ coercion ဖိအားေ ပးပြောင်းလဲခြင်း coexistence ငြိမ်းချမ်းစွာယှဉ်တွဲ နေထိုင်ခြင်း confidence စိတ်ချယုံကြည်ခြင်း။ ယုံစားမှု Conflict of Interest အကျိုးစီးပွားတူပြဿနာ consensus အများသဘော၊ အများဆန္ဒ corruption အကျင့်ပျက်ခြစားမှု country နိုင်ငံ credibility ယုံကြည်ရမှု cronies အစိုးရနှင့်နီးစပ်သော လက်သင့်ရာစား လုပ်ငန်းရှင်များ curfew ညမထွက်ရအမိန့်dialogue စကားအချီအချ အပြန်အလှန် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း diaspora အခြားနိူင်ငံများသို့ပြန့်ကျဲထွက်ခွါသွားကာ အခြေချနေထိုင်ကြသောလူမျိုး dictatorship အာဏာရှင်စံချိန် diplomat သံတမန် disrobe လူဝတ်လဲ dogmatist တရားသေ၀ါဒသမား Domestic Policy ပြည်တွင်းမူဝါဒ double agent နှစ်ဘက်ချွန်သူလျှို Dummy View လူပြိန်းအမြင် economic crisis စီးပွားရေးပြဿနာ educated person စာတတ်ပုဂ္ဂိုလ် Electronic Transactions Law အီလက်ထရောနစ်ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ရေးဥပဒေပုဒ်မ ethics ကိုယ်ကျင့်တရား ethnic nationalities groups တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု ethnicity လူမျိုးစု feminine အမ Fiscal Cliff ဘဏ္ဍာရေး ချောက်ကမ်းပါး - (1) tax increases အခွန်တိုး၊ (2) spending cuts သုံးစွဲငွေဖြတ်၊ (3) reduction in the budget deficit လျော့ရသုံးငွေစာရင်းလျှော့ Force Majeure မလွန်ဆန်နိူင်သော အဖြစ် forced labor အဓမ္မလုပ်အားပေး Foreign Currency Account နိူင်ငံခြားငွေစာရင်း Foreign Policy ပြည်ပမူဝါဒframework ဘောင်။ ကန့်သတ်ချက် framework of society လူမှုအဆောက်အအုံ Freedom is not free. လွတ်မြောက်မူ့ ဆိုတာ အလကားမရပါ။ Freedom of expression လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုရေးသားခွင့် future အနာဂါတ် General Amnesty အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် genocide လူမျိုးစုသုတ်သင်ရှင်းလင်းရေး genuine national reconciliation စစ်မှန်သောအမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး give and take အပေးအယူ goal ရည်မှန်းချက်၊ ဦးတည်ချက်ပန်းတိုင် good governance ကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးစနစ် grass root အောက်ခြေလူထု harmony သင့်သင့်မြတ်မြတ်နေထိုင်ခြင်း healthcare ကျမ္မာရေးစောင့်ရှောက်မှု Health Insurance ကျန်းမာရေးအာမခံ health systems ကျန်းမာရေးစနစ်များ healthy skepticism အကျိုးရှိမယ့် သံသယ heritage သမိုင်းဝင်အမွေအနှစ် hero worship ပုဂ္ဂိုလ်ကိုးကွယ်မှု horizontal model အလျားလိုက်ပုံသဏ္ဍန် Human Resources လူသားအရင်းအမြစ် Human Rights လူ့အခွင့်အရေး hypothesis မှန်းဆတွေးကြည့်မှု I don't care. ငါဂရုမစိုက်ဘူး။ imposters အရေခြုံအယောင်ဆောင်များ information (info) သတင်းအချက်အလက် infringement ထိပါးမှု၊ ချိုးဖောက်မှု၊ နစ်နာမှု initial dialogue ရှေ့ဦးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး integrity အပြောအလုပ် ရှေ့နောက်ညီညာ တည်ကြည်ခြင်း၊ ရိုးသားဖြောင့်မတ်မှု၊ သမာဓိ interest အကျိုးစီးပွားရေး Internal Displaced Person (IDP) ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည် International support ကမ္ဘာ့နိူင်ငံများ၏ထောက်ခံမှု issue ကိစ္စ liars မလိမ့်တပတ်နှင့်လိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသူများ Law and Order တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး liberalism အလယ်အလတ်လမ်းစဉ်mainstream politics ပင်မနိူင်ငံရေးလမ်းကြောင်း majority rule အများအုပ်ချုပ်မှု marginalization ဘေးဖယ်ချောင် ထိုးထားခြင်း martial law စစ်ဥပဒေ masculine အထီး medical leave ဆေးခွင့် Memorandum of Understanding (MoU) နားလည်မှုစာချွန်လွှာ military dictator စစ်အာဏာရှင် mindset စိတ်အယူအဆ most-wanted list ထိပ်တန်းမှ အလိုအရှိဆုံး လူစာရင်း Nationalism အမျိုးသားရေးဝါဒ nationality လူမျိုး negative အနုတ်လက္ခဏာ၊ အကျိုးမဲ့လက္ခဏာ netizen အင်တာနက်အသုံးပြုသူ Non-Government Organization (NGO) အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်း Nepotism မိမိနှင့်အလွမ်းသင့်သူများကို အသာရအကျိုးခံစားစေခြင်း norm စံချိန်စံညွန်း oath ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆိုobservation စောင့်ကြည့်ခြင်း။ လေ့လာခြင်း။ အကဲခတ်ခြင်း opportunists အခွင့်အရေးသမားများ opposition အတိုက်အခံ outcome ရလဒ် overseas ပင်လယ်ရပ်ခြား own experience ကိုယ်တွေ့ particular program အတိအကျ အစီအစဉ် particular proposal အတိအကျ အဆိုတင်သွင်းမှု peace ငြိမ်းချမ်းရေး Penal Code ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံးဥပဒေ people power ပြည်သူ့အင်အား people voice ပြည်သူ့အသံ performance ဆောင်ရွက်မှု plagiarism တခြားသူတဦး၏ အရေးအသား၊ အတွေးအခေါ်၊ အယူအဆ တို့ကိုမိမိကိုယ်တိုင်အလား ရေးသားခြင်း plot လျှို့ဝှက်ကြံစည်မှု policy မူဝါဒ political defiance နိူင်ငံရေးဖီဆန်ဆန့်ကျင်မှု Political Diplomacy နိူင်ငံရေး သံခင်းတမန်ခင်း Political Doctrine နိူင်ငံရေးအယူဝါဒ political image နိူင်ငံရေးဥပဓိရုပ် political legacy နိူင်ငံရေးအမွေ political research နိူင်ငံရေးသုတေသန political space နိူင်ငံရေးနယ်ပယ် politician နိူင်ငံရေးသမား positive အပေါင်းလက္ခဏာ၊ အကျိုးပြုလက္ခဏာ postpone ရွှေ့ဆိုင်း potential enemy နောင်အနာဂတ်မှာ ရန်သူဖြစ်လာဖို့ အလားအလာ power sharing အာဏာဖြန့်ဝေမှု pragmatic leader လက်တွေ့ကျသောခေါင်းဆောင် President သမတ press conference သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ Prime Minister ဝန်ကြီးချုပ် principle မူ problem ပြဿနာ procedure လုပ်ထုံးလုပ်နည်း professional အတတ်ပညာရှင် propaganda ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ လိမ်ညာ ၍အမှန်ဖြစ်ကြောင်းဝါဒဖြန့်မှု public opinion ပြည်သူလူထု ထင်မြင်ယူဆချက် public relations ပြည်သူ့ ဆက်ဆံရေး recession စီးပွားရေးကျဆင်းမှု reckless optimism အရမ်းကာရော မျက်စိစုံမှိတ်ပြီးတော့ အကောင်းမြင်နေကြခြင်း recognize အသိအမှတ်ပြု reject လက်မခံပယ်ချ replace အစားထိုး resolution ဆုံးဖြတ်ချက် resource curse သယံဇာတကျိန်စာ respect the constitution အခြေခံဥပဒေကို လေးစားလိုက်နာပါမည် responsibilities ၀တ္တရားများ Right to Rule အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့် Rights of Revolution တော်လှန်ပုန်ကန်ခွင့်ရှိသည် Rule of Law ဥပဒေစိုးမိုးရေး safeguard the constitution အခြေခံဥပဒေကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ပါမည် sanction ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု second thought ဒုတိယအတွေး Separation of Powers အာဏာပိုင်းခြားသတ်မှတ်မှု sine qua non အခြေခံသဘောသဘာဝ လိုအပ်သော အခြေအနေ social လူမှုရေး social network လူမှုရေးကွန်ယက် Social Science လူမှုသိပံ္ပ social security လူမှုဖူလုံရေး source ရင်းမြစ် stakeholder အစုရှယ်ရာပါဝင်သူ stalemate မဆုတ်သာ မတိုးသာသော အခြေအနေ status quo ဗိုလ်နေမြဲ ကျားနေမြဲ stock market အစုရှယ်ရာဈေးကွက် strategic outlook မဟာဗျူဟာအမြင် Supreme Court ဗဟိုတရားရုံးချုပ် suspend ရပ်စဲ sustainable development ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေး swearing-in ceremony ကျမ်းသစ္စာကျိ်န်ဆိုပွဲ sycophant ခေါင်းဆောင်ကိုကပ်ပြီးစားနေသောအသိုင်းအ၀န်း technical matter လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာကိစ္စ technocrat တတ်သိပညာရှင် tension တင်းမာမှု terrorist အကြမ်းဖက်သမား Think Tank သုခမိန် အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များအဖွဲ့၊ ဉာဏ်ကြီးရှင်အဖွဲ့ Tort တရားမ နစ်နာမှုဥပဒေ Totalitarianism အားလုံးချုပ်ကိုင် တပါတီ အာဏာရှင်ဝါဒ torture ညှဉ်းပန်း နှိပ်စက် tranquility တည်ငြိမ်မှု transparency ပွင့်လင်းမြင်သာမှုtrust ယုံကြည်မှု။ စိတ်ချခြင်း။ အားကိုးခြင်း။ ဂေါပကအဖွဲ့ tyrant မင်းဆိုးမင်းညစ် uneducated အသိပညာမဲ့ unity သွေးစည်းညီညွတ်မှု၊ တစုတစည်းညီညွှတ်ခြင်း Unlawful Association Act မတရားအသင်းအက်ဥပဒေ Utopia လူ့ဘ၀နိဗ္ဗာန် U-turn ဂကွေ့ value တန်ဖိုး၊ ရောက်ချင်တဲ့ပန်းတိုင် vertical model အပေါ်အောက်ပုံသဏ္ဍန် vibrant အားမာန်အပြည့် Visa ပြည်ဝင်ခွင့် waive လျှော်ပစ် welcome ကြိုဆို will ဆန္ဒ workshop အလုပ်ရုံသင်တန်းပေး ဆွေးနွေးပွဲ
Analysts and investors, however, warned that Burmese needs to offer more transparent rules for business and to inform its corruption-tainted judicial system to attract more foreign investment. Citizens everywhere are an integral part of the checks and balances that keep their government open and honest. In short, this is the same argument we have had many times with nothing new to say. But surely inahealthy democracy people can agree to disagree. It is the duty of the State to protect freedom of expression. Journalism is stillavibrant force asawatchdog for the public. Judicial Watch calls itself “a conservative, nonpartisan educational foundation promoting transparency, accountability and integrity in government, politics and the law." Right to dissent and tolerance of dissent are sine qua non ofaliberal democratic society. The governmental decisions are made by applying known legal principles. Rule of Law is the principle that no one is above the law. There is no permanent enemy in diplomacy. There are widespread reports of Buddhist monks and nuns who were released from prison during the recent amnesty and have disrobed, while others stay with relatives due to the unwelcoming nature of monasteries. “We can change this, but only if we change the people we send to Parliament,” the ad states.
အုတ်တချပ်သဲတပွင့်အနေနဲ့ ကလောင်လက်နက်ဖြင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးတိုက်ဖျက်အံ့ သင်ဆရာ မြင်ဆရာ ကြားဆရာ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်လျှက် ကည ၁၂ ဧပြီ ၂၀၁၂
ကိုကိုကြီး - ၈၈၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် နိူင်ငံရေးဗျူဟာမှူး၊ ကိုကိုဦး - ဆလိုင်း၊ ကြည်ကြည်လွင်၊ ကျော်စွာမိုး - ဧရာဝတီသတင်း၊ ကိုထိုက်၊ ကြည်ဖြိုး - ဒေးဗစ်၊ ကျော်မိုး၊ ကျော်သူ - ပြည်သူချစ်သော အနုပညာရှင် နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ကျော်သန်း - ရဲဘော်၊ ချိုတူးဇော် - ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ၊ ခင်မောင်စိုး၊ ခင်မောင်ညွန့် - ဒီအက်စ်အေ (၁)၊ ခင်မမမျိုး၊ ခင်အောင် - စီအာဒီဘီ၊ ငြိမ်းချမ်း၊ စိန်ကျော်လှိုင်၊ စိုင်းခမ်းလိတ်၊ စန်းစန်းတင်၊ စိုးဝင်း - ဟန်ရီ၊ စိန်ဝင်း - မဇ္ဈိမသတင်း၊ စ်ိန်ဝင်း - ဂါးဒီးယန်း၊ စ်ိန်ဝင်း - လူထု၊ စိုးသင်း၊ စိုင်းသိန်းဝင်း၊ စစ်အောင် - ၈၈ကျောင်းသား၊ ဇာဂနာ - မြန်မာ့ဟာသအနုပညာရှင်၊ ဇင်လင်း၊ ဇော်ဝင်း - ၈၈ ကျောင်းသားဟောင်း၊ ဦးမျိုး - ဥပဒေ)၊ ညီညီလွင် (အရှင်ဂမ္ဘီရ)၊ ညွန့်ရွှေ - တိုကျို ဂျပန်၊ ဌေးဇော် - ဂျပန်၊ ဌေးအောင် - မြန်မာ့စစ်ရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ အန်ဒီဒီ၊ တင်ကြည်၊ တင်ဦး - အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် နာယက၊ တူမောင်ညို၊ တင်မောင်သော် - စီအာဒီဘီ၊ တာရာ - ဒဂုံ၊ ထွန်းဇံဝေ၊ ထွန်းအောင်ကျော်၊ နေဇော်နိူင်၊ နိူင်ဦးညို (ဖိုးဇီးရိုး)၊ နေတင်မြင့်၊ နှင်းပန်းအိမ် - ဆရာမ၊ နေမျိူးဇင် - အငြိမ်းစားဗိုလ်ကြီး၊ နေမျိုးဝေ၊ နေရိန်ကျော်၊ ပူးကျင်းရှန်းထန်၊ ပါပါလေး - လူရွှင်တော် ၊ ဖုန်းကျော် - အော်စီ၊ ဖိုးတရုတ်၊ ဖိုးဖြူ - ရှေ့နေ၊ ဖိုးသံချောင်း - ရဲဘော်၊ ဗညားယက္ခ၊ ဘုန်းကျော် - အော်စီ၊ ဘိက္ခုဓမ္မပိယ - ယူအက်စ်အေ၊ ဘိုဘိုကျော်ငြိမ်း၊ ဘသန်းဝင်း၊ ဘီအာပန်း - သမိုင်းဆရာ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်၊ မိုးကျော်ထွန်း၊ မန်ကျည်ဒိန်ယိန်း၊ မင်းကိုနိူင် - ၈၈၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ မြင့်ချို - ဆရာဝန်၊ မေစာ - ဆရာမ၊ မောင်စွမ်းရည် - ဆရာ၊ မောင်စိန်ဝင်း - ပုတီးကုန်း၊ မြေဇာပင်၊ မောင်ပါလ - မလေးရှား၊ မျိုးမြင့်ချို၊ မောင်မောင်လှကြိုင်၊ မာမာအေး - အဆိုတော်၊ မောင်ရစ် - မိုးမခမီဒီယာ၊ မောင်ဝံသ၊ မျိုးသိန်း၊ မြသိန်း - လူထုအော်သံ ၊ မောင်သွေးချွန်၊ မောင်သာရ - ဆရာ၊ မြသန်းတင့်၊ မသဲအူ - လှည်းတန်းဈေးသူ၊ ရဲကျော်စွာ၊ ရွှေဥဒေါင်း၊ ရွှေညဝါ ဆရာတော် ဦးပညာသီဟ၊ ရွှေထီး၊ ရော်နီညိမ်း - တပ်မှူးတပ်သား ပြောစကားကဏ္ဍ ဗီအိုအေ၊ ရဲရင့်ငယ်၊ ရဲလွင် - မဇ္ဈိမလှိုင်းတေးဂီတအဖွဲ့၊ ဦးလှ - လူထု၊ လင်းပင် - ပီတာ၊ လင်းမြတ်သော်တာ၊ လှသမိန်၊ လွင်အောင်စိုး၊ ၀ိုင်း - ဒါရိုက်တာ၊ ဝင်းခက် - ဆရာ၊ ဝင်းတင် - နိူင်ငံရေးဗိသုကာ ဟံသာဝတီ၊ ၀င်းထိန် - အငြိမ်းစားဗိုလ်ကြီး၊ ဝေမော်၊ ဝင်းလက် - မိုးမခမီဒီယာ၊ ဝင်းအောင်စိန်၊ သစ်ခက်၊ သားဆွေ၊ သိန်းဖေ - သခင်၊ သန်းဝင်း၊ သန်းဝင်းဘို၊ သန်းဝင်းလှိုင်၊ ဟန်ရင်လတ်၊ အောင်ကို - Beyond Rangoon၊ အောင်ကျော်ဇော်၊ အောင်စည် - ဘန်ကောက်၊ အောင်ဆန်းစုကြည် - အန်အယ်လ်ဒီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အောင်ဇော် - ဧရာဝတီ၊ အောင်တင် ၊ အောင်နိူင်အောင်၊ အော်ပီကျယ် - ကာတွန်း၊ အံ့ဘွယ်ကျော် - ၈၈၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်၊ အဘ ဥက္ကာကိုကို၊ အောင်မင်း - ပြည်ချစ်၊ အောင်မျိုးသိန်း၊ အရှင်ခေမာစာရ - မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရဟန်းပျိုများသမဂ္ဂ ဥက္ကဌ၊ ၊ အောင်လင်းထွဋ်၊ အောင်ဝေး၊ အောင်သာ - ပီသုံးလုံး၊ အေးသာအောင်။
Bertil Lintner, Chris Chindooroy - DSA 6A, Christopher Gunness, Eric Johnston, Josef Silverstein, Larry Jagan, Neill Staurland, Salong, Sean Turnell.
Aahara Sazaung, Agence France Presse, Ah Yae Taw Pon, Al Jazeera, Alternative ASEAN Network on Burma, All Burma Federation of Students’ Union, All Burma Students’ Democratic Front, All Burma Young Monks Union, Amnesty International, Asian Legal Resource Centre, Assistance Association of Political Prisoners-Burma, Associated Press, Bangkok Post, British Broadcasting Corporation, Burma Bulletin, Burma Campaigns, Burma Democratic Concern, Burma Digest, Burma for Democracy, Burma Lawyers’ Council, BurmaNet News, Burma Related News, Burmatoday.net, Cable News Network, Central Intelligence Agency, Chin Human Rights Organization, Chinlandguardian.com, Christian Science Monitor, Christian Solidarity Worldwide, Committee for the Restoration of Democracy in Burma, Committee Representing of People Parliament, Dictator Watch, Democracyformilitarymight.blogspot.com, Democratic Voice of Burma, Demowaiyan.com, Facebook, Freeburma.info, Freedom News Group, Human Rights Watch, Independent Mon News Agency, International Labour Organization, Irrawaddy, Jane’s Defence Weekly, Kachin Independence Organization, Kachin News Group, Kaladan News, Kantarawaddy Times, Kaowao News, Karen Human Rights Group, Karen National Union, Luminary Magazine, Mizzima, Moe Ma Ka, Myanmar News Now, ND-Burma, Narinjara News, Nation Daily Newspaper, National League for Democracy, Network for Democracy and Development, New Era, New Light of Burma, New York Times, News & Articles on Burma, News Headlines, niknayman-niknayman.co.cc, Online Burma Library, Photayokeking.blogspot.com, Radio Free Asia, Rapporteurs Sans Frontièr, Recent Burmese News, Redo8888.com, Reuters, Scribd, Shan Herald Agency for News, Shwe Gas Bulletin, Shwe Khamauk Bulletin, Shwenanda.com, Time, Uncensored Burma Daily News, United Press International, Voice, Voice of America, Vigorous Burmese Student Warriors, Washington Post, Wikipedia, Xinhua.